shwezinu: November 2012
မသီတာ (စမ်းချောင်း) ၏ စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဗတ် အပိုင်း (၁)
စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဗတ်
၁။ မသီတာက သူ့“ဘာလဲဟဲ့ လူ ငရဲ” စာမူ တစ်ထွေးတစ်ပိုက်ကြီးလာပေးသွားတယ်။ စကားလေးဘာ လေး ၀င်ပြောပါအုံး ဆရာတဲ့။ သူ့စာအုပ်အမည်က “စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဗတ်”ပါ။ ဘာလဲဟဲ့ လူငရဲဆို တာက ကျွန်တော် ရဲ့ ထောင်ပြန်မှတ်တမ်းစာအုပ်နာမည်ပါ။
သူ့စာအုပ် ကျွန်တော်စာအုပ် သဘောသရုပ် က ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်လို့ သူ့စာမူကို “သူ့ဘာလဲဟဲ့ လူငရဲ”လို့ တင် စား လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စာအုပ်ကိုတော့ “စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဗတ်”လို့ ပြောမရနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် စမ်းချောင်း မှာ နေခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၄၈-၄၉ လောက်က လှည်းကူး စာဘူးတောင်းတိုက်ပွဲမှာ ကျသွား ခဲ့တဲ့ မောင်မောင်မြင့် တို့နေတဲ့လမ်းမှာ။ လမ်းနာမည် မေ့နေပြီ။
ကျွန်တော် အင်းစိန် မှာ နေခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၈၉-၂၀၀၈ လောက်က လူ့ငရဲကို ကျွန်တော် တံဆိပ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ အင်းစိန်ထောင် မှာ (နွားသတ်ရုံပို့မယ့် နွားအို၊ နွားပိန်ကို သံပူတံဆိပ်ရိုက်သလိုမျိုးပေါ့)။
ဟားဗတ် ကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကံမဆုံပါဘူး။ ဟားဗတ်ပြန် သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းရတုန်း။ ဦးဝင်းကြည် (မြင်းခြံ) တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေကြီး။ ၁၉၅၀ လောက်က စာကေဗိမ္မာန်မဂ္ဂဇင်းမှာ အယ်ဒီတာလုပ်တယ်။ အခုတော့ ကွယ်လွန်ရှာပါပြီ။ ဦးညွန့်ဝေ (အစိုးရစီးပွားရေးပညာရှင်ကြီး ၁၉၈၈ လောက်ကတည်းက ဒီနေ့ အထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်။ မသေရှာသေးဘူး။
ကျွန်တော် စာအုပ်နာမည်ကို မသီတာစာအုပ်မှာ ပုံနှိပ်။ သူ့စာအုပ်နာမည်ကို ကျွန်တော့်စာအုပ်မှာ ပုံနှိပ်။ ရတာ ပါပဲ။ ကျွန်တော့် စာအုပ်ကလည်း ထောင်အကြောင်း၊ သူ့စာအုပ်ကလည်း ထောင်အကြောင်း၊ ကောင်း တာချင်း တူနိုင်တော့ အမည်ချင်းပြောင်းလဲ ကိစ္စမရှိ။
ကိစ္စမရှိတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိစ္စရှိတယ်။ သူ့စာအုပ်က ပိုကောင်းနေတာကိး။ အကောင်းပေါ် အကောင်းဆင့် တယ် ဆိုပြီး တဆင့်စကား အလကားမူးတင်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့်စာအုပ် က သတင်းစာကလောင်နဲ့ရေးတယ်။ အဖြစ်ကို ရေးတာ။ သနစ်ကိုရေးတာ။ ထောင်ဆိုတာ ငရဲဟေ့ လို့ ပြောပြတာ။ ထောင်ဆိုတာ ကျောင်းဟေ့လို့ ပြောပြတာ။ ရသဆွံ့ရှားတယ်။ ခံစားချက်များတယ်။
မသီတာစာအုပ် က စာပေကလောင်နဲ့ရေးတယ်။ ဝေဒနာကိုရေးတာ။ စေတနာကိုရေးတာ။ “ထောင်ဆိုတာ စိတ်ခံယူချက်ရှင့်” လို့ ပြောပြတာ။ “ထောင်ဆိတာ ရုပ်ခံစားချက်ရှင့်”လို့ ပြောပြတာ။ ရသပြည့်လျှံတယ်။ ခံစားချက်ဗောင်းလံ တယ်။
၂။ သူ့စာအုပ်တစ်နေရာမှာ မသီတာက သူဝတ်ပုံစားပုံ ပြောင်းရပြင်ရပုံ ပြောဟန်ဆိုဟန် ပြင်ရဟန် ပြောင်းရ ဟန်တွေ ကို ပြောပြတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းက သူစကားပြောရင် “ကျွန်ုပ်”ကို ထည့်ခဲ့ တယ်။ ထောင်ထဲရောက် တော့ “ကျွန်တော်”တောင် မသုံးတော့ဘူး။ “ကျွန်မ”လို့ ပြင်ယူတယ်။ ယောက်ျားလျာ ထင်မှာစိုး လို့တဲ့။
ကျွန်တော် မှတ်မိတာကတမျိုး။ ၁၉၈၈ ကုန်ပိုင်းတစ်နေ့ မသီတာတို့ ကျွန်တော့်စားပွဲ ကို ရောက်လာ တယ်။ ပြောလိုက်တာ။ အကျွန်ုပ်၊ အကျွန်ုပ်တွေ ထပ်ခါထပ်ခါ။ အပီယ၀ါစာတွေ မိုးလုံးပြည့်။ ကျွန်တော် လန့် သွားတယ်။ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း နဲ့ စကားပြောနေရသလား ထင်မိတယ်။
အဲဒီအချိန်က မသီတာ စာရေးဆရာဖြစ်နေပြီ။ ဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ လုပ် အားပြည့်လာပေးနေ တာ။ သူ့ဝတ္ထုတို၊ ရှည် ၆၀ ကျော ပုံနှိပ်ပြီးနေပြီ။
ဒီချုပ် ခေတ်ဦးပိုင်း ပျော်စရာအချိန်တွေအကြောင်း ဖတ်ရတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ မကျန်တော့ တဲ့ ဒေါ်စု ခရီးစဉ်တွေ အကြောင်း ခေတ်ရနံ့ သင်းသင်းဖတ်ရတယ်။ ၁၉၈၉ ဒီချုပ် သင်္ကြန်အကြောင်း တူးပို့တူးပို့ သံငြိမ့်ငြိမ့် ဖတ်ရတယ်။
မသီတာ မာတယ်၊ စွာတယ်၊ နွှာတယ်။ ဒီအချိန်က ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ မောင်မိုးသူ နဲ့ တကျက်ကျက်၊ ၀င်းခက်နှင့် တစောင်စောင်။ သူ့အပြောအဆိုအမူအရာတွေက “ဂျမ်းတောဂျစ်တိုက်”။ ထောင်ဘ၀ဆိုတာ လွယ်လွယ် နဲ့မရ။ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲတမျိုးဖြစ်တဲ့ တုတ်ထောက်ခုန်ပြိုင်ပွဲလိုပဲ။ အဝေးကြီး ကပြေးလာပြီး ဖွဲကျင်းကြီး အနားရောက်တော့ ထောက်လှမ်းခုန်ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကျင်းကြီးထဲမကျခင် လွန့်ခုန် ရတယ်။ တောက်လျှောက်ပြေးတယ်၊ ခုန်တယ်။ ကျင်းထဲရောက်ပြန်တေ့ ကောင်းကောင်းမကျ ပက်လက်ဖင်ထိုင် ကျတယ်။ အခွင့်မသင့်ရင် ကိုယ့်ခြေထောက်ကျတာက တစ်နေရာ၊ ကိုယ့်တင်ပါးကျတာ ကတခြား။ ဒီလိုနဲ့ နေ့၊ ရက်၊ လ၊ နှစ် အမှတ်အသားတွေ လွဲ ကုန်တယ်။ ရဲဘော်ရဲဘက် အသိစိတ်တွေ ကွဲကုန်တယ်။
မသီတာက ထောင်ထမြ၀င်ခင် အခန်းတွေမှာရော၊ ထောင်ထဲရောက်တဲ့ အခန်းတွေမှာရော၊ ထောင်သတင်း ပုလင်းတွေ၊ အာဏာရှင်အစိုးရသတင်းပုလင်းတွေ စုံတကာစေ့နေအောင် ရေးထားတယ်။ စပ်စပ်စုစု သုတေသနစိတ် ကလေးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ မရ၊ ရတာချွေ(ယတြာချေမဟုတ်) စိတ်ဓာတ် ကြောင့် လည်း ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာ့သတင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ သတင်းတွေ၊ အာဏာရှင် ရပ်ကွက် သတင်းတွေ ကျောထောက်နောက်ခံထား ရေးခြယ်ပြသွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော် သတင်းတွေကို ဖတ်ရတာ လှလိုက်တာ။ ပေါင်မုန့်ညိုမာကြားမှာ အဆီတစ်ထပ်၊ အသားတစ်ထပ်၊ အရွက် တစ်ထပ်၊ ဒိန်ချဉ် တစ်ထပ်၊ အစီအရီ ထပ်ပြီး အားရပါးရ ဟပ်ရသလို အရသာရှိတယ်။
၃။ ကျွန်တော် အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ နှစ် ၂၀ နေခဲ့တယ်။ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ လွတ်တယ်။ ထောင်သက် တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်တည်း တိုက်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် ကို ချော့ တယ်။ နိုးနိုး နိုးပဲ။ ချောက်တယ် နိုးနိုးနိုးပဲ။ ခံဝန်ချက်ထိုးခိုင်းတယ်။ နိုးနိုးနိုးပဲ။ ၂၀၀၅ မှာ လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လူတွေ အများကြီးနဲ့အတူ ထောင်ဘူးဝ ထုတ်ထားတယ်။ ထောင်ဘူးကျမှ တိုက်ထဲပြန်ပိတ်တယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ နိုးနိုးနိုးပဲ။
ကျွန်တော် ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ ညနေ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့တယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး တစ်ပြည်လုံး ထောင် ကျနေ တယ်။ ထောင်ထဲက လူတွေရော၊ ထောင်ပြင်ကလူတွေပါ အားလုံး အားလုံး အကုန်လုံး လွှတ်ပေးမှ ကိစ္စပြတ် မယ်။ မဟုတ်ရင် လွတ်/တောင်းသံတွေ တစ်ပြည်လုံးညံနေဦးမှပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒီလို မြန်မာ၊ ကမ္ဘာ တစ်ပြည်လုံးကြားအောင် ဟစ်ခဲ့တယ်။
မသီတာ ကလည်း ဒီစာအုပ်မှာ ကျွန်တော့်အသံနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ဟစ်ခဲ့တယ်။ ထောက်လှမ်းရေးက မသီ တာကို လာတွေ့တယ်။ ရန်စွယ်ငေါငေါပြောတယ်။ “အရေးကြီးတယ် ထင်တဲ့နေရာတွေ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီသွား ရင် အကြောင်းကြားပါ” ပြောတယ်။
မသီတာက ထောက်လှမ်းရေးကို ပညာပေးလိုက်တယ်။ သူထောင်ထဲမှာ တုန်းကလည်း ထောက်လှမ်းရေး ကို တော်ချာ (ညှဉ်းပမ်းမှု)ပြန်ပေးခဲ့တယ်။
သူ့စာအုပ် နိဂုံးပိုင်းမှာ မသီတာက “အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော်လည်း ပိုပြီး ကျယ်ဝန်းသည့် “မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်” ထဲမှ မထွက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ရပြန်ပါသည်”လို့ ရေးထားတယ်။
အကျဉ်းထောင် ပရ၀ဏ်တွေကို ကျဉ်းအောင်၊ မြောင်းအောင်၊ သေးအောင်၊ ငယ်အောင် ချုံ့ပစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိမ်တို့ကြ ရပါတယ်။
မသီတာ ရဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ “ကြိမ်တစ်တို့”ဖြစ်ပါတယ်။ မသီတာလို နိုင်ကျဉ်းဟောင်း၊ ကလောင်အပေါင်းတို့ “ကြိမ်တို့” တွေ ပြောင်ပြောင်လက်လက် မွေးထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဗတ် စသည် ... စသည်ဖြင့် ...
၁၉၈၀ ခုနှစ်လွန်ကာလများမှာပါ။ စားပွဲရှေ့မှာ ရိပ်ခနဲ အဖြူအစိမ်းတစ်စုံတွေ့လို့ မော့ကြည့်တော့။ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး တစ်ယောက် တွေ့တယ်။ မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိချိန်မှာပဲ” ဇာနည့် ဆရာမပါ” လို့ ပြောသံ တိုးတိုးကြားလိုက်တယ်။ ဇာနည်ဆို တာ ကျွန်တော့်သား ဇာနည်မျိုးမြင့်ညိမ်းပါ။ သားရဲ့ ဆရာမ ဆိုမှ သူ့ကို မှတ်မိတယ်။ ပုဇွန်တောင် အေးတံတားနားက ကျူရှင်မှာ သားကို သွားကြိုတဲ့ အခါတွေ့နေကျ ကျူရှင်ကြိုချိန် နောက်ကျနေရင် သားကိုထိန်းရင်း ၀ရန်တာကနေ စောင့်မျှော်နေကျ သားဘေး က ဆရာမ။
သားက သူငယ်တန်း ပဲ ရှိသေးတာမို့ မိဘဆီအထိ ဆရာမလိုက်လာပြီး တိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိ။ ဒါောကာင့် ဘာများ လည်း စမ်းစစ်ကြည့်တော့ ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းကို စာမူလာပို့တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ကာလမှာ အဲဒီ အရွယ် စာရေးသူတစ်ောက် မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကို စာမူလာပို့တာ သူပထမဆုံးပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါ တယ်။ အဲဒီကာလတွေ မှာ တခြားမဂ္ဂဇင်းတွေကိုလည်း စာမူလာပို့တဲ့ကလေး လို့ ထင်ကြတယ်ဆိုတာ နောင် ခင်မင်ရင်းနှီး လို့ စကားစပ် တိုင်း ပြောရင်း ရယ်ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်က ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းပါ။ ပေဖူးလွှာနဲ့အပြိုင် မဟေသီ၊ ချယ်ရီ၊ ရှုမ၀၊ စစ်ပြန် ... အစရှိသည်။
သူ့စာမူတွေ ဖတ်ကြည့်တော့ သူရေးဟန်ထူးခြားနေတာတွေ့ရတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်ဟာ စိတ် အလျဉ် ၀တ္ထုတွေ ခေတ်စားပါတယ်။ Stream of Conciousness လို့ ဒီဝတ္ထုတွေကို ဆိုကြတယ်။ မန္တလေး က စာရေးဆရာတွေ အုံ နဲ့ ကျင်းနဲ့တွင်ကျယ်လာတဲ့အချိန်ပါ။ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ တစ်ခေတ် ဆန်းချိန်လို့ ဆိုရပါမယ်။ သူရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေကို ဖတ်တော့ အတွေးဝတ္ထု၊ အတွေ့ဝတ္ထု၊ အတွေးထဲက အတွေ့ဝတ္ထု၊ အတွေ့ထဲက အတွေးဝတ္ထု၊ အတွေးထဲက အတွေးဝတ္ထု၊ အတွေ့ထဲက အတွေ့ဝတ္ထုဆိုတာ တွေတွေ့ရတယ်။ ထူးခြားတာက သူများမမြင်တဲ့အမြင်မျိုး သူ့မှာရှိတယ်။ သူများမတွေးတာမျိုးသူတွေး တယ်။ သူများမတွေ့တာမျိုး သူတွေ့ တယ်။ ဒါတွေကပဲ သူ့ကို စာရေးဆရာဖြစ်စေခဲ့တာပါပဲ။
သူနေတာ စမ်းချောင်းမှာပါ။ ဆေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသူဖြစ်တယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေနေချိန် ထိ ဘောလုံးကန်တယ်။ အခုအချိန်လို အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတွေရှိရင် သူက ဆရာဝန် စာရေးဆရာ ဘောလုံးသမား ဖြစ်မယ်တင်ပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်းတွေ မှာ ၀တ္ထုကဗျာရေးသူတွေ စာမူပို့လေ့ရှိတယ်။ တစ်ပုဒ်၊ နှစ်ပုဒ်ပေးပြီး စိတ်ကုန်သွားတတ်ကြ တယ်။ တစ်ခါတရံ အဲဒီတစ်ပုဒ်၊ နှစ်ပုဒ်ထဲက အယ်ဒီတာက ကြိုက်လို့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီစာရေးသူ ကို ပြန် ဆက်သွယ် ပို့မရအောင် ခြေရာပျောက်သွားကြတယ်။ တချို့ကျတော့ တစ်ပုဒ်ပယ် ရင် နှစ်ပုဒ် ပို့တယ်။ နှစ်ပုဒ်ပယ် ရင် လေးပုဒ်ပို့တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ သူကတော့ တစ်ပုဒ်ပယ်ရင် နောက်တစ်ပုဒ် လွယ်အိတ်ထဲက ထုတ်ပေး ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတတ်တဲ့ စာရေးဆရာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်မို့လဲ စာရေးသက် ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတို ၅၀ ကျော ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးခဲ့ပါတယ်။ ကလောင်နာမည် မသီတာ (စမ်းချောင်း)ဆိုတာလည်း လူသိထင်ရှားကလောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာပေလောက အမှောင်ခေတ်ထဲမှာ ရဲရင့်စွာဖြတ်သန်းရင်း ၁၉၈၈ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးထဲမှာ သူပါဝင်လာခဲ့ ပါတယ်။ ကြွေးကြော်သံများ။ ခြိမ်းခြောက်သံများ၊ ဟစ်ကြွေးသံများ၊ သေနတ်သံများ ကြားထဲမှာ ဖြတ်သန်းရင်း လူငယ်ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ အတူ အရောင်သစ်ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒို့အရေး ဆိုတဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ သက်တမ်းမရှည်လှဘဲ လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးအပြီးမှာ ဒီမိုကရေစီ ရေးလူ့အခွင့်ရေးတွေအတွက် လှုပ်ရှားကြရတော့လည်း သူက တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာပြည် တစ်နံ တစ်လျားစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များမှာ တက်ကြွစွာ၊ ပေတေစွာ၊ ရဲရင့်စွာ အတူ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဂန္ဓီညီလာခံအပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာ ကျွန်တော် အကျဉ်းချခံရပါတယ်။ အကျဉ်းထောင် ထဲက ဘ၀တွေ အကြောင်း မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ဒီနေရာ မှာတော့ ပြောဖို့ လိုမယ် ထင်ပါ တယ်။ ထောင်ထဲေ၇ာက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်လောကလုံးကို မျက်ခြည်ပြတ် သွားရတော့ တာပါပဲ။ စာမဖတ်ရ၊ စကားမပြောရ။ သီချင်းမဆိုရ စသည်စသည်ဖြင့်။ မရခြင်းအားလုံးကို အဲဒီနေရာ မှာ ကြုံရတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကမ္ဘာ လောကကြီး ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတ မသိရတာပါပဲ။ အဲဒီအခြေအနေ ထဲက ရနိုင်သမျှနည်းလမ်းနဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ကြတယ်။ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ သိရအောင် ကြိုးစားကြ တယ်။ သတင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်လို့ သဘောထားကြတယ်။ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သူတွေ ကို ဆက်သွယ် ကြည့်တယ်။
အကူအညီပေးသူ ၀န်ထမ်း ကို မောင်းထုတ်တဲ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာ ကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ရှိပါစေ။ နောင် များတော့မလာပါနဲ့ဆိုပြီး ငါးပိကြော် တစ်ထုပ် လက်ဆောင်ပေး လိုက် သူလည်းရှိတယ်။ ရေးပေးလိုက်တဲ့ စာ ကို တုန်တုန်ယင်ယင်ဖတ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို မဖမ်းပါနဲ့ ဆိုသူလည်းရှိတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သူမပါဘူး။ ရဲရင့် စွာပဲ ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အကူအညီ နဲ့ပဲ ၁၉၉၃ ခုနှစ် သြစကြီးယား နိုင်ငံ ဗီယာနာ မှာလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးညီလာခံကို ပုံစံအင်္ကျီမှာ စာရေးပြီး ပို့ပေးနိုင် ခဲ့တယ်။ အန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတာဝန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် ထဲ သူရောက်လာတယ်။ ထောင်ဝင်စာထွက်တဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ကို အမျိုးသမီး အချုပ်ဆောင်အ၀မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စကားစောင့်နေ သလို မျိုးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက် တစ်ယောက် ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ် ရပေ မယ့် သူဟာ သူလုပ်ရမယ့် အလုပ် တွေလုပ်ရင်း အကျဉ်းထောင်ထဲ ရောက်လာတယ်လို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာမှာ ကျွန်တော် ထောင်ပြောင်းရတယ်။ သာယာဝတီကို ရောက်တယ်။ သူနဲ့ ပတ်သက် လို့ တစ်ခါတစ်ရံ သတင်းကြားရတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းကြောင်း၊ ဆေးရုံတက်ရကြောင်း၊ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရကြောင်း စသည် စသည်ဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်စရာသတင်းများသာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် မှာ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အကျဉ်းထောင်က သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်က သူလွတ်မြောက်တယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်က ကျွန်တော် လွတ်မြောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အစောင့်အကြပ် ထူပြောစွာ ချထားပါတယ်။ သွားလေရာမှာ တကောက်ကောက် လိုက်ရမယ့် သူတွေ ရှိ နေ တယ်။ လမ်းတွေ့ ရင် ကိုယ့်ကို စကားမပြောချင်ကြဘူး။ မတွေ့
တာကြာတဲ့ ဆရာသမားတွေကို အားရ ၀မ်းသာနှုတ်ဆက်ရင် ဆရာတွေက ကိုယ့်မျက်နှာ မကြည့် ဘူး။ နောက်တော်ပါးတွေ ကို တွေဝေစွာ ကြည့်နေ တယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဝေးကို ငေးနေကြတယ်။ လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ၀င်ထိုင်ရင် အလျှိုလျှိုထသွားကြတယ်။ ဘာတွေလဲ။
ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း မှာ တာဝန်ယူရတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဆီက အကူအညီယူရပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမက စာပေလောက နဲ့ ကင်းကွာသွားခဲ့ပြီး နောက် အယ်ဒိတာစားပွဲကို ပြန်ထုင်တဲ့အခါ စာပေလောကသား အသစ် တွေ ကို ကိုယ်သိမနေတာ အတော်ဆိုးပါတယ်။ သူ့စကားကိုယ်မသိ ကိုယ့်စကားသူမသိ သနားပါဘိ ဆိုတာ မျိုး ...။
ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းကို နောင်တော်တွေရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို အကူအညီတောင်းရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းကို ၂၀၀၂ အောက်တိုဘာကစပြီး အကောင် အထည်ဖော် ခဲ့ကြတယ်။ အခု ၁၀ နှစ်ရှိပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာ ပါ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရတယ်။ အိုင်အိုဝါမှာ နိုင်ငံတကာ စာရေးဆရာများနဲ့ သူရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်း ကို သူတစ်နေ့မှ အဆက်မပြတ်ခဲ့ဘူး။ Online ကနေ အယ်ဒိတာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ Brown University က ဌာနေဧည့်သည်အဖြစ် သွားရောက်တော့လည်း ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒိတာအဖြစ် online ကနေပဲ တာဝန်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီမှတစ်ဆင့် ဟားဗတ်မှာရှိတဲ့ Redcliff ကို သူရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အခု ဒီစာအုပ် ကို သူက Harvard ရှိတုန်း ရေးခဲ့တာပါ။
စာသမားများအနေနဲ့ကတော့ ထောင်ဆိုတာ ဘ၀တက္ကသိုလ်ပါပဲ။ ဒီဘ၀တက္ကသိုလ်ထဲကနေ စာရေးဆရာ တွေ ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ၀တ္ထုတွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့အထိ ဖတ်ရတုန်း မှတ်ရတုန်းပါပဲ။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေ က ဘ၀နဲ့ရင်းခံကြရတာတွေချည်းပါပဲ။ ချိုမြိန်တဲ့အတွေ့အကြုံများတော့ မဟုတ်ပါ။
မသီတာက သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးတယ်။ ခါးသီးလှတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သူနဲ့ မလှမ်းမကမ်း မှာ ရှိနေပေမယ့် သူဘာဖြစ်နေမှန်းမသိရါ။ ၈ ပေ၊ ၁၀ ပေအခန်းထဲမှာ နေကြရတာချည်းပေမယ့် အားလုံး ကိုယ့် အသက်ကိုယ်မွေးကြရတာတွေချည်းပါပဲ။ အားလုံးကောင်းပါတယ် ဆရာကြီးလို့ အော်နေတဲ့ ဘာယာညစောင့် ရဲ့ ဘေးမှာ မနက်မိုးလင်းတော့ သေနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေရှိတယ်။ ဘာယာ ညစောင့်ကတော့ ၁၅ မိနစ်တစ်ကြမ် အားလုံးကောင်းကြောင်း သတင်းပို့ ရတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ် တဲ့ မသီတာ၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မသီတာ၊ ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ မသီတာ၊ လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ မသီတာ၊ လွတ်လပ်စွာ ရေး သားပြောဆိုခွင့်တောင်းဆိုတဲ့ မသီတာ စသည် စသည်ဖြင့် မသီတာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍများ အဲဒီအကျဉ်းထောင်မှာ မှတ်ကျောက်တင်တာပါပဲ။
မြန်မာနိင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရာပါမူလအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံး တယ်။ ပါးစပ် ရှိပါလျက် ပြောခွင့်မရှိဘူး။ လက်ရှိပါလျက် ရေးခွင့်မရှိဘူး။ ခေါင်းဆိုတာ ငြိမ့်လို့ရတာတစ်ခု တည်း မဟုတ်ဘူး။ ခါရမ်းချင် လည်း ခါရမ်းခွင့်ရှိတယ်။ ငြင်းဆိုချင်ရင် ငြင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက် ရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။
ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်။ သူ့ကျန်းမာရေးကို သူတာဝန်ယူခွင့်မရှိ ဘူး။ သူ့အသက် ကို သူကယ်တင်ခွင့်မရှိဘူး။ သူ့ကျန်းမာရေးကို သူစောင့်ရှောက်ရခွင့်မရှိဘူး။
မသီတာ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာတဲ့အခါ သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သူသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အကျဉ်းသားဖြစ် တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ကျဆရာဝန်ရဲ့ လွဲမှားတဲ့ ကုသမှုကိုခံရတယ်။ လွဲမှားနေကြောင်း ပြောတော့ ပညာသည်ချင်းပြောတာမဟုတ်တော့။ အကျဉ်းသားနဲ့ အရာရှိဆိုတဲ့ အနေ အထား နဲ့ ပြောရပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အခံစားရဆုံး၊ အစာနာနိုင်ဆုံးက အင်းစိန်ဆေးရုံကို မသီတာ သွားရောက်ရတဲ့ အချိန်ပါ။ သူ့ကို တွေ့တော့ ဆရာဝန်မှန်းသိနေတဲ့ သူနာပြုတွေက ရယ်မောရင်း ဂွတ်မောနင်းဒေါက်တာ လို့ နှုတ်ဆက်တယ်။ သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ ဆေးရုံမှ ခွဲခွာခဲ့ရပြီး ၂ နှစ်ကျော် အကြာမှာ အဲဒီဂွတ်မောနင်းဒေါက်တာဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံကို ကြားခွင့်ရတယ်။ ဒါကို သူက ဒီလိုရေးဖွဲ့ တယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ တော်တော်စောစောတည်းက နိုးနေဖြစ်သည်။ ထောင်မှာ မနက် ၅ နာရီတန်းဖွင့် အမီ ထနေကျ မို့လည်းဖြစ်မည်။ သည်တော့ ရဲမေတွေ အဖော်လုပ်ပြီး အပေါ့အပါးသွား၊ မျက်နှာသစ်ဖို့ စီစဉ် ၇သည်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံ များ၏ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးရုံဆောင် အိမ်သာရေချိုးခန်းတွေမှာ ဟောင်းအိုနေသည် တိုင် ပိုးသတ်ဆေးရည်နံ့ တကြိုင်ကြိုင်နှင့်ရှိလှသည်။ လမ်းမှာ လူနအမျိုးသမီးအချို့နှင့် ဆုံတော့ အသိ အမှတ်ပြုသည့် သဘော။ ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းသည့်သဘော၊ နေကောင်းအောင်နေဖို့ အားပေးသည့် သဘောမျိုးဖြင့် ၀ိုင်းကြည့်ကြကာ ပြုံးပြကြသည်။ လက်မထောင်ပြကြသည်။ လက်မထောင်ပြကြသည်။ ထဘီအပြာဝတ် သူနာပြုလေး နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်က ဖြတ်သွားရင်း “ဂွတ်မောနင်း”ဟု လှမ်းနငတ် ဆက်ခံလိုက်ရချိန် မှာတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးလေထဲမှာ လွင့်တက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ နားထဲမှာ “ဂွတ်မောနင်း” ဆိုသည့် အသံက အဆက်မပြတ်ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။
မူဆလင်ဆေးရုမှာ တာဝန်ထမ်းစဉ်တစ်လျှောက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြား နေကျ သူနာပြုများနှင့် ဆရာဝန်များအချင်းချင်းကြား “ဂွတ်မောနင်း” နှုတ်ဆက်ခံကို ကြားခွင့်မရတော့ သည်မှာ နှစ်နှစ်ပြည့်လုလုတွင် သည်လို အရှင်လတ်လတ်နှင့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အားရှိပါးရှိကြီး ပြန် ကြား လိုက် ရခြင်းလောက် မည်သည့်အရာကမှ မင်္ဂလာကျက်သရေမရှိနိုင်တော့သလို ၀မ်းနည်းလွမ်းဆွတ် စရာလည်း မကောင်းတော့ပါ။ လွတ်လပ်သော နေ့ရက်များ၏ “ဂွတ်မောနင်း” အရသာကို ကျွန်မက အင်းစိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၏ အိမ်သာတွေကြားမှာ တစ်ဖန်ပြန်လည်ခံစားလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်မ နှုတ်ဖျားမှ ပီသချိုမြအားရှိလှစွာ “ဂွတ်မောနင်း”ဟု အငမ်းမရ တုံ့ပြန်လိုက်ရချိန် မှာ နောက်ထပ်သူနာ ပြုတစ်ယောက်က “ဂွတ်မောနင်း ဒေါက်တာ”ဟု တုံ့ပြန်လေရာ မျက်ရည်တွေ ၀ဲတက်လာသည် ထိ ပီတိ နှင့် အလွမ်း၏ အစွမ်းသတ္တိကို ပက်ပက်စက်စက် ခံစားလိုက်ရပြန် သည်။ နောက်ထပ် သေချာသွားသည်က ထိုကဲ့သို့ “ဂါတ်မောနင်း”ဟု တုံ့ပြန်လိုက်သော ကျွန်မသည် အင်းစိန်ထောင် ခြောက်ဆောင်အချုပ်တိုက် အခန်းနံပါတ် ၃ မှာ ရှိနေသည့် ကျွန်မ မဟုတ်တော့ခြင်းပင်။ မူဆလင်ဆေးရုံမှာ တုန်းကလို လေသံမျိုးဖြင့် အခုအခံမဲ့ “ဂွတ်မောနင်း”ကို တွန်းလှန်စိတ်မဲ့ သီးကျူးရေရွတ်လိုက်နိုင်သော ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလည်း အံ့သြနေမိသည်။
လူတိုင်းဟာ လွတ်လပ်မှုကို လိုချင်ကြတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အရသာကို မလွတ်လပ်တော့တဲ့အချိန်မှာမှ သိပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ။ မလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ခါးသီးမှုများ ကို လွတ်လပ်ချိန်မှာပိုပြီး သိပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို သူရေးဖို့ အချိန်ကာလ ၇ နှစ်မျှ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ၇ နှစ်လုံး သူ့ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ကြိတ် မှိတ် ခံစားရတာပါ။ ဒါတွေကို သူက ဘယ်သူကိုမှမပြောပဲ ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားခဲ့တာပါ။
၂၀၀၅ ခုနှစ် သူပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ရပြီးတဲ့နောက် ဟားဗတ်မှာရှိတဲ့ Redcliff Institure မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အချိန်ကျမှ သူ့ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေကို ထုတ်အန်လိုက်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ သူပြောသမျှအားလုံးဟာ အကျဉ်း သားတစ်ယောက်ချင်း စီရဲ့ ခံစားမှုများကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ သူ့လိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်အသီး သီးမှာ ရှိနေတဲ့၊ ရှိနေခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသားအားလုံးခံစားတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပါပဲ။
ဒါတွေကို ဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း)က သူ့ရဲ့ ကလောင်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်လိုက်တာဟာ စမ်းချောင်း၊ အင်းစိန်၊ ဟားဇတ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။
၁၉၈၇ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ။ မြန်မာနိုင်ငံကို Oxford က မြန်မာစာ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ခင် ချောခေါ် Mrs Anna Ellot ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမကြီး က မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုလုပ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပေဖူးလွှာ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းခဲ့ ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အင်းစိန်က စာပေဟောပြောပွဲ မှာ ဟောပြောပွဲ အပြီး မြန်မာစာရေးဆရာများနဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ချောတွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီ ဆရာ ဆရာမတွေ ထဲမှာ မသီတာလည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ရတယ်။ နောက်တစ် နေ့မှာ မသီတာ ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီလို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း၊ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းများကို ဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါ။ သူက Low Profile နေလိုသူသာဖြစ်ကြောင်း အကျယ် တ၀င့် ရှင်းပြပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကို တစ်ခွန်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ “မသီတာ မင်းကို မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်အဖြစ် ငါမျှော်လင့်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းကို ကမ္ဘာ့စာပေစင်မြင့်မှာပါ အောင်မြင်တဲ့ စာရေး ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ငါမျှော်မှန်းတယ်”ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့် စကားကို သူ ဘယ်လိုခံစားတယ် ကျွန်တော် မသိပါ။ ဒါပေမယ့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော် ကြာပြီးတဲ့အခါ သူဟာ ကမ္ဘာ့စာပေစင်မြင့်များမှာ၊ စာပေပွဲတော်များမှာ၊ စာပေ စကားဝိုင်း များမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားလိုက်ပါပြီ။
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူတယ်။ ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ မသီတာ။
သရုပ်မှန်၊ သရုပ်သကန် အတင်းအဖျင်းနဲ့ကြော်ငြာ
မသီတာ(စမ်းချောင်း)က သူဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံစာအုပ်အတွက် အမှာစာရေးပေးဖို့ လျှောက်ထား စာနဲ့အတူ စာမူကြီးကိုပေးပို့လာပါတယ်။ သာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဓမ္မစာပေရေးသားနေတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါး နဲ့ နိုင်ငံရေးမကင်းတဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံဆိုတာ ဘာမှ မဆီဆိုင်၊ မပတ်သက်လှ ဘူးလို့ထင်ရပေ မယ့် ထောင်တွင်းမှာ အကျဉ်းချခံနေရသူတစ်သီးက တစ်နေ့မှ နာရီ(၂၀)ခန့်လောက် ၀ိပဿ နာတရား ကို အားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တွေ့ရတော့ ကိုယ်နဲ့ဆီဆိုင်ပတ်သက်သလို အတော် လည်း စိတ်ဝင်တစားဖြစ် ပါသွားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံဆိုတာ လူထုဦးလှ စတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတို့ရဲ့ စာအုပ်တွေ ကို ဖတ်ဖူးခဲ့တာပဲရှိခဲ့ပေမယ့် တောင်စွန်းမှာမိမိနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်က ရဲဘက်အကျဉ်း စခန်းနဲ့စည်းရိုး တိုက်ဖြစ်နေတော့ ဒီစခန်းထဲကပဲ ဖြတ်သန်းသွားလာနေတာရယ်၊ ၀ါတွင်းအဖိတ်နေ့ တိုင်း ထောင်ကျရဲဘက်များ ကို တရားဟောပေးဖို့ ထောင်ထဲအထိ သွားလာခဲ့ရတာတွေရယ်ကြောင့် ထောင်မြင် ကွင်း နဲ့ ထောင်အသံတွေကတော့ မမြင်ချင်မကြားချင်အဆုံးပါပဲ။
ရဲဘက်လို့ခေါ်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရတာတွေ ထောင်ဝန်ထမ်း နဲ့ ထောင်သား တို့ရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကို အနီးကပ်မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရတဲ့အခါ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ “စပါတာကတ်”ဆိုတဲ့ ရောမရဲ့ကျေးကျွန်ခေတ် ရုပ်ရှင်ကားကိုတောင် သိပ်ပြီး အံ့သြ မိလောက် အောင် အလွန်ရိုင်းကြမ်းတဲ့ ဘ၀မျိုးကြီးပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ရောက်ရှိကျခံနေရသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သာမန်လူ ယဉ်ကျေးတို့ရှိ အကျင့်စရိုက်မျိုးကိုတောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေပါ။ “ဒီလောက် ရိုင်းကြမ်းလှတဲ့ ဘ၀နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ အမှန်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေ ထဲက အယဉ်ကျေး အသိမ်မွေ့ဆုံးဖြစ်တဲ့ ၀ိပဿနာတရားကို ဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းပြီး ပွားများ အားထုတ်ပါလိမ့်”ဆိုတဲ့ သိချင်စိတ်ကြောင်ပဲ ဒီစာမူကို အစအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာထဲက ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို လျှောက် ထားပြီးဖြစ်တယ် ဆိုလို့ အထူးမပြောလိုတော့ပါဘူး။ ဒီစာမူကိုဖတ်ပြီး မိမိစိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက် သတိရလာမိတဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုပဲ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
ဒီစာမူ ကိုဖတ်ပြီး မိမိစိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက် သတိရလာမိတာကတော့ ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ စာရေး ဆရာသခင်တင်ဦး (ဗိုလ်သခင်ဆရာ)ရဲ့ “တင်ဝင်ခန္ဓာ”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပါ။
သခင်တင်ဦးရဲ့ ဆောင်းပါးထဲက မိမိမှတ်သားမိသလောက်ကတော့ လူဆိုတာ ခန္ဓာငါးပါးကို ရရှိပြီး “အူဝဲ” လို့ အော်လိုက်ချိန်ကစပြီး “ဒီကလေးတယ်အငိုသန်ပါကား”ဆိုတဲ့ အတင်းပြောသံ နဲ့ အတူ လောကကြီးထဲကို ရောက်လာကြတာဖြစ်လို့ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာဟာ အတင်းအဖျင်းနယ်ပယ်ထဲမှာ အကျုံးဝင် တဲ့ တင်းဝင်ခန္ဓာတွေ ချည်းဖြစ်ကြောင်း။ တင်းဝင်ခန္ဓာတွေပီပီ သူတို့ကိုယ်တိုင် အရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ အခါမှာလည်း အတင်း ပြောတတ်တဲ့ တင်းဝင်ခန္ဓာတွေချည်းပဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အစချီထားပါတယ်။
ပြီးတော့ လူတိုင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလဲ အဆိုးနဲ့အကောင်း ရောနှောတွေ့ကြုံနေကြရတာဆိုတော့ ဆိုးကြောင်းနဲ့ ကောင်းကြောင်းကိုပဲ ပြောနေရတာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလို ပြောကြတဲ့အထဲက ဆိုးသူကို မဆိုး ကြောင်း ပြောတကြိုပဲ “အတင်းအဖျင်းပြောတယ်”လို့ သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဖြစ်တော်စဉ်များကို ဖော်ပြတဲ့ ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်ဝတ္ထုများမှာလည်း ဘုရားအလောင်း ရဲ့ ကောင်းကြောင်းနဲ့ ဒေ၀ဒတ်ရဲ့ဆိုး ကြောင်းများကိုပဲ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းများနဲ့ သူဲ့ တင်းဝင်ခန္ဓာ အယူအဆကို အကာ အကွယ်ယူပြီး သူကိုယ်တိုင် သတင်းစာသမားဘ၀ ရောက်တဲ့အခါ သူတို့ သတင်းစာ ကနေ သူတို့ပါတီနဲ့ ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကောင်းသတင်းနဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ရွှန်းရွှန်းဝေဖော်ပြသလို သူတို့ပါတီနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်တဲ့ ဖဆပလပါတီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစရှိတဲ့ ဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် ပယ်ပယ်နယ်နယ် စွပ်စွဲပုတ်ခတ်ရေးသား ခဲ့ကြောင်းများ ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ ... နောက်ဆု့းသူအကျွတ်တရားရသွားပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ တစ်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ နဲ့ သတင်းစာဆရာတို့ တွေ့ဆုံတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲအပြီးမှာ ဖဆပလပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုနဲ့ ပက်ပင်း ပါဆုံမိကြောင်း၊ သူကတော့ လိပ်ပြာမသန့်ဘဲ အားတုံ့အားနာဖြစ်နေပေမယ့် ဆရာချိုကတော့ သူ့ကို ချိုသာကြည်လင် တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြည့်ပြီး “မောင်တင်ဦးလားဟေ့။ လာပါဦးကွယ်။ ကြုံတုန်းမောင်ရင် တို့ကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ တစ်ခုခုကျွေးပါရစေ”လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသတဲ့။
သူကတော့ ကြောင်အမ်းအမ်း မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီး “ဦးရယ် ... ကျွန်တော်တို့သတင်းစာက ဦးတို့ပါတီနဲ့ ဦးတို့မကောင်းသတင်းတွေကို နေ့စဉ် ဖော်ပြနေတာ ဘာများကျေးဇူးတုံ့ပြန်စရာရှိလို့လဲ”ဆိုတော့ “အေး ... အမြဲ ဒီလို မောင်ရင်တို့သတင်းစာက နေ့စဉ်မပြတ် ရေးသားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ခုဆို ဦးတို့ပါတီအပေါ် လူတွေ က ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြသလို ထောက်ခံတဲ့ ဦးရေတွေလဲ ပိုပိုတိုးလာသကွဲ့။ ဒါကြောင့် ဦးတို့ ပါတီအနနဲ့ ကြော်ငြာခကုန်စရာမလိုဘဲ နေ့စဉ်ကြော်ငြာပေးနေတဲ့ မောင်ရင်တို့ကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ပါ”ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောလိုက်တော့ သူလည်း အူကြောင်ယောင်နအဖြစ်ကနေ ရှက်အမ်းအမ်း ကြီးပြန်ပြီး နောင်တ ရသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းများပါပဲ။
သူ့စာထဲမှာ သူတို့သတင်းစာရဲ့ တင်းဝင်ခန္ဓာလုပ်ရပ်များနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထုများကို မတန် မရာနှိုင်းယှဉ်ပြထားပေမယ့် ရှုမြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်စေတနာချင်းက ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေတာပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓက ဖြစ်တော်စဉ်ဇတ်တော်များကို ဟောကြားတယ်ဆိုတာ လောကအပေါ် ပညာနဲ့ရှုမြင်၊ ကရုဏာနဲ့ သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ကောင်းမှု ဆိုးမှုနဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တို့ကိ သိသာ ထင်ရှားအောင် ဟောပြတာဖြစ် လို့ ကောင်းမှုဆိုးမှုဆိုတဲ့ လောကရဲ့သရုပ်မှန်နဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ဆိုတဲ့ လောကရဲ့သရုပ်သကကန်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်စေတနာ ကလည်း “ကိုယ့်ကိုချစ်စေ၊ သူ့ကိုမုန်းစေ” ဆိုတဲ့ အလိုဆိုးမပါဘဲ “မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား”ဆိုတဲ့ လောကဓမ္မယဉ်ကျေးမှုတရား လေတိုင်းလေးစား လိုက်နာ ရေးအတွက် သာဓကအဖြစ်နဲ့ ဟောတော်မူခဲ့တာပါ။
သူတို့သတင်းစာမှာ ရေးသားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကတော့ (သူ့စကားအတိုင်း ကောက်ချက်ချကြည့်ရင်) ပုဂ္ဂိုလ် စွဲပါတီစွဲဆိုတဲ့ အတ္တကို အခြေခံပြလောကအပေါ်မှာလည်း ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ ရှုမြင် ရန်ငြိုး အာဃာတ နဲ့သုံးသပ်ပြီး သရုပ်မှန်ကို ရှောင်ကွင်းတဲ့ လုပ်ကြံအတင်းအဖျင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရည်ရွယ်ချက်စေတနာ ကလည်း ကိုယ့်အပေါ်ချစ်စေ၊ သူ့အပေါ် မုန်းစေဆို တဲ့ စေတနာဆိုး နဲ့ ရေးသားဖော် ပြနေကြတာမျိုးပါ။
ဒါကြောင့် လည်း သူတို့ရေးသား ဖော်ပြသမျှတွေကို ဖတ်ရှုကြတဲ့ ပြည်သူတွေက သူတို့အပေါ် အမုန်းပွားပြီး သူတို့မုန်းစေ လို သူတို့အပေါ် အချစ်ပိုကာ အတင်းအဖျင်းအဖြစ်ကနေ ကြော်ငြာသဘောမျိုးသက်ရောက် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခု မသီတာ (စမ်းချောင်း)ရဲ့ စာအုပ်မှာလည်း သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံထဲက ကောင်းသူဆိုးသူ တို့ရဲ့ ကောင်းကြောင်း၊ ဆိုးကြောင်းတွေ အတော်လေးပါနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေဟာ သရုပ်မှန်တဲ့ သရုပ်သကန်တွေပဲလား။ ကြော်ငြာသဘော သက်ရောက်သွားစေတဲ့ အတင်း အဖျင်း တွေပဲလားဆိုတာကတော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတဲ့ ခေတ်ကာလပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ မျက် ခြည်မပြတ်ကြ တဲ့ စာဖတ်သူများကသာ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
သရုပ်မှန် တဲ့ သရုပ်သကန်တို့ကို အမြင်သန်အသိပွားနိုင်ကြပါစေ။
ကြီးမားသော ဂိတ်တံခါးကြီး က သူ့ရင်ခွင်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲကာ ဖွင့်ပြနေခဲ့သည်။ ဂိတ်တံခါးကြီး မိတ်ဆက်ပေး လိုက်သည်က အဓိပတိလမ်း။ အဓိပတိလမ်းအဆုံးမှာ သစ်ပုပ်ပင်နှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ။ အဝေးမှ ကြည့် လျှင်ပင် ကျက်သရေရှိလှသည့် ရန်ကုန် ၀ိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ။ ခန်းမအဆောက် အအုံ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်က ခြင်္သေ့ကြီးနှစ်ကောင်။ ရှေ့မလှမ်းမကမ်းမှာက ဖြောင့်တန်းရှည်လျား တုတ်ခိုင် သည့် တစ်ကိုယ်တော် သစ်ပုပ်ပင်။ ဂိတ်တံခါးကို လွန်သည်နှင့် ဘယ်ဘက်မှာ ကျောင်းဆောင် အဆောက်အဦး များ။ ညာဘက်မှာ မြက်ရိုင်းရှည်တွေ ကြီးစိုးသည့် ကွင်းပြင်။ မြက်ရိုင်းရှည်ကွင်းပြင် ကို သေချာကြည့် လျှင် မြင်ရနိုင်သည်က ခပ်ဟောင်းဟောင်း အုတ်ဂူတစ်လုံး။ အနီးအနားမှ ညို့မှိုင်းမှိုင်းမြက် ခင်း၊ မြေနီလမ်း တို့နှင့် ရွက်စိမ်းဖားဖား ကံ့ကော်ပင်တွေကြားမှာ ထိုအုတ်ဂူက မထင်မရှား။
“ဒီဂူက နယ်ချဲ့ကိုဆန့်ကျင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ကျော်ရဲ့ ဂူပေါ့။ ဒီကွင်းပြင် နေရာ မှာတော့ တစ်ခါတုန်းက အဆောက်အဦကြီးရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့ မရှိတော့ဘူး။ စစ်တပ်က ဖြိုချဖျက် ဆီးခဲ့တယ်။ အခုတော့ မရှိတော့ဘူး။ စစ်တပ်က ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်း က ကျောင်းသားကျောင်း သူတွေ တော်တော်လေးသေခဲ့ကြတယ်။ အဖမ်းလည်း ခံခဲ့ရတယ်။ ဖေဖေက အဲဒီ တုန်း က ကိစ္စတစ်ခု ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ညအိပ်တာ။ နောက်နေ့မနက် ကျောင်းဝင်းထဲပြန်လို့မရဘဲ ညနေ မှ ပြန်ဝင် လို့ရတော့ ဒီသမဂ္ဂအဆောက်အဦကြီးက မရှိတော့ဘူး။ တစ်ခါကဖေဖေတို့ ကျောင်းသားတွေ စုဝေးပြီး အစည်းအဝေး လုပ်ကြ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြ လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့”ဟု ဖေဖေရှင်းပြခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်မ မှာ ကျောင်းနေစ မူလတန်းအရွယ်။ လူမှန်းသိတ်စကတည်းက အရောက်ဖြစ်ဆုံးနေရာ သည် ကျွန်မ တို့ ငယ်စဉ်ကနေသော အိမ်နားက ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရား၊ သာကေတခုံးတံတား ပြီးလျှင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ၀င်း သာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေသည် သူ့ကျောင်းတော်ဟောင်းကို ချစ်မြဲ၊ လွမ်းမြဲမို့ ကျွန်မ တို့ မောင်နှမတစ်တွေကို ပုဇွန်တောင် မှ ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းမှ အနောက်ပိုင်း ခရီး ကို ပြည်သူပိုင်ဘတ်စ်ကားဖြင့်ပင် တခုတ်တရ လိုက်ပို့ခဲ့သည် မှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်းလိုလိုပင်။ ကျောင်းဝင်းထဲ ကအဆောင်များ၏ အမည်၊ မည်သည့် နာမည်ကျော် ကျောင်းသားများနေခဲ့သည်၊ ယခု သူတို့ဘာဖြစ်နေ သည် စသဖြင့် မြကျွန်းသာအကြောင်းကို ဖေဖေ့ထံမှ အပတ်စဉ်လိုလို ကြားနာခွင့်ရခဲ့သည်။
အပင်ကြီးငယ် များနှင့် စိမ်းလန်းမြဲဖြစ်သော၊ အင်းလျားကန်ရေပြင်ကျယ်ကို မေးတင်ထားသော သည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကို အများက မြကျွန်းသာဟု တင်စားခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မတို့မောင်နှမ လည်း မြကျွန်းသာ၏ ရင်ခွင်မှာ တစစ ပျော်ပိုက်လာခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်မှသည် ယနေ့ထိ မြန်မာ့သမိုင်း၏ စာမျက်နှာများ ကို ဖတ်ကြမည် ဆိုလျှင် မြကျွန်းသာကို ချန်ထားမရ။ မြကျွန်းသာ၏သမိုင်းသည် အများအား ဖြင့် မလှပ။ သွေး၊ မျက်ရည်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ တိုက်ပွဲ၊ ရုန်းကန်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နှက်နေ သည့် မြကျွန်းသာ၏သမိုင်းက ကျွန်မ ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သကဲ့သို့ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦ များ၊ စိမ်းလဲ့ညိုမှောင်သော အပင်ကြီးများနှင့် သာယာလှပသော အင်းလျားကန်၊ ထို့ထက် ပျားပန်းခတ်လှုပ် ရှားတတ်ကြွနေ ကြ သည့် မြကျွန်းသာ ကျောင်းတော်သူ၊ ကျောင်းတော်သားများ၏ ပုံရိပ်တို့က ကျွန်မကို ညှို့ ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် လူမှန်းသိတတ်စမှာ ပထမဦးဆုံး မက်ခဲ့သော အိပ်မက်သည် ထိုမြကျွန်းသာ၏ရင်ခွင်ရှိ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် ဘွဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်နိုင်ရေးပင် ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ထိုအိပ်မက်က ကျွန်မကို စာကြိုးစားသော မူလတန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ တစ်ခါက ဆရာမဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မေမေကတော့ ကျွန်မ ကို ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်စေချင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မက ငယ်လွန်းလှသည်ဖြစ်ရာ မြကျွန်း သာ၏ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမ တွင် တက်ရောက်ဘွဲ့ယူနိုင်မည့် မည်သည့်ဘွဲ့မျိုးကိုမဆို ရယူလိုစိတ်သာ ရှိခဲ့ သည်။
သို့သော် ကျွန်မသည် လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက ကျန်းမာရေး ချူချာလွန်းလှသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ခဲ့ကာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျောင်းတက်ခဲ့ရသော ဖေဖေက ကျောင်းမြန်မြန်ပြီးအောင် စီးပွားရေးဘွဲ့ကို ယူခဲ့ရသော် လည်း သူဝါသနာပါရာ ဆေးပညာကို အိမ်သုံးဆေးဝါးများ လေ့လာခြင်းဖြင့် ဆည်းပူးတတ်သောကြောင့် ကျွန်မ တို့ နေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ဆေးဝါးစုံလင်သလောက် ကျွန်တို့မောင်နှမ သုံးယောက် မှာ ဆေးနံ့ ကိုလည်း ယဉ်ပါးခဲ့ကြသည်။ ဆေးသောက်ရမှာ မကြောက်ကြသလို ဆေးရုံနံ့ကိုလည်း နံသည် ဟု မမှတ်ယူခဲ့ကြ။ မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်မမှာ ငယ်စဉ်ကပင် ဓာတ်မတည့်သည့်ပြဿနက ရှိနေခဲ့သည်။ အနံ့စူးစူးဝါးဝါးများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့၏ အမွှေးများ၊ ပင်လယ်စာများ၊ အေးလွန်းပူလွန်းသာ ရာသီဥတု စသဖြင့် ကျွန်မ မတည့် သည့်အရာတွေက များလွန်းလှသည်။ ထိုအရာများကို အချိန်အတန်ကြာ ထိတွေ့လိုက်သည်နှင့် တစ်ကိုယ်တည်း ယားယံကာ အဖုအပိန့်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပေသည်။
ထို့ထက်တစ်ဖန် လူတန်းအရွယ်မှာ သာမန်တုပ်ကွေးဖျားအတွက် ဆေးခန်းမှပေးလိုက်သော ပဋိဇီဝဆေး ကို သောက်လိုက်ရာမှ ကိုယ်ပူချိန် ၁၀၆-၇ အထိ ဖြစ်ခဲ့ကာ သတိလစ်မေ့မျော့သွားခဲ့ပြီး ကလေးဆေးရုံသို့ တက်ခဲ့ ရသည်။ နောက်နေ့တွင် မေမေ့အစီအစဉ်အရ ကျွန်မတို့ မောင်နှမတစ်ယောက်စီက တာဝန် ယူ ဆွမ်းလောင်း ရသော အိမ်သို့ နေ့တိုင်း ကြွသည့် ဘုန်းဘုန်းက တိုက်တွန်းသဖြင့် ကျွန်မသောက်ဖြစ် ခဲ့သော ဆေး ကို ဆန်းစစ်ခဲ့ ရာ အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ ဆေးဝါးအတု ဖြစ်နေခ့ပါသည်။ ထိုဆေးအတု၏ဒဏ်ကို ကျွန်မ ယခု တိုင် ခံစားနေရ သည် ဟု ဆိုရမလိုပင်။ ကျွန်မ၏ ဓာတ်မတည့်သောဝေဒနာမှာ ယခင်ကထက် ပိုမို ဆိုးဝါးလာပြီး ယခုတိုင်အောင် မပျောက်နိုင်တော့။
ထိုစဉ်က ကလေးဆေးရုံမှာ သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်နှင့် မြင်တွေ့ခံစားရသော ဆေးရုံမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ တရုတ်သံရုံး၏ တံခါးနီနီနှင့် စူးရှရှဆေးရုံနံ့တို့မှာ ကျွန်မ၏ မမေ့နိုင်သော အာရုံများထဲမှ တစ်ခု ပင်။ ဆေးရုံဆေးခန်းတို့နှင့် အမြဲလိုလို ထိတွေ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရသောအခါ ကျွန်မသည် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတို့ကို သဘောကျ ချစ်ခင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်မ ခံစားနေရသော ဝေဒနာမျးကို သက်သာ အောင် ပြုစု ကုသသောသူများ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ သို့နှင့် မေမေ့ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မ ဆေးကုသခြင်းကို စိတ်ဝင်စား လာခဲ့သည်။ ငယ်အိပ်မက်တွင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရေးသည် မှတ်မှတ် ထင်ထင်။
ထို့အတူ ငယ်ဘ၀က ပုံပြင်ပေါင်းများစွာကို ကြားနာနားထောင်ခဲ့ရသည့်အနက် မာသာထရီဇာနှင့် ဒေါ်ဦးဖွန်းတို့၏ ကရုဏာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာနှင့် လုပ်ရပ်တို့သည် ကျွန်မနားထဲမှ တစ်ဆင့် နှလုံးသားထဲ ထိ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ သင်ကြားခဲ့သော ရခိုင်အမျိုးသမီးကြီး ဒေါ်ဦးဇွန်း၏ သက်ကြီးရွယ်အို များအပေါ် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပုံများကို အားကျခဲ့သော်လည်း သူ့အကြောင်းက သည့်ထက်ပိုပြီး လည်း ကျွန်မအဖို့ လက်လှမ်းမမီနိုင်ခဲ့။ အိန္ဒိယမှာ အရွယ်မရွေး နူနူဝဲ၀ဲလူမရွေး ကူညီစောင့် ရှောက်နေသည့် အယ်လ်ဘေးနီးယန်းအမျိုးသမီးကြီး မာသာထရီဇာ့ အကြောင်းကတေ့ ဖေဖေ ယူ လာတတ် သော နိုင်ငံခြားသတင်းမဂ္ဂဇင်းများနှင့် ဖေဖေနားထောင်တတ်သော ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တို့မှတစ် ဆင့် မြင်တွေ့ကြားသိရသည်မို့ ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်မ ငယ်ဘ၀ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာ မာသာ ထရီဇာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် မူလတန်း ကျွန်မအဖို့ မာသာထရီဇာကို အားကျစိတ် မှာ သူကဲ့သို့ သူတစ် ပါးကို ကူညီချင်စိတ်ပါဝင်ခဲ့သည့်ပြင် သူကဲ့သို့ သူတစ်ပါးတို့က ချီးမွမ်း ဂုဏ်ပြုခံရလိုသည့်စိတ်တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ကျွန်မ၏ နောက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုက သူတစ်ပါးထက် အခွင့်ထူးခံရလိုစိတ်ကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်း ခဲ့ပြန်ပါသည်။ နယ်မှာနေသော ကျွန်မ၏ ၀မ်းကွဲမောင်နှမများကို ကျွန်မတို့မောင်နှမက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တစ်ခွင် လှည့်လည်ပြသဖို့ အခွင့်အရေးကို ကျွန်မ အသက်ဆယ့်တစ်နှစ်မှာ ဖေဖေက ပေးခဲ့ပါ သည်။ လူကြီးတွေ မပါဘဲ သွားကြရသည့်ပြင် ငွေကြေးလည်း အလုံအလောက်ထည့်ပေးလိုက်သည်မို့ အပျော်ကျူး ခဲ့ကြရာ နောက်ဆုံးတွင် ဖေဖေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ ဟိုတယ်ခရီးလက်အောက်ခံ ကရ၀ိက် ဟိုတယ် မှ ရေခဲမုန့်ကို တန်းစီဝယ်မစားဘဲ ဖေဖေ့နာမည်ပြောပြီး အခမဲ့အငြိမ့်သား ထိုင်စားဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုစဉ်က တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသူတို့၏ အကြည့်များ ကို ကိုယ့်အပေါ် အားကျကြည့်ဟု ယူဆခဲ့ကာ သဘောကျနေခဲ့ သမျှ ဖေဖေ့ကို ပြန်လည်အစီရင်ခံသည့်အခါ သူ့ရာထူးနှင့် နာမည်ကို အသုံးချကာ သူများ ထက် အခွင့်အရေး ပိုလိုချင်ခြင်း ကို ဖေဖေက ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရှုတ်ချပြစ်တင်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်မတို့ အားလုံး အပျော်တွေပျောက် သကဲ့သို့ ရေခဲမုန့်အရသာပင် မခံစားနိုင်ခဲ့တော့ပါ။ ထိုမှတစ်ဆင့် ယခုတိုင်လည်း သည် လို ရေခဲမုန့်မျိုးစားရမည်ကို ရှက်ကြောက်စိတ်က ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ငယ်အိပ်မက်ထဲမှာပင် ကျွန်မသည် သူများ တန်းစီလျှင် မိမိလည်း တန်းစီဖို့ ၀န်မလေးတော့ချေ။
ငယ်ငယ်က ပျော်ခဲ့ရသည့်ကာလများတွင် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ခရီးရှည်များက ထိပ်ဆုံးက ပါခဲ့ပါသည်။ ခရီးထွက်သည် ကို ၀ါသနာပါလှသော မေမေနှင့် မော်လမြိုင်မှာနေသည့် အဘိုးအဘွားတို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ မိသားစု နွေရာသီတိုင်း ခရီးတစ်ခုတော့ ထွက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ မော်လမြိုင် သွားရသည်မှာ ခရီးထွက်သည်ထက် အဘိုးအဘွားနှင့် အတူနေရန် သွားသည်မျိုးမို့ မော်လမြိုင် ခရီးထက် အခြားခရီးအချို့ကို ပိုပြီးမှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိခဲ့သည်။ မော်လမြိုင် တစ်ဖက်ကမ်း ဘီလူးကျွန်း၊ ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း စသည်ဖြင့် ခရီး စဉ်တွေမှာ သဘာဝရှုခင်းအလှ၊ ဗိသုကာလက် ရာအလှ၊ အစားအသောက်၊ ရာသီဥတု၊ တိုင်းရင်းသား ဓလေ့ထုံးစံနှင့် ဘာသာစကား၊ လေယူလေသိမ်း စသဖြင့် မတူခြားနားသည့် အရာများကို တအံ့တသြ တွေ့ကြုံခံစားသိမြင်ရသဖြင့် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခိုက်မှာ “တွေ့လား၊ ဖေဖေတို့နိုင်ငံက ဘယ်လောက် လှလဲ။
ဒီနေရာမှာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာလို လျှပ်စစ်ကြိုးဆွဲ ကောင်းကင်ကားတန်းတွေ ဆင်နိုင်ရင်၊ မိသားစုအပန်းဖြေ ပန်းခြံကြီးမျိုးဖန်တီးနိုင်ရင် ဖေဖေတို့ နိုင်ငံခြား ၀င်ငွေလည်း တိုးမယ်။ နိုင်ငံခြားသားအများကြီးကလည်း ဖေဖေတို့နိုင်ငံ ဘယ်လောက်လှောကာင်း၊ သဘာဝသယံဇာတ ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝကြောင်း သိသွားကြမယ်”ဟု ဖေဖေက သူ့အိပ်မက်တွေကို မမောတန်း ပြောနေတတ်သည်။ သည်တော့ ကျွန်မမှာ ကြက်သီးမွေးညင်းထောင်ထကာ မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်ရသည် ကို ဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါသည်။
မျက်စိတစ်ဆုံး များပြားလှသော ဘုရားကြိုဘုရားကြားမှာ လျှောက်သွားရင်း ဆယ်တစ်ရာစုပုဂံ၏ ကြွယ်ဝမှု နှင့် ရှေးက ပျူ၊ မွန်၊ မြန်မာတို့၏ လက်ရာမြောက်ဗိသုကာတို့ကို နားမလည်နိုင်သေးသည့်တိုင် မှန်းဆ ဂုဏ် ယူမိခဲ့ဖူးပါသည်။ မန္တလေးကျုံးကို ငေးကြည့်ရင်း၊ ပါတော်မူပုံပြင်ကို နားထောင်ရင်း၊ မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင် တော်မြတ်ကို ဖူးမြော်ရင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော လွတ်လပ်ရေးအတွက် နားမလည့်တလည်နှင့် ပင် ကြေကွဲခဲ့ပြန် ပါသည်။ ဖေဖေ့ဘက်မှ ဆွေမျိုးများရှိရာ သီပေါနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအချို့ကို လည်ပတ်ခဲ့စဉ်မှာလည်း အသွင်မတူသည့် ဆွေမျိုးများအပေါ် ချစ်ခင်သည့် ခံစားမှုကို ရခဲ့ပြန်ပါသည်။ ပြည်တွင်းခရီးအတွေ့အကြုံ တို့ကို အိမ်နီးနားချင်း ကလေးများနှင့် ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းများအား ပြန်ပြောင်းပြောပြခ့သည့်အခါ ကျွန်မမှာ သူတို့ထက် ဗဟုသုတ ပိုရှိသည်ဟု ခံစားမိရာက မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်စိတ်လည်းတိုးပွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ အတွေးအမြင် သည် ရန်ကုန်၏ ၁၂ ပေ၊ ပေ ၅၀ တိုက်ခန်း ကျဉ်းနှင့် နံရံလေးဘက်ကြားက ကျောင်းတို့ထဲမှာ လမ်းဆုံး မနေခဲ့ရသည့် အတွက်လည်း မူလတန်းအရွယ် ကျွန်မ၏ အိပ်မက်များသည် တောင်ပံတလူလူ လွင့်ဝဲနေခဲ့ ကြပါသည်။
ငယ်ဘ၀မှ အမှတ်ရနေမိသည်က အိပ်ရာဝင်နောက်ကျခြင်းပင်။ ညစဉ်ညနက်သည့်တိုင် ဖေဖေနှင့် မေမေ၏ ခုတင်ပေါ်မှာ နားနေရင်း ဖေဖေနျင့် မေမေ ပြောသမျှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကိစ္စ အထွေထွေကို နားထောင် တတ်ခဲ့သည်ကလည်း ကျွန်မဘ၀အတွက် လူဖြစ်စေခဲ့သည့်အကြောင်း ဖြစ်ပေမည်။ မူလတန်း ဘ၀မှာပင် ဖေဖေနှင့်မေမေတို့ ခံစားနားလည်သမျှကို လိုက်လံခံစားဖြစ်ခဲ့သည်မိ့ နားလည်မှုအရာတွင်လည်း လူကြီး တို့၏ နားလည်မှုအတိုင်းအတာ ကို ယဉ်ပါးကျက်စားမိခဲ့ပြန်ပါသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က ခံစားမှုနုနယ် သည့် ကလေးပီပီ ကြားဖူးသမျှ ဒုက္ခရောက်နေသူ၊ အဆင်မပြေနေသူများအတွက် ညတိုင် ဘုရားရှိခိုး သည့်အခါ ဝေေ၀ဆာဆာ ဆုတောင်းသမှု ကို ပြုခဲ့မြဲဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ထက်အဆင်ပြေကြွယ်ဝနေသူတွေအပေါ် အားကျ စိတ်ဖြစ်ခဲ့မှုမျိုး ရှိ၊ မရှိ မမှတ်မိသော်လည်း ကိုယ့်ထက် အဆင်မပြေဖြစ်နေသူတို့အတွက် ပူပန်စိုးရိမ် စိတ်နှင့် တစ်နည်းနည်းအားဖြင့် ကူညီဖေးမလိုစိတ်များ ဖောဖောသီသိ ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်ကိုဖြင့် မှတ်မိနေပါ သေးသည်။ သို့ဖြင့် မူလတန်းအရွယ် ကျွန်မ၏ ညပိုင်းဘုရားရှိခိုးချိန်သည် ထိုကိစ္စများအတွက် ဆုတောင်းမှု တို့ကြောင့် ကျန်မောင်နှမများထက် ပိုကြာမြင့်ခဲ့ပေသည်။ ထို့နောက်မှာ ကျွန်မသည် ကလေးဘ၀မှ လူ ငယ်ဘ၀ သို့ ရုတ်ခြည်းကူးပြောင်းသွားသလို ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်။
Posted by SHWE ZIN U at 9:55 AM5comments Links to this post
ဇော်သက်ထွေး ၏ ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲ နှင့် နူးညံသော နှလုံးသား, အပိုင်း (၁၂)
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ကျဆုံးစေခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူအရေးအခင်း၊ ရန်ကုန်စက်မှု တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အရေးအခင်းတွေပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ လုံထိန်း တပ်တွေ ရိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင် က တံတားနီအရေးအခင်းဟာလည်း ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံသမိုင်းမှာ ထင်ရှား ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ကျောင်းသားအများအပြား အဖမ်းခံရပြီး အင်းစိန် ထောင်ထဲကို ထည့်သွင်း အကျဉ်းချ ထားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ တံတားနီ အရေးအခင်းမှာ စစ်ကိုင်းဆောင် က ဥပဒေကျောင်းသားပါဝါ မျက်မှန်ထူထူနဲ့ စကား ကို လေသံမာမာခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောတတ်တဲ့ အားလုံး က မှန်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ လှမျိုးနောင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ တယ်။
သူ့ကို လိုက်ဖမ်းတော့ သူ့ဖခင်ရဲ့ဇာတိ ကျောက် ပန်းတောင်းက ရွာမှာ ကိုရင်ဝတ်ပြီး တိမ်းရှောင်ခဲ့ပေမယ့် မန္တလေး အခြေစိုက် ထောက်လှမ်းရေး (၁)က လာဖမ်းလို့ အင်းစိန် သီးသန့်ထောင်ကို ရောက်လာပါတယ်။ သီးသန့်ထောင်ထဲ မှာ ဌေးကြွယ်၊ ဝင်းကြွယ် (ကွယ်လွန်)၊ မင်းဇေယျာ၊ ကိုယဉ်အေး၊ စောမင်း၊ ကိုထွန်းမြင့် (ကွယ်လွန်)၊ ကိုမင်းစိန် (R.I.T)၊ အေးလွင် (ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီ)၊ သိန်းတင်အောင် (ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ)၊ ကိုအောင်ဝင်း၊ အံ့ဘွယ်ကျော်တို့နဲ့အတူ နေရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကျောင်းသားတွေ (၁၄၁ ယောက် အုပ်စု) ဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံရဲ့ပထမဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလို့လည်း ပြော လို့ရပါတယ်။
ဒီကျောင်းသားတွေကို ခေတ္တထိန်းသိမ်းပေးပြီး ၁၉၈၈ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂၈ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (မ.က.သ)ကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ လှမျိုးနောင် လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ (၈)ရက်နေ့မှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး စက်တင်ဘာရောက်တော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမယ့် အရိပ် အယောင်တွေတွေ့ရ လို့ ကျောင်းသား ၁၀၇ ယောက်ဟာ မော်လမြိုင်ကတစ်ဆင့် တောခိုခဲ့ရာမှာ အဆိုတော်ပြည့်ပြည့်၊ လှမျိုးနောင်၊ ဘိုဘိုဦး၊ မိုးကျော်ဖြူ၊ မောင်မောင်သိန်းတို့ ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှာ ကျောင်းသား များ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)ဖွဲ့မယ် ပထမဆုံး ညီလာခံတက်ပြီး ၁၉၈၉ မတ်လမှာ ရန်ကုန် ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်က လက်ယာအဖျက်သမားအဖြစ် စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ ဦးရဲထွန်းနဲ့ ကိုမင်းဇေယျ တို့ အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာ လှမျိုးနောင်လည်း ရှောင်တိမ်း ကိုယ်ဖျောက်နေခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးသာ လုပ်နေ တာ လှမျိုးနောင်ရဲ့ မျက်လုံးက သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ သူ ၂နှစ်သားမှာ အဖျား တက်ပြီး မျက်စိ သူငယ်အိမ်လည်သွားလို့ ပုဂံကနေ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ပြီး ကုသခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ၆နှစ် ၇နှစ်သားမှာ မျက်စိရောဂါ ပြန်ပေါ်လာပြီး စစ်ကြည့်တော့ မျက်လုံးကပါဝါ ၄၀၀ ဖြစ်နေပါပြီ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လူဖမ်းပွဲတွေ လုပ်တော့ ဌေးကြွယ်အိမ်ကို လာရှာတဲ့အခါ ဌေးကြွယ်က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားပြီး လှမျိုးနောင်ကတော့ အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ခုံရုံးက ပုဒ်မ ၅(ည)နဲ့ လှမျိုးနောင် ကို ထောင်ဒဏ် ၆နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ လှမျိုးနောင်ရဲ့ မျက်လုံးအခြေ အနေက ပိုဆိုးလာပြီး ပါဝါတွေက ဖြည်းဖြည်းတိုးလာပါတယ်။ ၁၉၉၅ မေလ (၁၂)ရက်နေ့မှာ ပြန်လွတ်တော့ သူ့မျက်လုံးပါဝါက ၇၀၀ကျော်နေပြီ။ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုလည်း ညာဘက် မျက်လုံးအတိုင်း Balance လုပ်လိုက်ရပါတယ်။ အပြင် ပြန်ရောက်မှ မျက်မှန်ကို ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး သေချာပြန်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောက်ပန်းတောင်း ကို ပြန်နေပါတယ်။ ၁၉၉၆ မှာ အိမ်ထောင် ကျပြီး ၂၀၀၀ ရောက်တော့ ရန်ကုန် ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ သားတစ်ယောက် ရှိပြီး မြောက်ဒဂုံမှာ နေထိုင်ရင်း မိသားစုဘ၀ ကို အေးအေး ချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနေ ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ လှမျိုးနောင်ရဲ့ ဘ၀ဟာ နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ကို တစ်ကျော့ပြန်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ဗ.က.သ က ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်တဲ့ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဂျင်မီတို့ လွတ်မြောက် ခဲ့သလို မ.က.သ ကလည်း ဌေးကြွယ်၊ ဇော်မင်းတို့ ပြန်လွတ်လာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မပြီးဆုံးသေး တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို ဆက်လက်လှုပ်ရှားရင်း အစိုးရဲရဲ့ မတရားတဲ့ အမိန့်တွေကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ လူဖမ်းပွဲလုပ်တော့ ထွန်းမြင့်အောင်၊ စိုးထွန်း၊ နီလာသိန်း တို့လိုပဲ လှမျိုးနောင်ဟာ ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ တာမွေမီးသတ်နားက တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ သွားပုန်းနေ တဲ့ လှမျိုးနောင်ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလည်း မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ စက်တင်ဘာ သံဃာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ တာမွေ မှာပဲ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တိုက်ခန်းထဲမှာချည်းအောင်းနေရ တော့ သူ့မျက်လုံးက ဖောက်လာတယ်။ မျက်လုံးက အမဲစက်တွေပေါ် လာပြီး အမြင်အာရုံနည်းလာ ခြင်းပါပဲ။ နောက်ဆုံး မြို့ပြင်က ရာဘာတောထဲ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေ ရတဲ့ ဌေးကြွယ်နဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ် လုပ်ပြိး မျက်လုံးကို ဆေးရုံသွားပြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရ ပါတော့တယ်။ အောက်တိုဘာ ၈ရက်နေ့မှာ မျက်စိဆေးရုံ သွားပြတယ်။ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေး ပဲ။ အောက်တိုဘာ (၁၀)ရက်နေ့ Nero Vision မှာ သွားပြတော့ ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကြိုစောင့် နေပြီ။ ဖမ်းတဲ့ အခါ ဆရာဝန်တော့ ပြရမယ်ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းတော့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆရာဝန်က စစ်ဆေးကြည့်တော့ လှမျိုးနောင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအပြင်ထောင့်က အမဲရောင် ပိတ်ကား စကွာကျလာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်း မဲနေတယ်။ ဆေးပညာအခေါ် ကတော့ Retina deattchment လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မြင်လွှာအိမ်ရဲ့ အာရုံကြောလမ်းမကြီးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မြင်လွှာအာရုံကြော အစုအဝေး ရဲ့ မြင်လွှာကွာကျတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ မြင်လွှာက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပြဲထွက်သွားရင် ဆက်တိုက် ကွာကျ တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် မျက်လုံးအပြင်မှာ အမဲကွင်းပေါ်လာတတ်တယ်။ ဒီအခြေအနေ ကို ဆရာဝန်က စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို ရှင်းပြတယ်။ သေသေချာချာမကုရင် ကန်းသွားမယ် လို့ ပြောလိုက် တယ်။ စအဖ စစ်ကြောရေးက ဘာမှမပြောသေးဘဲ တိမ်းရှောင်နေ တဲ့ ဌေးကြွယ်တို့၊ ဇော်ထက်ကိုကိုတို့ကို ဖော်ခိုင်းတယ်။ ညရောက်တော့မှ အထူးကုဆေးရုံကို ပြန်ပို့ပေးတယ်။ ကုပေး ပြီး ဆေးရုံက နောက်တစ်ပတ် ပြန်လာပြဖို့ ချိန်းတယ်။ ထောင်က လှမျိုးနောင်ကို အပြင်ထုတ် မပေးချင်ဘူး။ ပြန်မစစ်ဖြစ်တော့ ရက်ကြာလာတဲ့အခါ မြင်လွှာက ကွာကျသွားပြန်ရော၊ မျက်လုံးထဲ မှာ အမဲကွက်တွေ ၀င်နေပြီး အလင်းကျတော့လည်း ပြဒါးလို ရောင်ပြန်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ထောင်ကလည်း လှမျိုးနောင်ကို သာမန်အကျဉ်းသား မဟုတ်တဲ့အတွက် အပြင်ထုတ်မရဘဲ ထောင်ဆေးရုံထဲမှာပဲ လိုက်ကာတွေချ။ အမှောင်ချပြီး ကုတယ်။
နောက်ဆုံး လှမျိုးနောင်က ကုသမှု မခံယူတော့ဘူး။ လုပ်တော့မှ ထောင်ဆေးမှူးချုပ် ဆင်းလာတယ်။ မျက်လုံးကို စစ်ဆေးပြီး ခွဲရင် အောင်မြင်ဖို့က ၃ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတယ်ဆိုပြီး သဘောတူရင် လက်မှတ်ထိုး ပါလို့ ပြောပါတယ်။ လှမျိုးနောင်ကလည်း မှောင်နေတာထက်စာရင် လင်းတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်မှတ်ထိုး လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို ဆေးရုံ ပြန်ပို့တယ်။ မေ့ဆေးပေးပြီး ခွဲတယ်။ ကွာနေတဲ့ ပိတ်ကား ကို ပြန်ကပ်တယ်။ ထောင်ထဲပြန်ပို့တော့ ဆေးရုံကတိုက် ၁အခန်း ၂မှာ ထားတယ်။ တစ်ပတ်ခြား ပြန်ထုတ်ပြီး စစ်တယ်။ မျက်လုံးအခြေအနေက မကောင်းပါဘူး။ သုံးနေရာလောက် ပြဲထွက်နေတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက လက်လျော့ လိုက်ဖို့ ပြောတယ်။ မျက်လုံးက ဒုက္ခပေးသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ပုဒ်မမျိုးစုံတပ်ပြီး ထောင် ၆၅နှစ် ၆လ ချမှတ် လိုက်တယ်။ မျက်လုံးက မကောင်း ပါဘူးဆိုမှ ပထမဆုံး ထောင်ပြောင်းမယ့် လူ ၉ဦးထဲမှာ ပထမဆုံး ထွက်ခွာရတဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်။
ည(၁)နာရီ အင်းစိန်ထောင်ဗူးဝမှာ မြတ်စံနဲ့ တွေ့တယ်။ ကဗျာဆရာစောဝေနဲ့ တွေ့တယ်။ ပြီးတော့ လှမျိုးနောင်ကို မြစ်ကြီးနားထောင် ပြောင်းလိုက်တယ်။ မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ နဂိုကအခြေအနေ မဆိုးတဲ့ ညာဘက်ကလည်း စဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့ ဆရာဝန်ကို အင်းစိန်က ပါလာတဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြစ်ကြီးနား မှာ ကုလို့ မရဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လှမျိုးနောင်ကို မန္တလေး ထောင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ မန္တလေးရောက်တော့ မျက်လုံးကို သေချာစစ်မပေးဘူး။ ဒီတော့ ညာဘက်မျက်လုံးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ ဘယ်ဘက်က မျှော်လင့်ချက် မရှိတာသိပေမယ့် ညာဘက်ပါဖြစ်သွားရင် ဘ၀ဆုံးပြီ။ ဒီတော့ မျက်လုံးတစ်လုံး အတွက် ဘ၀တစ်ခုအတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ရတာပေါ့။ ဆေးကုသခွင့်ရဖို့ ခွင့်ပြုချက်တွေက အဆင့်ဆင့် တင်ရတယ်။ ဆေးဝါးအကူအညီ လည်း မရှိဘူး။ အပြင်က ဆရာဝန်နဲ့ပြခွင့်ဆိုတာ ၆လမှ တစ်ကြိမ်ပဲ ရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာလည်း စက်ကိရိယာ မရှိဘူး။ အပြင်ကိုလည်း ထွက်ခွင့်မရဘူး။ နောက်ဆုံး အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်ရုံး အထိ ဒီပြဿနာ ရောက်သွားတယ်။
လှမျိုးနောင်အခြေအနေ ပိုဆိုးနေပြီ။ စာဖတ်လို့တောင် မရတော့တဲ့အခြေအနေ ရောက်နေပြိ။ ဒီလို လုံးလည်ချာလည်လိုက်ရင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ သမ္မတရဲ့အမိန့်ထောင်က လွတ်လာပါတယ်။ အမြင် အာရုံကတော့ လှမျိုးနောင် အတွက် မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ အပြင်ရောက် တော့လည်း မျက်စိ ဆရာဝန်တိုင်း ကုလို့ရတဲ့ရောဂါ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက လုံးလုံး ကွယ်သွားပြီး အတွင်းတိမ်စွဲနေပြီ။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေက သူ့ရဲ့ ညာဘက်မျက်လုံး ဆက်လင်း နေဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြတယ်။ လှမျိုးနောင်ရောဂါကို ကုနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ မှာ သုံးလေးယောက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပန်းလှိုင်ဆေးရုံက ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်မင်းတင်နဲ့ ပြတယ်။
သူက လှမျိုးနောင် မျက်လုံးရောဂါကို ကြိုသိနှင့်ပြီးသား၊ ပြီးတော့ သူယူလာတဲ့ ပညာရပ်ကလည်း လှမျိုးနောင် ရဲ့ ရောဂါကို ကုသနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ် ဖြစ်နေ တယ်။ နောက်ဆုံး စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ ဆရာကြီး ပြောမယ့်အဖြေ ကို အားလုံးက ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နားစွင့်နေတယ်။ ဒေါက်တာဇော်မင်းတင်က လှမျိုးနောင် ရဲ့ ညာဘက်မျက်လုံး အခြေအနေက အရမ်းစိုးရိမ်စရာ မရှိသေးပါဘူးတဲ့။ အဲဒီအခါကျမှ အားလုံး သက်ပြင်းချနိုင်ကြ တော့တယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ပန်းလှိုင်မှာ ပစ္စည်းတွေ၊ ကိရိယာတွေ အစုံအလင် ရှိပါတယ် တဲ့။ ခုတော့ လှမျိုးနောင်တစ်ယောက် ညာဘက်မျက်လုံးကပါဝါ ၇၀၀ ကျော်ပေ မယ့် လောကကို မြင်နေရသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေထက်တော့ သူက ဘ၀ထက်ပို ချစ်ရမယ့် အလင်းမှုန်တွေ ရှိနေ ခဲ့ပါပြီ။
တိုင်မယ် တောမယ် ဆန္ဒပြမယ်
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့် ထောင်ထဲကို ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေက အမျိုးအစားစုံလင် လှပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ပြင်းထန်လှတဲ့ ဖိအားတွေအောက်မှာ ဘ၀ကို ရှင်သန် နိုင်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားနေထိုင် ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းကို ထိတွေ့ တုံ့ပြန်ဆက်ဆံရာမှာတော့ ပုံစံတွေ မတူကြ ပါဘူး။ Event ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ထောင်ကျတာ ခြင်း အတူတူပေမယ့် Respond ဆိုတဲ့ တုံ့ပြန်မှု မတူကြတဲ့ အတွက် Out comming တွေလည်း မတူကြပါဘူး။ တချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပါဝါပျော့ Soft Power ကိုကိုင်ပြီး ကစားကြတယ်။ တချို့အသက်အရွယ် ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ လူငယ်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ကတော့ ရိုးရှင်းပြီး ဗြောင်ကျတဲ့ Hard Power ကို ကိုင်စွဲကြတယ်။ သူတို့မူကတော့ ရှင်းတယ်။ တိုင်မယ် တောမယ် ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့မူပဲ။ တခါတရံကျတော့လည်း သူတို့မူက အလုပ် ဖြစ်တယ်။ တင်ပြထားတဲ့ ကိစ္စ တွေ ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းဘဲ အချိန်ဆွဲထားတတ်တဲ့ ကြိုးနီစနစ်အောက်မှာ သူတို့ တုံ့ပြန်မှု ကြောင့် ဂရုတစိုက် လုပ်ကိုင်ပေးလိုက်လို့ အဆင်ပြေသွားတာတွေ ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျတော့ ထောင်အာဏာပိုင်ဘက်က ဆုံးဖြတ်ချက် မပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့မိပြီး နှစ်ဖက် နစ်နာတတ်တာ မျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ ထောင်ထဲမှာတော့ ဒီလိုပဲ သရေကွင်းတစ်ကွင်း လို လျှော့လိုက် တင်းလိုက် ကစားနေရတာပါပဲ။
၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ကမ္မရ၀တီမဂ္ဂဇင်းလုပ်နေတဲ့ ညီညီထွန်းခေါ် မီးတုတ်တို့ စိုးမိုးထွန်းခေါ် သူကြီး တို့ တွေ ထောင်ကျလာပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်မှာ လွတ်သွားပြီး နောက်ဆုံးရထားနဲ့ လိုက်လာကြသူတွေ သူတို့တွေ လည်း ၁၉၈၈ ကတည်းက ထောင်နှုတ်ခမ်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေပါပဲ။ ထောင်ကျကာ အဆန်း မဟုတ်တော့သလို ထောင်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့သူတွေ ပေါ့။ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေရမယ်၊ ဘယ်လိုထိုင် ရမယ်ဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ ထောင်ဇယား ကျေတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင် က ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းရင် နှစ်လမ်းလောက် ကြိုပြီး မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း သိပ်စိတ်ရှည်ကြတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်မယ် တောမယ် ဆန္ဒပြမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။
ဖြစ်ချင်တော့ ၂၀၁၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ သူကြီးက နားကိုက်ဝေဒနာ ဖြစ်လာတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ဆိုတော့ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ ကုတယ်။ မပျောက်ဘူး။ (၁)လပိုင်းလောက်ကစပြီး ဖြစ်တာ။ (၄)လ ပိုင်း ရောက်လာတော့ နားရောဂါက တော်တော်ဆိုးလာတယ်။ မခံနိုင်တော့တဲ့ အဆုံးထောင်ဆေးရုံ သွားပြတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ဆေးရုံမှာကလည်း နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း Speciallst မရှိဘူး။ ဘယ်တုန်း ကမှလည်း မထားခဲ့ဖူးဘူး။ အားလုံးသောရောဂါအတွက် အထွေထွေကုတဲ့ ဆရာဝန်ပဲ ပြရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Speciallist တွေ လေးငါးလနေတော့မှ တစ်ခါ ထောင်ထဲကို မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ခုလည်း သူကြီးတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ နားဆရာဝန် ကို အပြင်ဆေးရုံက ခေါ်ပြရတဲ့ မူဝါဒကြောင့် စောင့် ရမယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်ရမှာ လည်းလို့ သူကြီးမေးတော့ ထောင်ထဲမှာ နားရောဂါသမားတွေ စုနေတယ်။ ရာကျော်မှတစ်ခါ ခေါ်တာဆိုတော့ အနည်းဆုံး(၃)လစောင့်ပါတဲ့။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ တိုင်မယ်၊ တောမယ်၊ ဆန္ဒ ပြမယ်ဆိုတဲ့မူလည်း ဒီတစ်ခါ မစွမ်းတော့ဘူး။ နားကိုက်ဝေဒနာကို တစ်စိမ့်စိမ့် ခံစားရင်း (၃)လ စောင့်ရတာပေါ့။
(၃)လကြာတော့ သူကြီး မျှော်လင့်နေတဲ့ အပြင်က ဆရာဝန်ကြီးတွေ ရောက်လာပါတယ်။ သူကြီး လည်း သူ့နားရောဂါ ကို ၀မ်းသာအားရနဲ့ ပြတယ်။ တကယ့်ကြည့်တော့ စက္ကန့် ၅၀ပဲ၊ ပြီးတော့ ရောဂါ အကြောင်းတအား ပြောချင်နေတဲ့ သူကြီးကို ဘာမှမမေးတော့ဘူး။ ဆေးတွေ ပေးသွား တယ်။ နား ဆရာဝန်ကြီး ဆေးတွေပေးသွားပေမယ့် လက်ထဲကို ချက်ချင်း မရဘူး။ ထောင်ပိုင်ကြီး ခွင့်ပြုချက် ရမှ ပေးရမယ်ဆိုပဲ။ ဒါဆို ထောင်ပိုင်လိုနေရာမျိုးမှာ တာဝန်ယူမယ့်သူက အကုန် တတ်မြောက်ရမှာပေါ့။ နားရောဂါ အကြောင်းလည်း တီးခေါက်ထားရမယ်။ နားအတွက် ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ ဆေးဝါး အမည်တွေကိုလည်း သိရမယ်။ အနာနဲ့ဆေး ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း စစ်ဆေးပေး ရမယ်။ နောက်ဆုံး နားဆေးအသုံးပြုဖို့ ထောင်ပိုင်ကြီး ခွင့်ပြုချက်ချပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူကြီး နားရောဂါက ပျောက်သလောက် ရှိနေပြီ။ အခုတော့ ခေတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ ထောင်ထဲမှာ နားဆရာဝန် ရှိနေပြီလား၊ မရှိသေးဘူးလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ထောင်ပိုင်ကြီးလည်း ဆေးတွေ စစ်ဆေးဖို့ အချိန်ရမှ ရပါ့တော့မလား မပြောတတ်ပါဘူး။
နားရောဂါနဲ့ တစ်စခန်း ငြိမ်းသွားတဲ့ သူကြီးဟာ ၂၀၁၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတော့ ခေါင်းမူးဝေဒနာရလာ လို့ တစ်စခန်းထလာပြန်ပါတယ်။ ထောင်ဆေးရုံကို သွားပြတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်တော်တဲ့ ဆေးတွေပေးတယ်။ မသက်သာပါဘူး။ နောက်ဆုံး သူ့ရောဂါဟာ ကျီးပေါင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်း ပြတယ်။ ဆေးရုံမှာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့ ဆေးစာရေးပေးတယ်။ သူကြီးတစ်ယောက် ဓာတ်မှန်ဌာန ရောက်တော့ အမောဆို့တော့တာပဲ။ ဆေးရုံမှာ စက်တော့ ရှိတယ်။ လောလောဆယ်ရိုက်ဖို့ ဓာတ်မှတ် ဖလင်ပြား မရှိဘူးတဲ့။ ဘယ်ရမလဲ။ သူကြီးတစ်ယောက် တိုင်မယ်၊ တောမယ်၊ ဆန္ဒပြ မယ်ဆိုပြီး ပွဲကြမ်းတော့တယ်။ နောက်ဆုံး ဓာတ်မှန်ဋ္ဌာနက အပြင်ကချေးပြီး ရိုက်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆေးရုံကပြောတဲ့ ပုံကို ကြည့်ပြီး သူကြီးက ထောင်ကိုတော်တော် သနားသွားပါတယ်။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တော့ အရိုးကျီးပေါင်း တက်နေတာ သေချာသွားတယ်။ နောက်ဆုံးအပြင်ဆေးရုံ က အရိုးအကြော ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြင့်က ကိုနေမျိုးဇင်ကို လာကြည့်ရင်းနဲ့ သူကြီးရောဂါကိုပါ စစ်ဆေး သွားတယ်။ ပြီးတော့ ခဲဆွဲပါတဲ့။ သူကြီးက ထောင်တိုက်ခန်းမှာ ခဲဆွဲဖို့ အခက်အခဲ ရှိတယ်ဆိုတာ တင်ပြတယ်။ ဆရာကြီး က တိုက်မှာ ခဲဆွဲဖို့ အဆင်မပြေရင် ဆေးရုံ တက်ပြီး ခဲဆွဲဖို့ အကြံပေး တယ်။ ဆေးစာ လည်း ရေးပေးသွားတယ်။
ဒီဆေးစာကြောင့် သူကြီးဆေးရုံ တက်ခွင့်ရသွားတယ်။ ထောင်ကလည်း ဆေးစာဖတ်ကြည့်ပြီး ခဲဆွဲ ဖို့ ပြင်ပေးတယ်။ သူကြီးက တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ ကော်လံနဲ့ လုပ်ပေးပါဆိုတော့ မလိုပါဘူးတဲ့။ ဒီတော့ သူကြီးက အလျှော့ပေးလိုက်တယ်။ ဒီလောက် လုပ်ပေးနေတာပဲ အရမ်း ကျေးဇူးတင်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရင်ထဲက ကျေးဇူးလေးတွေ ဘယ်ဆီပျောက်သွားလိုက်မှန်း မသိဘူး။ ထောင်ဆေးရုံမှာ ခဲဆွဲရင်း အသုံးပြုရတဲ့ ကြိုးအပတ်တွေ ဘယ်နားထားမှန်း မသိဘဲ ပျောက်နေ တယ်။ ဆရာဝန်နှစ်ယောက်လည်း အချီအချ ငြင်းငုန်နေကြတယ်။ နောက်တော့ တစ်နေရာကနေ တွေ့သွားတယ်။ ယူလာတဲ့ဝန်ထမ်းက သူကြီးကို ကြည့်ပြီး ထောင်ဆေးရုံမှာ ခဲဆွဲရင် ကိုယ်ခန္ဓာ ကို ပတ်တတ်တဲ့သူ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် လွဲမှားမှုရှိရင် တာဝန်မယူနိုင်ဘူး လို့ လူကို ဘုကြည့်ကြည့် ပြီး ပြောပြန်ရော။ သူကြီးလည်း ကြောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါရစေ ဆိုပြီး တိုက်ကို ပြန်လစ်လာခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ ရုံးချုပ်ကို စာတွေဘာတွေ ရေးပြီး တိုင်ပါလေရော။ တစ်လလောက်အကြာမှာ သူကြီးကို အပြင်ဆေးရုံထုတ် ကုပေးမယ်ဆိုပြီး အင်းစိန်ဆေးရုံကို Refer လုပ်ပေးတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ တိုင်မယ်၊ တောမယ်တွေ က အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အင်းစိန်ဆေးရုံ လည်း ရောက်ရော ဆရာဝန်ကြီး က သူကြီး ရှေ့တည့်တည့်မှာ ထားပြီး ထောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ ရဲတပ်သားတွေ ကို "ချီးထုပ်တွေ" ခေါ်လာရမလားဆိုပြီး ဟောက်တယ်။ သူကြီး ကလည်း ငြိမ် မခံဘဲ ပြန်ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ခဲဆွဲဖို့ Word တာဝန်ခံနဲ့ လွှဲပေးလိုက်တယ်။ တာဝန်ခံကလည်း စိတ်မပါ လက်မပါ နဲ့။ လူတွေကို တခြားဂြိုဟ်ကလာတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေကို ကြည့်နေတဲ့ အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ Discriminating (ခွဲခြားနှိမ့်ချ) တဲ့ အမူအယာတွေ လုပ်ပြတယ်။ နောက် အင်းစိန်ဆေးရုံမှ မလုပ်ပါ နဲ့။ ထောင်ထဲမှာ ပဲ ခဲဆွဲပါဆိုပြီး ညွှန်ကြားလာပြန်တယ်။
သူကြီး စိတ်တွေ တအားဆိုးနေပြီ။ ထောင်ထဲမှာ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး Complain တက် တယ်။ ထောင်ဆေးရုံ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်ပြောတယ်။ ကုသပုံတွေကို မယုံကြည်ဘူး ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အင်းစိန်က ဘာမှ စိတ်မပူ ဖို့ ဖျောင်းဖျတယ်။ သူတို့ကို ခဲဆွဲနည်းတွေ သေသေချာချာ သင်ပြလိုက်တယ် လို့လည်း ပြောတယ်။ ကော်လံ မရှိဘူးဆိုတော့လည်း ကော်လံပေးလိုက်မယ်တဲ့။ အဲဒီလို လွှတ်ပြီး သဘော ကောင်းနေတော့ သူကြီးက စိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်။ ၅(ည)တွေက အချော့ ကြိုက်မှန်း ဆေးရုံတွေက သိထားပြီး သား။ ဒီလိုနဲ့ သူကြီးလည်း ထောင်ထဲ ပြန်လာခဲ့တယ်။
ထောင်ဆေးရုံ ကလည်း ဒီတစ်ခါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နွေးနွေးထွေးထွေးပဲ။ သူတို့ သေချာလုပ်ပေးပါ့ မယ်လို့ ပြော တယ်။
ပြီးတော့ အင်းစိန်ဆေးရုံက ပေးလိုက်တဲ့ ကော်လံကို ယူခဲ့ဆိုပြီး ဆေးတပ်သား လေးကို မှာ တယ်။ ဆေးတပ်သားလေးက ချက်ချင်း ပြေးယူလာတယ်။ နောက်ပြီး သူကြီးလည်ပင်း ပတ်ပေးဖို့ ကြည့်လိုက်တော့ အားလုံး မျက်စိမျက်နှာတွေ ပျက်ကုန်ပြီ။ ကော်လံက လည်ပင်းပတ် တဲ့ဟာကို ခါးမှာ ပတ်တဲ့ ဟာ မှားပြီးပါလာတယ်လို့ ဖြစ်ရော။ သူကြီးဘာမှ ပြောချင်စိတ် မရှိတော့ ဘူး။ စိတ်အကြီးအကျယ် ပျက်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ အရိုးကျီးပေါင်ရောဂါ ကိုတောင် ဆက်ပြီး ကုချင် စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ပြဿနာဖြစ်တိုင်း တိုင်မယ်၊ တောမယ်၊ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကိုတောင် ဒီလို ဆက်ဆံနေရင် မပြောရဲ မဆိုရဲ ဘာမှနားမလည်ရှာ တဲ့ ကြောက်တတ်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေဆိုရင် ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့် မိတိုင်း ကြက်သီးထမိတယ်။
ငါးထောင်ပြန်ဇောက်ထိုးနှင့် အမှောင်ဖုံးသွားသော အလင်းတန်းများ
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ထဲမှာ ညီတစ်ယောက်လို ခင်မင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူနာမည်အရင်းက သက်ဇော်လို့မှည့်ထားပေမယ့် အားလုံးက ဇောက်ထိုးလို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူက အရာရာကို သူများမြင် တဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ ကြည့်တတ်မြင်တတ်လွန်းလို့ပါ။ ဇာတိက ရေစကြို သား၊ "ဇ"ကတော့ မသေးဘူး။ ၈.၈.၈၈ ရေစကြိုမှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂစာရွက်တွေဖြန့်ဝေမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအဖမ်းခံရတဲ့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသား။ ဒီကိစ္စကို တစ်မြို့လုံးက မကျေနပ်တဲ့အတွက် ဆူပူအုံကြွတော့ မှ သူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ ကြာကြာမနေလိုက်ရပါဘူး။ ၁၉၈၉ ကျောင်းသား အရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက် စစ်ခုံရုံးက ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်အပြစ်ပေးခံရပါတယ်။ ပခုက္ကူထောင် မှာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် မှာ ထောင်အတွေ့ အကြုံလည်းရပြီ။
ကျောင်းလည်း ပြန်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အတွက် ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ စားဝန်နေရေးအတွက် စာပေနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ စာပေနယ်ရောက်ပေ မယ့် နိုင်ငံရေး သွေးသားကတော့ ဖျောက်ဖျက်မရခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၉ မှာ ကိုးလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ဒုတိယ အကြိမ် အဖမ်းခံရပြန်တယ်။ ဒီအမှုမှာလည်း ထောက်ဒဏ် ၁၇ နှစ်ကျခဲ့တယ်။ အင်းစိန် ထောင်ကနေ သရက်ထောင် ကို ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သရက်မှာ ငါးနှစ်ကျော် ခြောက်နှစ် နီးပါးနေခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြန်လွတ် လာတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (ဗ.က.သ)နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေး ရေချိန်မြင့် တက်လာပြီး ၂၀၀၇ သြဂုတ်လထဲမှာ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကို အကြောင်းပြုလို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အဖမ်းခံရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ကို ထောင်တွေ ရွေ့ ပြောင်းတဲ့အခါ မော်လမြိုင်ထောင်ကို ပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ထောင်နဲ့ ပြဿနာတက်ခဲ့လို့ မော်လမြိုင်က နေ ရွှေဘိုထောင်ကို ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဇောက်ထိုးပုံစံက ဒီဂရီမျက်မှန်ထူထူ လည်ကတုံးအင်္ကျီကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ထားလေ့ ရှိပြီး လက်ထဲမှာလည်း ဖတ်လက်စ စာအုပ် တစ်အုပ်အမြဲရှိပါတယ်။ သူက အတွေးအခေါ် စာအုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်လေ့ရှိပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လည်း အမြဲတမ်းဆွေးနွေးငြင်းခုံ တတ် ပါတယ်။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လည်း မေးတတ်တယ်။ တစ်ဖက် သားကိုလည်း ပညာစမ်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ဇောက်ထိုးလို့ နာမည်ကျော်ခဲ့တာပေါ့။
ရွှေဘိုထောင်က သူအတွက်တော့ ဘဝမှာ ပဉ္စမမြောက်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူပိုင်းဒေသက ထောင်တွေကို မစိမ်းတဲ့ ဇောက်ထိုးအတွက် ရွှေဘိုထောင်က သူ့အတွက် သာသာယာယာပါပဲ။ ဒါ ပေမဲ့ တစ်ရက်မှာ သူ အိပ်ယာက ထလာတော့် အမြင်အာရုံတွေ မှုန်ဝါးနေတယ်။ တဖြေးဖြေးအား စိုက်ကြည့်ရ မြင်ရတယ်။ နဂိုကတည်း က မျက်မှန်သမားတွေဖြစ်နေတော့ မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သိလိုက်တယ်။ ခက်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထောင်တွေမှာ မျက်စိ ဆရာဝန်ဆိုတာ မထားဘူး။ ထောင်သားတွေ အတွက် ထောင်ထဲကို ရံဖန်ရံခါမှလာတတ်တဲ့ မျက်စိ ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်တွေ ကို မျှော်လင့်စောင့်စား ရတယ်။ ခုပြဿနာက ဇောက်ထိုးအနေနဲ့ အကြာကြီးမစောင့်နိုင်ဘူး။ မျက်စိ က မြင်မှမမြင်ရတော့တဲ့ ဥစ္စာ၊ နောက်ဆုံး ထောင်ပိုင်ကြီးကို တင်ပြသတင်းပို့ရတော့တာပေါ့။
ထောင်ကလည်း မျက်စိသမားတော်ကို ရအောင်ခေါ်ပေးပါတယ်။ ဇောက်ထိုးက အရေးကြီး တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတော့ ထောင်အပြင် ထွက်ကုသခွင့်မရဘူး။ အထဲမှာပဲကုသရတယ်။ သမားတော်ကြီး ကလည်း ထောင်ထဲမှာဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ကုပေးပါတယ်။ ဇောက်ထိုးရဲ့ မျက် စိရောဂါ ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ Open angle ဂလိုကူးမား (glaucoma) တဲ့။ မြန်မာ လို လွယ်လွယ်ပြောရရင် ရေတိမ်ရောဂါပေါ့။ တစ်ကယ်တော့ ဒီလို ရောဂါတွေဟာ သေချာစစ်ဆေး ကုသရင် ပျောက်ကင်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်စိကို အဓိကအာရုံစိုက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ သူတွေ အဖို့ခြောက်လ တစ်ကြိမ်လောက် စစ်ဆေးပြီး ကုသရင်ရပါတယ်။ ထောင်ထဲရောက်နေရင်တော့ ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျပြီလို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ ထောင်တွေမှာ မျက်စိကုသဖို့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထောင်ထဲမှာ မျက်စိရောဂါဖြစ်ရင် အခြေအနေပိုးဆိုးလာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ခုလည်း ဇောက်ထိုး မျက်လုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရောဂါကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အချိန်မှာ အရမ်းနောက် ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ သူမျက်လုံးက opitcal Neverse (အမြင်အာရုံကြော)ဟာ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းအတိုင်းကျန်နေသေးတဲ့ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မြင်နေရတာ ပါ။ အလင်းအတွက် မျက်လုံးထဲက အခေါင်းပေါက်က သိပ်ကျဉ်းလွန်းသွားပြီး အမြင်အာရုံရဖို့ အရမ်းအားစိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး မျက်စိ သမားတော် အန်တီက နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအကောင်း အတိုင်းကျန်တဲ့ နာမ်ကြောတွေကို မပျက်စီးစေဖို့ မျက်စဉ်းဆေး တစ်မျိုးခပ်ရန် ဆေးစားရေး ပေးပါတယ်။ ထောင်ကို ၃၀၀၀၀ တန်မျက်စဉ်းဆေးဝယ်ဖို့ပြောတော့ အဲဒီမှာ ပြဿနာတက်တော့ တာပါပဲ။
ထောင်မှာဖြစ်နေတာက ဘတ်ဂျက်ပြဿနာ။ တိတိကျကျရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ထောင်မှာ ဆရာဝန် ရော၊ ဆေးမှူးရော ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေက အကျဉ်းဦးစီးဌာနက ခန့်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံ မရှိဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ ရုံးချုပ်က ဆေးဖိုး ဘတ်ဂျက်ချထားမပေးဘူး။ ဇောက်ထိုးက သူ့မျက်စဉ်းဆေးဝယ်မယ့် ကိစ္စကိုထောင်ပိုင်ရော၊ ဆရာဝန်ရော၊ ဆေးမှူးရော သုံးယောက်စလုံး နဲ့ တွေ့ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်၊ သူတို့ကလည်း ၀ယ်ဖို့တရားဝင် ဘတ်ဂျက်မရှိဘူး။ သူတို့ထောင် ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်နေရတာက ထောင်သားတချို့တလေဆီက လှူပြီး ရတဲ့ငွေရယ်၊ ထောင်သက်သာ ရန်ပုံငွေရယ်မျှတသုံးစွဲပြီး လုပ်ဆောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဘ၀ကလည်း ဆေးသာကုပေးနေရတာ။ ဘ၀အတွက် မှားသွားမှာ၊ ပြဿနာတက်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်နေ ရတယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်။ သူတို့သုံးနေရတာက တရာမ၀င် ငွေကြေးတွေလို့ ခေါ်လို့ရတယ်။ အစိုးရက တရားဝင်ပေး တဲ့ ငွေကြေးကို မရဘူး။ ဒီတော့ ထောင်မှာ ၀န်ထမ်းအဖြစ်ရှိပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံမှာမပါတော့ လူရှိနေပြီး အကြုံးမ၀င်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ဆို သလို လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတယ်။ ဇောက်ထိုးဆိုတာ ဘယ်ထောင်မှာဖြစ်ဖြစ် ဘာမှကြောက် ရွံ့မနေဘဲ မဟုတ်မခံပြန်ပြောတတ်တဲ့သူ၊ ဘာနဲ့ခြောက်ခြောက်တုန်လှုပ်မရှိ တုန့်ဆိုင်းခြင်းမရှိ တုန့်ပြန်တတ်သူ၊ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာရှေ့ ဆုံးတန်းကနေ တတ်သူ။
ခုသူဖြစ်နေတဲ့ မျက်စိပြဿနာမှာတော့ ထောင်ကဆရာဝန်လေးနဲ့ ဆေးမှူးကို တော်တော်သနား သွားတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့က မကုပေးချင်ုတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ခေတ်နဲ့ စနစ်ကြီးကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေရတာလေ။ ၀န်ထမ်း ဆိုတာ ကြိုးနီစနစ်အောက်မှာ ပြားပြားမှောက်နေရတဲ့ဘ၀။ ကြယ်နီ ရေးတဲ့ ကိုဒေါင်းစိန်တို့ မိသားစုနဲ့ ဘာများခြားနားလို့လဲ။ ဒီလိုနဲ့ ငါးထောင်ပြန်ဇောက်ထိုးတစ် ယောက် သုံးသောင်းတန်မျက်စဉ်းခပ် ရဖို့အတွက် သူ့အိမ်ကိုပဲ ထုံးစံအတိုင်းလှမ်းမှာရပါတော့ တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၁၉၉၈ ခုနစ် ကတည်းက ထောင်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ဇောက်ထိုးအ တွက် အကျဉ်းဦးစီး ဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်း ပုံ၊ ငွေကြေး သုံးစွဲပုံ၊ ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်တတ်ပုံတွေကို အလွတ်နည်းပါး သိနေတဲ့အတွက် သူ့မျက်လုံးကုသဖို့ အိမ်ကိုငွေမှာရတဲ့ ကိစ္စ မှာလည်း ထူးမခြားနား ဇာတ်လမ်း တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ရယ်တစ်ဝက် ပြုံးတစ်ဝက်နဲ့ ရင်ဖွင့်သွား ခဲ့ပါတယ်။
၉ လေးလုံးနှင့် ကြက်သားတစ်တုံး
၉လေးလုံးဆိုတဲက ၉ ၉ ၉ ၉ နေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးသပိတ်မှောက်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေ ကြောင့် စစ်အစိုးရ ခေါင်းခဲစရာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှစ်လေးလုံးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ထောင်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်င့ရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကို ၉လေးလုံးမတိုင်ခင်မှာ ခေတ္တ ခဏ ထိန်းသိမ်း လိုက်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေ လူ ၂၀၀ လောက်ကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ခံခေါ်ယူ ပြီးပဲခူးနားက အင်းတိုင်စစ်တပ်ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ အတော်များများ ဟာ ထောင် ထဲက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြွရလို့ အချင်းချင်းတောင် အပြင် မှာပြန် မတွေ့ကြရတာတွေရှိပါတယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ခုလိုခေါ်ယူလိုက်လို့ အင်းတိုင်မှာ အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြ၊ မိသားစု အခြေအနေတွေ မေးကြမြန်းကြနဲ့ပျော်စရာကောင်းနေကြပါသေး တယ်။
အဲဒီအချိန်က မြို့နယ်အလိုက် နိုင်င့ရေး "ဇ"ရှိတဲ့ လူတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့် မြင့်တိုင်က ညီညီလှိုင်၊ ဒဂုံမြို့နယ်က ထက်ရာဇာ၊ တောင်ဥက္ကလာက သျှိုညိုထွန်းသိန်း၊ လှည်းတန်းက ကိုအောင်သူ၊ သင်္ဃန်းကျွ်းက ဗသက်အောင်၊ မှော်ဘီကအေးလွင်၊ တောင်ဒဂုံက ကိုမင်းဇေယျာ စတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေပါ လာကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို အင်းတိုင်မှာ အဆောင်(၂)ဆောင် ခွဲထားပြီး သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးက မနက်ဆိုလက်ဖက် ရည်နဲ့ပဲပလာတာ၊ နေ့လည်နဲ့ ညနေမှာ အသားဟင်းတစ်ခွက်၊ အသီးအရွက်ကြော်တစ်ခွက်နဲ့ ထမင်းကိုကောင်းကောင်းကျွေးပါတယ်။ ညနေခင်းမှာ အားကစား လုပ်မယ်ဆို ခြင်းခတ်၊ ဘောလုံး ကန်လို့ရသလို ညဘက်မှာလည်း ရုပ်မြင်သံကြားစက်က အဆင်သင့်ပါ။ အားလုံးကို တာဝန်ခံတပ် အရာရှိက ၉ ၉ ၉ ၉ မှာ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့ ခေတ္တခဏသာ ထိန်းသိမ်းတဲ့အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုဆိုးတာက လူတွေကို ဘောပင်နဲ့ စာရွက်တွေဝေငှ ပြီး အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးကိစ္စကြီးကို ခုလိုပြန်ဖော်ထုတ်ရတော့ ခံစားမှုတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်ပြီး စိတ်တွေ ဆင်းရဲကြရတာပေါ့။ ပြီးတော့ အခုလိုခေါ်ယူတာဟာ ရမ္မာန်ကြီး တစ် ယောက်ပဲဆိုတော့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သိပ်မရှိကြပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ၉ ၉ ၉ ၉ ကို ဟေးလားဝါးလားနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အင်းတိုင်မှာ နှစ်ပတ်နေပြီး ပြီမို့ အိမ်လည်းပြန်ချင်နေကြပါပြီ။ မိသားစုကိုလည်း လွမ်းနေကြရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ ဗိုလ်မှူးက မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက်နဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ သူကပြန်လွှတ်ပေးချင်ပေမယ့် အထက်လူကြီူးတွေက ၁ နဲ့ ၈ပေါင်းခြင်း ကလည်း ၉ ရတာမို့ ၁၈-၉-၉၉အထိသည်း ခံနေပါဦးလို့ ပြောလိုက်ကြောင်းအားလုံးကို ရှင်းပြပါတယ်။ အားလုံးလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်တော့ ဖြစ်သွား တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် လေးငါးဆယ်ရက်နဲ့တော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး အားလုံးဘာမှ မပြောကြတော့ပါဘူး။ တစ်ရက် တစ်ရက်ထမင်းလေးစားလိုက်၊ ခြင်းလေးခတ်လိုက်နဲ့ ၁၈ရက်နေ့ ကိုမျှော်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၈ရက်နေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။ တချို့က အိမ်ပြန်ဖို့ အ၀တ်အစားတွေတောင် သိမ်းထားပြီပြီ။ တချို့ကလည်း မိသားစုနဲ့တွေ့ချင်နေကြပြိ။ ဆယ်နာ ရီလောက်မှာ တာဝန်ခံစစ်ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးရောက်လာပါတယ်။ သူက အားလုံး ရဲ့ မျက်နှာ ကိုအားနာလို့ မကြည့်တော့ဘဲ ရှင်းလင်းချက်ကို တိုတိုပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောပါတယ်။ အထက်လူကြီး က ၂ရက်နဲ့ ၇ပေါင်းခြင်းကလည်း ၉ရတာမို့ ၂၇-၉-၉၉ အထိ အားလုံးထပ်နေရဦးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပါပဲ။ အားလုံး ဟင်ကနဲ ဟာကနဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း အော်ကုန်ပြီ။ သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပစ်ခဲ့ရတာကြာပြီကိုး။
အဲဒီနေ့ကစပြီး အဆောင်(၂)ဆောင်လုံး ဆူဆူညံညံအပျော်အပျက် စတာနောက်တာတွေ တိုးတိတ်သွားတယ်။ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပါးစပ်က ထုတ်ဖော်မပြောပေမယ့် ၂၇ရက်ကျော် ရင် ကောပြန်လွှတ်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကပေါ်လာတယ်။ ကိုယ့်အနာဂတ်နဲ့ မိသားစု ဘ၀ကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါပြီ။ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သူတွေကတော့ တာဝန်တော်တော်ကျေပါတယ်။ ဟင်းတွေက အရင်ကထက်တောင်ကောင်းလာသေးတယ်။ အင်းတိုင်မှာရှိတဲ့ ရဲဘော်လေးတွေက လည်း ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေလိုအပ်တာ၊ တောင်းဆိုသမျှ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေကတော့ အေးစက်တင်းမာကုန်ကြပြီ။ ရှေ့ရေးအတွက် တိုးတိုးတစ်မျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တစ်မျိုး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြပြီ။ အပြင်လောကမှာ ဆူပူမှုတွေ၊ ဆန္ဒပြမှုတွေ မဖြစ်ပါ စေနဲ့လို့ ဘုရားမှာဆုတောင်းရတာလည်း အမောပါပဲ။ တကယ်လည်း ရန်ကုန်မှာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်သူတွေ ထက်တော့ ၉လေးလုံးကို တော်တော်ကြီးတွက်တားပုံရပါတယ်။ အပြင်က လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ နေ့လည်စာကို ကြက်သားနဲ့ အာလူးဆီပြန်ချက်ပြီး ကျွေးပါတယ်။ အားလုံးက ဟင်းကောင်းပေ မယ့် မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် မစားနိုင်ကြတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ မှော်ဘီလူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီး ထောင်ကျခဲ့တဲ့ မှော်ဘီအေးလွင် (ခယုကျူရှင်ဆရာ)က သူ့အတွက် ချပေးထား တဲ့ ကြက်ပေါင်ကိုမစားဘဲ စူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ သူ့ဘေးက ညီညီလှိုင် တို့ထက်ရာဇာ တို့ကလည်း အေးလွင်ဘာလုပ်ပါလိမ့်ဆိုပြီး အကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။ အေးလွင် ကကြက်ပေါင်ကို မစားဘဲရုတ်တရက်ကောက်ယူပြီး နံရံကိုကောက်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ ထမင်းစား နေတဲ့သူတွေအားလုံး လှုပ်လှုပ် ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အေးလွင်က အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်ပြီး အဆောင် အပြင်ဘက်ကို ပြေးထွက်သွားပါတယ်။
အပြင်ရောက်တော့ မြေကြီးပေါ်ကို ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး ငိုနေပါတယ်။ အေးလွင်နောက်ကို စစ်ဗိုလ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ရဲဘော် သုံးလေးယောက် အပြေးအလွှားလိုက်သွားတယ်။ အားလုံး က အေးလွင်ရုတ်တရက် စိတ်ဖောက် သွားတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ အေးလွင်ကတော့ မျက်ရည်ကျနေရင်း ကနေ မြေကြီးကို လက်သီးနဲ့ အဆက်မပြတ်ထိုးနေတယ်။ လက်တွေ လည်း ပေါက်ပြဲ ပဲ့ရွဲ့ပြီး သွေးချင်းချင်း နီနေပြီ။ ငိုနေတဲ့ အေးလွင်ကို စစ်ဗိုလ်လေးကလည်း အကြောင်းရင်း ကို ချော့မော့မေးမြန်း တယ်။ ဒီတော့မှ အေးလွင်က စစ်ဗိုလ်လေးကို ပြန်ကြည့်ပြီး တစ်လုံးချင်းပြောပြတယ်။
ကျုပ်တို့ကို ခဏဆိုပြီး ဖမ်းထားပေ မယ့်ကောင်းကောင်း ထားတယ်။ ကောင်ကောင်းကျွေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်အိမ်ကထွက်လာရတာ တစ်လရှိပြီဗျာ။ ခု ခင်ဗျားတို့ ကျွေးတဲ့ကြက်သားတုံးကို ကျုပ်ဘယ်လိုမှ မျိုမကျနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းမနဲ့ကလေးငါးယောက် ဘာနဲ့စားနေသလဲ ဆိုတာ တွေးမိလို့ ကျုပ်လုံးဝမစား နိုင်တော့ဘူး ကဲ ရှင်းပြီလား....."
အေးလွင် က စကားဆုံးသွားတဲ့အခါ စစ်ဗိုလ်ကလေးနဲ့ ရဲဘော်တွေလည်း ကြက်သေသေသွား တယ်။ ဘာမှပြန် မပြောနိုင်တော့ဘူး။ အေးလွင်ကို ရဲဘော်တွေကတွဲပြီး ပြန်ခေါ်သွားတယ်။ လက်ကို ဆေးထည့်ပေးတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်အပြီး မကြာခင်မှာပဲ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးက ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ အရပ်ရှည်ရှည်ကလန် ကလားနဲ့ပါ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေကို ရှည်ရှည်လျားလျားရှင်းပြပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က အားလုံးအပေါ်စေတနာထားကြောင်းနဲ့ ခေတ္တထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာ လိုအလေသေး မရှိထားပေးခဲ့ ကြောင်း အခုတိုင်းပြည်မှာ ပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပြီဖြစ်လို့ အားလုံးကို အိမ်ပြန်ပို့ပေး မှာ ဖြစ်ကြောင်းလာရှင်းပြပါတယ်။ ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းထားသူ အားလုံး နဲ့ အေးလွင်ကို ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အင်းတိုင်တပ်နယ်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ အသည်းနှလုံး ထဲမှာတော့ ၉ဂဏန်းတွေ ကြုံတိုင်း မှော်ဘီအေးလွင်မျက်ရည်တွေနဲ့ ကြက်သားတစ်တုံးကို အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေမိပါတော့ တယ်။
အကျင်းထောင်ထဲ၌ ၇၃၀၄ ရက်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း
တစ်နေ့က နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားတွေကို မမောတမ်း မပန်းတမ်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အသားဖြူဖြူ ပိန်ပိန် သွယ်သွယ် ကိုဘိုဘိုဦးကိုတွေ့ပြီး နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ပုံစံက ထောင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀)နေထိုင်ခဲ့ရ မှန်း မသိသာဘဲ အိပ်မက်နိုင်ငံတော်အတွက် လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါ တယ်။ တကယ်တော့ ကိုဘိုဘိုဦး ဟာ ထောင်ထဲမှာ တိတိကျကျပြောရရင် ရက်ပေါင်း (၇၃၀၄)ရက် ကိုနေထိုင်ဖြတ်သန်း ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတ်လက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေက တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို မကြိုက် လို့ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ကိုဘိုဘိုဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကအဲဒီအချိန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှာ အင်္ဂလိပ်စာအဓိကနဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်တက် နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေစက္ကူအရေးအခင်းပြီးတဲ့နောက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုဝင်းကြွယ် တို့နဲ့ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားမှု အစည်းအရုံးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေက ငွေကြေးချမ်းသာကြတဲ့အတွက် ကိုဘိုဘိုဦး ကို နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့မပတ်သက်ဖို့ ဟန့်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကို ကျောခိုင်းဖို့ ခက်ခဲခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ပြင်ပကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်ဖို့ ထွက်ခွာသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရယူရင်း ပြည်တွင်းမှာ စစ်အစိုးရကို အုံကြွတော်လှန်နိုင် ဖို့ အတွက်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဘိုဘိုဦး ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ထောက်လှမ်းသိရှိသွားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ၁၉၈၉ခု စက်တင် ဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အပြောအဆို လိမ္မာပါးနပ် မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးပုဒ်မတွေ အတပ်မခံရဘဲ ရိုးရိုးပုဒ်မနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချပြီး ၁၉၈၉ခုနှစ် အကုန်မှာ ရဲဘက် စခန်းကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုဘိုဘိုဦးကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ သူနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရှား ခဲ့တဲ့ သူတွေ ၁၉၉၀ မတ်လမှာ အဖမ်းခံရတော့ စစ်ကြောရေးမှာ ကိုဘိုဘိုဦးနာမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောလိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဘိုဘိုဦးကို အင်းစိန်ထောင်ပြန်ခေါ်ပြီး စစ်ကြောရေးလုပ် နိုင်င့ရေး ပုဒ်မတွေတပ်ပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ် (၂၀)ပြောင်းလဲ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ကိုဘိုဘိုဦးကို အင်းစိန်ထောင်တိုက်ထဲမှာ သီးခြားချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၇ခုနှစ် ဧပြီ ၁ရက် နေ့မှာတော့ ညဘက်ခေါင်းစွပ်အုပ်ခေါ်သွားပြီး ထောင်ဗူးတံခါးမှာ သံခြေကျင်း အမြန်ရိုက်ကာ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ ထောင်ပြောင်းတာလို့ သိရပြီး ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ရထားနဲ့ မန္တလေးအိုးဘို ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ မန္တလေးအိုးဘိုထောင် မှာနေရမှာ မဟုတ်ဘဲ ခေတ္တရပ်နားတာလို့ သိရပြီး ၄ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ မြင်းခြံထောင်ကို ဆက်လက်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ ပါတယ်။
မြင်းခြံထောင်ကို ၀င်ဝင်ချင်း တန်းစီးတွေ၊ စည်းကမ်းထိန်းတွေရဲ့ ပညာပေးခြင်းကို စတင်ခံရ ပါ တော့တယ်။ မြင်းခြံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ရိုက်နှက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခွင့်ကို အပြည့်အ၀ပေးထားပါတယ်။ ထိုအချိန်က အပြင်မှာလည်း နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းတွေ ထန်နေတော့ ထောင်ထဲကလူတွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖိနှိပ်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ မြင်းခြံ ထောင်ကကြီးပြီး အကျဉ်းသား ၁၂၀၀ကျော် ဆန့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေထားဖို့ ကြိုးတိုက်နဲ့ သီးသန့်မှာတိုက်ခန်းပေါင်း ၄၀ရှိပါတယ်။ ကိုဘိုဘိုဦးတို့ကို ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာ တစ်ဦးချင်း သီးသန့်ခွဲထားပါတယ်။ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်လည်း စကားပြောလို့မရပါဘူး။ စားစရာတွေ လည်းပေးလို့မရပါဘူး။ မိရင်ဝါဒါက တိုက်ပိတ် တယ်။ ထောင်ဝင်စာပိတ်တယ်။ ပေးတဲ့သူရော ယူတဲ့သူရော တိုက်ပိတ်ရုံနဲ့ အားမရသေး ဘဲတိုက် အပြင်ဘက် ခေါ်ထုတ်ပြီး ရိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကိုဘိုဘိုဦးဆိုရင် ဘေးခန်းကို စားစရာခိုးပေးတာ မိသွားလို့ တိုက်ပိတ်ပြီး အရိုက်ခံရပါ တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် အရိုက်ခံရသလဲဆိုရင် ပက်လက်လှန်အိပ်လို့မရတဲ့ အထိပါပဲ။ မြင်းခြံထောင်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ ကာလ တလျှောက် ၁၉၉၇ မှ ၁၉၉၉၉ အတွင်း ၃နှစ်ကာလကတော့ ကိုဘိုဘိုဦးတို့အတွက် အဆိုးရွားဆုံး နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ထောင်တွင်းငရဲခန်း ပုံပြင်တွေပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က ထောင်ထဲမှာစာလည်း ဖတ်လို့ မရ၊ အချင်းချင်းလည်း မတွေ့ရတဲ့အတွက် တော်ရုံ လူတွေအတွက်တော့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြိုလဲပြီး ရူးသွားနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဘိုဘိုဦးကတော့ ဘာသာတရားအဆုံးအမနဲ့ အတက်နိုင်ဆုံး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြတ် သန်းခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ နှစ်(၂၀)အတွင်းမှာ ကိုဘိုဘိုဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေကတော့ ရင်ကျပ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ခါးနာရောဂါတွေ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေကို ကုသဖို့ဆေးတွေကိုတော့ အိမ်ကိုပဲ အားကိုးပြီးမှာကြားရပါတယ်။ ကိုဘိုဘိုဦးအတွက် အမှတ်တရအဖြစ်အပျက်တစ်ခုက တော့ ဘ၀မှာဘယ်လို မှ မေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၅ ကာလတစ်ဝိုက်က ထောင်ထဲမှာ ကူးစက်ရော ဂါမျိုးစုံနဲ့ လူတွေ အရမ်းသေပါတယ်။ ထောင်ဆေးရုံက ဆေးကုသမှုဆိုတာကလည်း မည်ကာမတ္တ ပါပဲ။ ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ လူ ၁၀၀လောက် ခေါင်းရိတ်ပေးတယ်။ ဆေးထိုးအပ်တစ်ချောင်းနဲ့ လူ ၁၀ယောက်လောက်ကို ထိုးတယ်။ ဒီတော့ ရောဂါပေါင်းစုံ က ကူးစက်တော့တာပေါ့။
ထောင်မှာ ဆေးကလည်း မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထဲက တက်နိုင်သူတွေက ၀န်ထမ်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ဆေးတွေခိုးသွင်းပေးရတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း မူးယစ်ဆေးမဟုတ်တဲ့ အဖျားအနာ၊ ၀မ်းကိုက်၊ ခေါင်းကိုက်ဆေးတွေကိုတော့ ခိုးဝှက်ယူလာပေးကြ တာပါပဲ။ အခုအမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင် ၀မ်းကိုက်လို့ ဆရာဝန် တင်ပြတဲ့အခါမှာ ခြေလှမ်း ၂၀လောက် အကွာအဝေးအနေ ရှေ့တိုးမလာဘဲ တစ်ချက် ကြည့်ပြီး Metro ပေး လိုက်လို့ပြောတဲ့ ဆရာဝန်မျိုးလည်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံးထောင်ဆေးရုံ က Metro သုံးလုံးလောက်ပေးပြီး ပစ်ထား လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ခိုးသွင်းထားတဲ့ ဆေးတွေသာမရှိရင် ထောင်ထဲမှာ အသက် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုဘိုဘိုဦးအဖြစ်ကလည်း ကြံကြံဖန်ဖန်လက်မောင်းမှာ ပြည်တည်နာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အနာကရင်းပြီး ကြီးလာတော့ အားလုံးကခွဲလိုက်ဖို့ အကြံပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံကူးစက်ရောဂါ မိုးမွှားတွေ ကပ်နေတဲ့ ဓားတွေကို ကိုဘိုဘိုဦး က ကြောက်နေတယ်။ အနာကရင်းသထက် ရင်းလာတယ်။ သောက်ဆေးနဲ့တော့ လုံးဝ မသက်သာတော့ဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ တိုက်ထဲမှာ NLD အမတ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (ယခုကျောက်ပန်းတောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)ရှိနေတယ်။ သူက အသေးစားခွဲစိတ်မှုဖြစ်လို့ လုပ်ချင်ရင်လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုဘိုဘိုဦး စွန့်စားမှု တစ်ရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့အခန်းထဲမှာပဲ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ အသေးစားခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင်တော့ ဒီကုသမှုဟာ အောင်မြင်ချောမော ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ကိုဘိုဘိုဦး လက်မောင်းမှာတော့ အမာရွတ်လေးရှိနေဆဲပါပဲ။ ဆရာဇော်မြင့် မောင်လည်း ခွဲစိတ်ဓားမကိုင်တော့ဘဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥပဒေတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေရပါပြီ။ ထောင် ထဲမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ဟာ လူ့ဘ၀သက်တမ်းရဲ့ ၅ပုံ ၁ပုံရှိပေမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ စနစ် တခုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့ ဖြတ်ကနဲရွေ့သွားတဲ့အချိန် ကာလလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဘိုဘိုဦးအတွက် ထောင်ထဲမှာ ရက်ပေါင်း ၇၃၀၄ရက် နေခဲ့ရပေမယ့် "ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည် တစ်ခု မွေးဖွားလာဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ ခဏလေးစောင့်လိုက်ရတာပါလို့" မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ရဲ့ ပေးဆပ်မှုဟာ သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကိုဘိုဘိုဦး ရဲ့ ဘ၀က သက်သေပဲ လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
Posted by SHWE ZIN U at 9:29 AM 1 comments Links to this post
Labels: ဇော်သက်ထွေး ၏ ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲ နှင့် နူးညံသော နှလုံးသား
ဇော်သက်ထွေး ၏ ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲ နှင့် နူးညံသော နှလုံးသား, အပိုင်း (၁၁)
မရှင်းဂန်းသရဖီ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
၂၀၀၂ - ၂၂၀၃ ခုနှစ်တစ်ဝိုက် ထောင်တွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း အညွှန်းကိန်း ကတော့ အောက်ဘက် ကိုဇောက်ထိုး စိုက်ဆင်းလျက် ရှိနေတာ ကို တွေ့ရပါ တယ်။ ဆေးကုသ မှု သေချာမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် မဖိတ်စင်သင့်ပဲ ဖိတ်စင်သွား တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထောင်တွေအားလုံးထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ် ကတည်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သာယာဝတီထောင်ရဲ့ "မရဏဆောင်" အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့တဲ့တိုက်ကတော့ ၈ခန်းတွဲ တိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၈ခန်းတွဲတိုက်ဟာ ယခင်ခေတ်တွေကတည်းက ကြိုးပေးမယ့် ကြိုးသမားတွေ ကို နောက်ဆုံးထားလေ့ ရှိတဲ့ တိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ ဒီတိုက်ကို ၀က်မွေးမြူရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံအပြီး မှာ နိုင်ငံရေးသမား တွေကို ပြန်လည် ချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အတိတ်၊ နမိတ်ဆိုးတွေ နဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တိုက်ပီပီ ၁၉၉၈ မှာ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို တစ်ခြားအကျဉ်းသားများ နည်းတူ လျော့ရက်ခံစားခွင့်ပေးထားရာ ကနေ ၁၉၉၇ မှာ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ က ကိုအောင်ကျော်မိုး က လျော့ရက်ခံစားခွင့် အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင်ယင်း အဲဒီတိုက်ပွဲ မှာပဲ ကျဆုံး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်း ကတော့ ထောင်က ရေ ဖြတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ၄ရက်အကြာမှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ပြီး သေဆုံးသွားရတာပါ။
နောက်တော့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားရာကနေ လွတ်ရက်စေ့လို့ လွတ်မြောက်တော့မယ့် အကျဉ်းသားတွေ ကို လွတ်မပေးချင်လို့ ဗူးဝမှာပဲ ပုဒ်မ (၁၀) (က)နဲ့ ပြန်စွဲပြီး ထောင်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ သူတွေကို ၈ခန်းတွဲ တိုက်မှာ လာထားပါတယ်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့ လူက စုစုပေါင်း (၈)ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဌေးကြွယ်၊ လူဘောင်သစ်က ကိုဇေယျ၊ ရင်ထွေး၊ တစ်ခြားအဖွဲ့တွေထဲက စိုးမိုးနိုင်၊ သောင်းထိုက်၊ စည်သူ၊ ကျော်အောင်၊ ဦးအောင်မေသုတို့ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီတိုက်က အရင်ကတည်းက ၀က်မွေးမြူခဲ့တာ ဆိုတော့ ညစ်ပတ်ပါတယ်။
ဒီလူတွေထဲမှာ ပထမဆုံးရောဂါဖြစ်တဲ့သူက ကိုစည်သူပါ။ အဖျးငွေ့ငွေ့ ရှိပြီး မပျောက်တာ ရက်ရှည် လာတော့ ထောင်ဆရာဝန်က ပထမတိုက်ဖွိုက်ထင်ပြီး ကုပါတယ်။ မပျောက်တော့ တီဘီဆေးတွေ ပေးပါတယ်။ တီဘီက မဟုတ်တော့ ငှက်ဖျားဆေးတွေ ပေးပြန်ပါတယ်။ ဒါလည်း မပျောက် ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ဆရာဝန်က ပိုးသတ်ဆေးတွေ ထပ် တိုက်ပါတယ်။ ဆေးတစ်ခါတစ်ခါပေးရင် လက်ခုပ်နဲ့ အပြည့် ဖြစ်နေလို့ ဆရာ ကို သေချာအောင် ပြန်မေးရပါတယ်။ ဆေးတွေ ဒီလောက်သောက်လို့ လိုသလားပေါ့။ ဆရာ ကလည်း ပြောပါတယ်။ ဘာရောဂါမှန်း အဖြေရှာမရလို့ မရှင်းဂန်းသရဖီကုထုံးနဲ့ ကုရတာပါတဲ့။ ဆေးတွေအားလုံး တိုက် လိုက်တော့ အနာနဲ့ရောဂါတိုးရင် ပျောက်မှာပဲဆိုပြီး ရမ်းကုရတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီလောက်ဆေးတွေ များပေမယ့် ကိုစည်သူ က ကံမကောင်းရှာပါဘူး။ နောက်ဆုံး အဆုတ်ကြွေပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာလည်း ဂြိုလ်ဆိုးက ၀င်လာပြန်တာပါပဲ။ ကိုကိုးကျွန်းပြန်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးအောင်မေသု ၀မ်းတွင်း အမြှေးရောင်ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါမျိုးက ချက်ချင်းခွဲရတယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးအောင်မေသု မှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်တွေကြောင့် ၄၈နာရီကျော်ကြာမှ ခွဲရပါတယ်။ ခွဲရတော့လည်း သာယာဝတီထောင်ဆေးရုံ၊ အဲဒီကတစ်ဆင့် မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ အဲဒီက တစ်ဆင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကို သွားဖို့ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံ ကြီးမှာ ခွဲတော့ အားလုံး နောက်ကျသွားပါပြီ။ ဗိုက်ထဲမှာ အူတွေ၊ အူမကြီးတွေ ပွင့် ထွက်နေပြီ။ ဘယ်လိုမှကုလို့ မမီတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဦအောင်မေသုလည်း ၈ခန်းတွဲ တိုက်မှ တစ်ဆင့် စနစ်ဆိုးရဲ့ ၀ါးမြိုခြင်းကို ခံလိုက် ရပါတယ်။
ဒီတိုက်ရဲ့ ကံမကောင်းခြင်းတွေက ဒီမှာပဲ ရပ်တန့်မနေခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ကိုဌေးကြွယ်တစ်ယောက် ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ တာ စဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က စစ်ကြည့်ပြီး ဘာမှ ရေရေရာရာ အဖြေမပေးနိုင် ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတစ်ညမှာတော့ ဗိုက်တအား အောင့်နေလို့ အရေးပေါ် ဆေးမှူး ခေ ရပါတယ်။ ဆေးပဲပေး ပြီး ရောဂါစမ်းသပ်ခြင်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ကျမှ အခြေအနေသိပ်ဆိုးမှန်းသိလို့ ထောင်က သမားတော် ခေါ်ပေး ပါတယ်။ သမားတော်က စစ်ဆေးပြီး အပြင်ဆေးရုံထုတ်မှ ရမယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အပြင် ဆေးရုံ ရောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မခွဲပေးပဲ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ည(၁၁)နာရီကျော် မှာတော့ ကိုဌေးကြွယ်တစ်ယောက် ပြာနှမ်း သွားပြီး အသက်ရှူလည်း နှေးသွားပြီ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ စခွဲဖို့ ပြင်ဆင် ပါတယ်။ အရေးထဲမှာ မီးကလည်း ပျက်နေပါတယ်။ ရှိတဲ့မီးစက်နှိုးပြီး ခွဲရပါတယ်။ ခွဲနေတုန်းမှာ ကိုဌေးကြွယ် မေ့ဆေးပြယ်ပြီး နိုးလာပြန် ရော။
ဒုက္ခတွေ က တသီတတန်းကြီးပါပဲ။ ခွဲလက်စဖြစ်နေလို့ မေ့ဆေးအမြန်ပြန်ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ ထပ်ခွဲ ရပါတယ်။ ရောဂါအဖြေကတော့ တွေ့ပါပြီ။ အူလမ်းကြောင်း ပိတ်နေတာပါ။ သူတို့က အဖြေ မှားပြီး အူပေါက်သွားတယ် ထင်လို့ ခွဲရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်မွေးမြူထားတဲ့ တိုက်ဖြစ်တော့ မသန့်တဲ့ အတွက် အူထဲမှာ သံတွေ နဲ့ ပိတ်သွားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါ ရှာတွေ့ပြီး သံဆေးကျွေးရင် ဖြစ်နိုင် ရက်နဲ့ အခုတော့ ဗိုက်ဖွင့် လိုက်ရသလို အူကိုလည်း ၆လက်မလောက် ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ရပါ တယ်။ ပြန်ချုပ်တော့လည်း အတွင်းချုပ်ရိုး ၈၀ ကျော် အပြင်ချုပ်ရိုး ၂၀ကျော်၊ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ခွဲပြီးပြီးချင်း ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေ မရလို့ Pain Shock ၀င်ပြီး နှလုံးသွေးကြောထုံး သွားပါတယ်။ သတိလည်း လစ်သွားပါတယ်။ သာယာဝတီဆေးရုံ မှာ အခြေအနေမကောင်းတော့မှ အင်းစိန်ဆေးရုံကို နှာခေါင်းပိုက်တန်းလန်း၊ ဆီးပိုက် တန်းလန်း၊ drip ပိုက်တန်းလန်း နဲ့ ရွေ့ပေးပါတယ်။ အင်းစိန်ဆေးရုံရောက်မှ ကိရိယာအစုံအလင်နဲ့ အမြန် ကုသကြရပါတယ်။ ဒါလည်း ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ကုသနိုင်လို့ အသက်ကယ်လိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်းစိန်ဆေးရုံ က ဆင်းတော့ ကိုဌေးကြွယ်ကို အင်းစိန်ထောင်မှာ နေမလား မေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုဌေးကြွယ် က သာယာဝတီထောင်ကိုပဲ ပြန်ချင်တယ်လို့ ဖြေတယ်။ နောက်ဆုံး သာယာဝတီထောင် က ၈ခန်းတွဲတိုက် ကိုပဲ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ တိုက်ပြန်ရောက်တော့ ထူးဆန်းတာ တွေ့ကြုံရတယ်။ သူ့တိုက်ခန်းရှေ့က သူစိုက်ထား တဲ့ သစ်ပင်တွေ မရှိတော့ဘူး။ အားလုံး ရှင်းထားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတော့ ၈ခန်းတွဲ တိုက်ရဲ့ အစဉ်အလာ မှာ "ထွက်ပြီးရင် ပြန်ဝင်တာ မရှိဘူး" လို့ ထောင်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ဖြေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဌေးကြွယ် စိုက်ထား တဲ့ သစ်ပင်တွေကို ရှင်းထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အားလုံး မထင်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ထွက်ပြီးပေမယ့် လည်း ကိုဌေးကြွယ်ကတော့ ပြန်ဝင် လာပါတယ်။ ၈ခန်းတွဲတိုက်ကလည်း ကိုဌေးကြွယ် ဗိုက်ခွဲပြီး နောက်ပိုင်း ဘာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကိုဌေးကြွယ်ကလည်း အမြစ် က နုတ်ခံရတဲ့အပင်တွေ ကို သာယာဝတီထောင်ထဲမှာ ပြန်စိုက်ပေး ခဲ့လေရဲ့။
သူ့နာမည်က ထူးဆန်းနေသည်။ တစ်ခါကြားဖူးရုံနှင့်တော့ ခေါ်ရတာ တော်တော်ခက်သည်။
ဦးမဉ္ဇူသကာရ။ သူက ထောင်ဒဏ် နှစ် (၂၀) ကျခံနေရသူ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်း က ထောင်ထဲ တွင် နေရသူဆိုတော့ ဆယ်နှစ်ကျော်နေသား ရှိသူဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးဖြစ်၍ ခပ်အေးအေး နေ တတ်သည်။ သူ့ဘဝ အတွက် သိပ်ထည့်တွက်တတ်သူမဟုတ်။ သာသနာရေးနယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေ၍ မိသားစု သံယောဇဉ် အနှောင်အတဲမရှိ။ ထို့ကြောင့် ထောင်ဝင်စာလည်း မလာနိုင်ပါ။ ထောင်ထဲရှိ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ရဲဘော်ရဲဘက် များ၏ ကူညီစောင့်ရှေက်မှုနှင့် ထောင်တွင်းဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသူ ဖြစ်သည်။ အင်းစိန်ထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လူစုခွဲပြီး နယ်ထောင်တွေကို ပို့သည့်အခါ ဦးမဉ္ဇူသကာရ လည်း ပါသွား သည်။ သူ ရောက်သွားသည့်ထောင်က မော်လမြိုင်ထောင်။ မော်လမြိုင် ထောင်ဆိုတော့ ပူတာအိုတို့၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောတို့၊ ခန္တီးထောင်တို့ထက်စာရင် ကောင်းမွန် သည်ဟု ပြော၍ရ သည်။ ပြောရမည် ဆိုလျှင် ဦးမဉ္ဇူသကာရ အတွက် ကံကြမ္မာက ဒီလောက်မဆိုးပါ။ တစ်နေ့နေ့တွင် မော်လမြိုင်မှ သူ့ဇာတိ သနပ်ပင်မြို့ ကိုပြန်ရောက်ဖို့ လွတ်မြောက်မည့်အချိန်ကိုသာ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် စောင်စားရမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထူးခြားသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာသည်။ ပြည်သူတွေက ရွေး ချယ်တင်မြောက်သော အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးသည့်နောက် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် လွတ်မြောက်ရေး လမ်းစ ခပ်ရေးရေး မြင်လာရသည်။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျည်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မှတ်ပုံ တင်သည်။ အကျဉ်းထောင် အတွင်း မှ အကျဉ်းသားတချို့ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်များဖြင့် ဆက်တိုက် လွှတ် ပေးနေ သည်။ ဦးမဉ္ဇူသကာရလည်း ဇာတိမြေပြန်နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးအိပ်မက်မက်နေသည်။ ဒီလိုနှင့် ၂၀၁၀၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဦးမဉ္ဇူသကာရ ခေါင်း ၌ အဖုသေးသေး တစ်လုံးပေါက်လာသည်။ စပေါက်ပေါက်ခြင်း တော့ သွေးစုနာလိုလို ယားနာ လိုလို ဘာမှ မဟုတ်သည့် အနာခပ်သေးသေးလေးတစ်လုံးရယ်ပါ။
သူက လည်း ပေါ့ပေါ့တန်တန် ပဲ သဘောထားလိုက်သည်။ အနာကို ထုံးတွေ ဘာတွေတို့ထားလိုက်သေး သည်။ သို့သော် အနာက ချက်ချင်းပျောက်မသွားဘဲ အရည်ကြည်ဖုကလေးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပြန့် ထွက်လာသည်။ တစ်စတစ်စနှင့် အနာကပွားသွားပြီး ခေါင်းတစ်ခုလုံး အနာဖြစ်လာသည်။ အင်္ဂလိပ် ဆေး၊ ဗမာဆေး မျိုးစုံ လိမ်းကြည့်သည်။ အနာက ပျောက်မသွား။ ဆေးတွေစားရပြီ။ သေဖော်ရှင်ဘက် တွေလည်း ဝိုင်းကြဝန်းကြရပြီ။ ထောင်ကိုလည်း သတင်းပို့အကြောင်းကြားရပြီ။ သို့သော် ထုံးစံအတိုင်း ထောင်ဆေးရုံက ဘာမှလုပ် မပေးနိုင်ပါ။ ဦးမဉ္ဇူသကာရ၏အနာတွေက လုံးဝမသက်သာ။ ဝေဒနာတွေ က မပျောက်။ ထောင် အခေါ်တော့ ဤကဲ့သို့ အနာမျိုးကို "ဆင်ရေယုန်" ဟု ခေါ်ကြသည်။
တစ်ပတ် နှစ်ပတ်အတွင်း သူ၏အနာတွေက နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လာသည်။ ကျောတွေ ရင်ဘတ်တွေပေါ် ကို ကူးကုန်သည်။ လက်တွေပေါ်ကိုလည်း ရောက်လာသည်။ တစ်ခဏအတွင်းမှာ ဦးမဉ္ဇူသကာရမှာ အိပ်ယာထဲလဲသွားသည်။ ထိုအခြေအနေအထိ ဆေးရုံတက်ခွင့်မရသေး။ အားလုံးက ဆရာဝန်ကို ဝိုင်း ပြီး တောင်းဆိုပေး ကြသည်။ နောက်ဆုံး ထောင်ဆေးရုံကို တင်လိုက်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ ထောင်မှာက အထွေထွေ ကုသော ဆရာဝန်ပဲရှိသည်။ အရေပြားအထူးကုမရှိ။ ထို့ကြောင့် အပြင်ရှိ မော်လမြိုင်ဆေးရုံ မှ အရေပြား ဆရာဝန်ကို လူနာအာားကည့်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံသည်။ အကြောင်းပြချက်က ကုမပေးရဲ ဘူးဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ထောင်ဆေးရုံမှာပဲ ဆက်လက်ကုသရတော့သည်။ ဒါပေမဲ့ ဦးမဉ္ဇူသကာရ ၏ရောဂါမှာ သက်သာမလာပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးက အင်းစိန် ထောင် သို့ ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပေးပြီး ရန်ကုန် တွင် ဆေးကုသခွင့်ရရန် ကြိုးစားပေးကြသည်။
ကြိုးစားမှုက အရာမထင်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေက တင်းကျပ်လွန်းနေသည်။ ကြိုးနီစနစ်တွေက အကျဉ်းထောင် မှာ အားကောင်းရှင်သန်နေဆဲ။ ဝန်ထမ်းတွေက အသက်တစ်ချောင်းကယ်တင်ရန် စွန့် စားလိုစိတ်မရှိဘဲ ကိုယ့်အပေါ် အပြစ်ပုံ မကျစေရန်အတွက်သာ ဦးစားပေး စဉ်းစားသည်။ သို့သော် ထောင်ဆေးရုံက အတတ်နိုင် ဆုံး ကုသပေးမည် ဟု အာမခံသည်။ ဦးမဉ္ဇူသကာရက အခြေအနေက တော့ လမ်းပင် မလျှောက်နိုင်တော့။ ဆေးရုံတွင် ဝေဒနာမသက်သာ၍ ကယ်ပါ ယူပါ အော်ဟစ်နေရ သော သူ့အသံကို နားထောင်နေရသည် မှာ စိတ်မချမ်းသာ။ အစာလည်း မစားတော့ပြီ။ ထိုအခြေအနေ ရောက်မှ အကျဉ်းထောင် တာဝန်ရှိသူတွေလည်း လှုပ်ရှားလာသည်။ ရုံးချုပ်မှလည်း သံကြိုးစာဝင်လာ သည်။ အပြင်ဆေးရုံတွင် တတ်နိုင်သလောက် တင်ပေးပါ။ လုံခြုံရေးရရင် အင်းစိန်သို့ရွှေ့ပြောင်းပေး မည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အားလုံးက ဦးမဉ္ဇူသကာရ ကို အမြန်ဆုံးဆေးရုံတင်ရန် ပြင်ဆင်ကြတယ်။ သို့သော်လည်း ဦးမဉ္ဇူသကာ ရက အား မထုတ်တော့ရန်ပြောသည်။ သူ့အခြေအနေကို သူ သိနေသည်။ အပြင်ဆေးရုံပို့ရန် ပြင်ဆင် နေစဉ် သူ အသက်ပျောက် သွားသည်။ သံကြိုးစာရောက်ပြီး ၃ နာရီအကြာမှာ သူ ဆုံးပါးသွားခြင်းဖြစ် သည်။ ဦးမဉ္ဇူသကာရ မှာ လူရုပ်ပင်မပီပြင်တော့။ ကံကြမ္မာသည် အနာလေးတစ်လုံးမှသည် လူ့အသက် တစ်ချောင်း ဆုံးရှုံးသည်ထိ ဖြစ်တတ်ပါသလား။ သူ့အတွက် ဒေသခံအကျဉ်းသားတစ်ယောက်က ငွေ ၃၅၀၀၀ တန် ခေါင်း တစ်လုံး လှူဒါန်းသည်။ ကျန်သူတွေက ဆွမ်းသွပ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြ သည်။ သနပ်ပင်သား တစ်ယောက်မှာတော့ ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေကို မပြန်နိုင်တော့။ သူ့ကို ဆင် ရေယုန်က သတ်လိုက်သည်။ သူ့၏ လွတ်လပ်ပွင့်လင်း တရားမျှတသော အိပ်မက်နိုင်ငံတော် ပျောက် ဆုံးသွားသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ်ကြာ ရှင်သန်ဖြတ်သန်းနေသော အလံတစ်လက်ကြိုးပျက်သွားခဲ့သည်။ သူ့မျှော်လင့်ချက် သူ့စိတ်ကူး အိပ်မက်များ ပြိုကွဲသွားခဲ့သည်။
အကယ်၍သာ ဦးဇင်းခေါင်းတွင် အနာမပေါက်ခဲ့ပါက ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မှ ပေးခဲ့သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များတွင်နှင့် ဦးမဉ္ဇူသကာရ ပါလာမည်မှာ မလွဲပါ။ ခုတော့ ကြေကွဲ ဖွယ်ရာ လောကဓံတရားနှင့် သူ ရင်ဆိုင်သွားရရှာသည်။ လောကတွင် မည်သူမဆို လောကဓံ လှိုင်းတံ ပိုးများကိုတော့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရစမြဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖိနှိပ်မှုအတိ ဖုံးလွှမ်းနေသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် လူဖြစ်ခဲ့ရသည့် ဦးမဉ္ဇူသကာရ အဖြစ်ကတော့ ကြေကွဲစရာ ကောင်းလွန်းသည်။ သူ လိုချင်သော တရားမျှတမှု လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် ပေါင်းစည်းမှုကို တွေ့မြင်မသွားခဲ့ရှာပေ။ သူ့ ဘဝတွင် ပေးဆပ်မှုနှင့် ရုန်းကန်မှုကိုသာ လုပ်ဆောင်သွားရရှာသည်။ ဦးဇင်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါ စေ၊ ဘဝဆက်တိုင်း ဤကဲ့သို့ ကူရာမဲ့ ကယ်ရာမဲ့ အဖြစ်ဆိုးမျိုးနှင့် ဘယ်သောအခါမှ မကြုံတွေ့ရပါစေ နဲ့ဟု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကတော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါ တယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက လောင်စာဆီဈေးမြှင့်တက်လာတာကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးခံရသလို ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ သံဃာတော်တွေက မေတ္တာ သုတ်ရွတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ကြွချီတဲ့အတွက် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (Saffron Revolution) လို့ ကမ္ဘာက တင်စားခေါ်ဝေါ် တဲ့ အရေးအခင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအမြောက်အမြား ဖမ်းဆီး ခြင်း ခံခဲ့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှိုင်းတံပိုးတွေက ဒီမှာရပ်တန့်မသွားဘဲ နိုင်ငံသားတွေအပေါ် ဘေးဒုက္ခ ကပ်ဘေးတွေ ကျရောက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အကြောင်းပြုလို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဘက်ကို ဆက်လက်ကူးသွားပါ တယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းမှာ လူပေါင်းသိန်းချီ သေဆုံး၊ သန်းချီ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ လို့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းပြီး စာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီပေးခဲ့ပါ တယ်။
နိုင်ငံတကာ ကလည်း ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဝင်ရောက်ကူညီဖို့ တောင်းဆိုတာကို မြန်မာအစိုးရက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ဟုဆိုကာ လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့ လို့ ဝေဖန်သံတွေလည်းသောသောညံနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဧရာဝတီတိုင်းက ဒုက္ခသည်တွေ ရဲ့အကြောင်း အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် ကမ္ဘာက သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး မှာ မီဒီယာလောကက သတင်းသမားတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဂီတာသဘင်နယ်ပယ်က အနုပညာရှင်တွေဟာ ဒုက္ခ ရောက်တေတဲ့ ဧရာဝတီပြည်သူ ပြည်သားတွေကို စာနာပြီး ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို အင်တိုက်အား တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးသူ တချို့ကတော့ အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ နာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး ၁ လနဲ့ ၉ ရက်အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် သတင်းတွေဖြန့်ချိမှုနဲ့ လူရွှင်တော် အနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာဟာ ထောက်ဒဏ် ၅၉ နှစ် ၆ လ ပြစ်ဒဏ် ပေးခြင်း ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက် သူ့ကို အင်းစိန်ထောက်မှာမထားဘဲ မြစ်ကြီးနား ထောင်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ ကို မြစ်ကြီးနားထောင် ပြောင်းတော့ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကနေ ရထားနဲ့ မန္တလေးကို ပို့ပါ တယ်။ မန္တလေးက တစ်ဆင့် မြစ်ကြီးနားကို ထပ်သွားရမှာပေါ့။ သူ့ကို လိုက်ပို့တဲ့ရဲအစောင့်အရှောက် က လည်း များပါတယ်။ လူစီးတွဲထဲမှာ ဇာဂနာ ကို တွေ့တဲ့လူတိုင်းဝမ်းသာအားရ လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ဇာဂနာ ထောင်ပြောင်း ခံရတဲ့သတင်းကလည်း နိုင်ငံတကာမှာ ပြန့်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရထားက ညနေ ပျဉ်းမနား ဘူတာ ကို ဝင်တဲ့အခါ တွဲပေါ်ကို ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကိုဇာဂနာ နာမည်ကိုခေါ်ပြီး တွဲပေါ် တက်လာပါတယ်။ သူ့ နောက်မှာလည်း ထမင်းချိုင့်တွေ၊ စားစရာတွေ ဆွဲလာ တဲ့ ဒါကာ၊ ဒါကာမတွေပါ လိုက်လာကြတယ်။ ကိုဇာဂနာ က ဘုန်းကြီးကိုတွေ့တော့ ရုတ်တရက် မမှတ်မိနိုင်အောင် ဖြစ်နေတယ်။ ဘုန်းကြီးကတော့ သူ့ကို တွေ့တွေ့ချင်း ဝမ်းသာအားရ ဖက်လိုက်တယ်။ သူ့ကို မှတ်မိလားလို့ မေး တယ်။ ကိုဇာဂနာက ချက်ချင်း မဖြေနိုင် ဘဲ တွေဝေနေတဲ့အချိန်မှာ ဘုန်းကြီးက ဖြေလိုက်ပါတယ်။
"ငါ... ချန်ပီယံ တင်ညွှန့်လေကွာ မင်း မမှတ်မိဘူးလား"
အဲဒီလိုပြောမှ ပဲ ချက်ချင်း မှတ်မိသွားပါတယ်။ တချိန်က ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ထဲမှာ အသံတုဝိဇ္ဇာလုပ်ခဲ့လို့ ချန်ပီယံတင်ညွှန့် လို့ ခေါ်ရတဲ့ မိတ်ဆွေရင်းချာ တစ်ယောက်ကို သင်္ကန်းဝတ်နဲ့တွေ့ရတော့ အံ့သြသွား ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး က ဘီဘီစီ သတင်းနားထောင်ပြီး ဇာဂနာကို ထမင်းကျွေးချင်လို့ ဒါကာတွေနဲ့ ဘူတာ က စောင့်နေတာ လို့ ဆို ပါတယ်။ လမ်းမှာစားသွားဖို့ ထမင်းတွေ၊ ဟင်းတွေ ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ ကိုဇာဂနာတင်မကဘဲ လုံခြုံရေး ပါလာတဲ့ ရဲတပ်သားဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ဝေငှကျွေးမွေးပါတယ်။ ကိုဇာဂနာက အံ့သြနေပေမယ့် ဘုန်းကြီး တစ်ဖြစ်လဲ ချန်ပီယံတင်ညွှန့် ကို ဦးချကန်တော့ပြီး ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာနဲ့ မန္တလေးကို ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ပါ တယ်။
မန္တလေးသွား လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ဆုံ ခဲ့ရတဲ့ ချိန်ပီယံတင်ညွှန့် အကြောင်းကိုလည်း ပြန်လည်မြင်ယောင်လာမိပါတယ်။ သေချာပြန်စဉ်းစား ကြည့်ရင် ၁၉၉၈ အရေးအခင်း မှာ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်က အနုပညာရှင်တွေ အတော်များများ ပါဝင်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီထဲကမှ ထောင်ထဲကို ဒါရိုက်တာမောင်ခက်ပန်၊ မင်းသား ဦးအောင်လွင်၊ ဦးမိုးသူ၊ ဇာဂနာ၊ ဇင်ဝိုင်း၊ အရိုင်းတို့ ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အားလုံးနဲ့ဖြစ်ရပ်မတူဘဲ ထူးထူးခြားခြားအမှုနဲ့ ထောင်ထဲရောက်လာခြ့တဲ့ အနုပညာသမား တစ်ယောက် လည်း ရှိပါတယ်။ သူကတော့ ချန်ပီယံ တင်ညွှန့်ပါပဲ။
ချန်ပီယံတင်ညွှန့်အဖြစ်က ရယ်စရာလည်းကောင်းတယ်။ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်း အပြီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဦးတင်ညွှန့်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် စီးလာတဲ့ ကားကို စစ်ရုံးနား မှာ တွေ့တော့ ခဲကောက်ပြီး ပေါက်ဖို့ကြံရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ သူ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အင်းစိန်ထောင် ထဲရောက်လာပါတယ်။ သူ့ကို အင်းစိန်ထောင် အထူးဝင်းထဲမှ ဇာဂနာ၊ အရိုင်းတို့နဲ့ အတူ ထားတယ်။ ထောင်ထဲရောက်ပြီး နှစ်လလောက်အကြာမှာတော့ ဦးတင်ညွှန့် ထောင် ရောဂါတွေ စရလာ တယ်။ ထောင်ရောဂါဆိုတာကတော့ ဝဲတွေ၊ ပွေးတွေ စပေါက်လာတာကို ပြောတာ ပါ။ အဲဒီအချိန်က အိမ်တွေနဲ့ လည်း မတွေ့ရတော့ ဆေးလည်းရှားတယ်။ လိမ်းစရာ၊ သေက်စရာ မပေါ များဘူး။ ဦးတင်ညွှန့်က ခါးတွေ၊ ပေါင်တွေ၊ မတော်ရာတွေမှာ ဝဲတွေပေါက်နေ တယ်။ နောက်ဆုံး ထောင် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးကြည် လာတော့ ဦးတင်ညွန့်က ဆေးတောင်းတယ်။
ဦးစိုးကြည်က ဘာရောဂါဖြစ်လို့လဲဆိုတာ မေးတယ်။ ဦးတင်ညွန့်က ပြောရမှာ ရှက်လို့ ခါးနာတာလိမ်းချင်လို့ ပရုပ်ဆီ လေး လိမ်းဆေးလေး လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ဆရာကလည် ဆေးတပ်သားနဲ့ လိမ်းဆေးပေး လိုက်တယ်။ ချန်ပီယံဦးတင်ညွှန့် က ညဘက်ရောက်တော့ ဆေးလိမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိမ်းပြီး သိပ်မကြာ ပါဘူး။ ဦးတင်ညွန့်အခန်းက အော်သံတွေကြားရတာပဲ။ အကျိုးအကြောင်း စုံစမ်းကြည့်တော့ မတော်ရာ မှာ ပူပြီး မနေနိုင်လို့ အော်နေတာတဲ့။ ကိုဇာဂနာတို့ ကိုဇင်ဝိုင်း တို့က သဲလွန်စလိုက်တဲ့အခါ ဆေးခန်းက ပေးလိုက်တဲ့ လိမ်းဆေး က ပရုပ်ဆီမဟုတ်ဘဲ တေဇောဘမ်းတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ချန်ပီယံတင် ညွှန့် အော်နေတာပေါ့။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ဆိုသလို ချန်ပီယံကြီး လည်း ထောင်ထဲမှာ အစအနောက် ခံခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ ထောင်ထဲမှာ လေးငါး ခြောက်လနေပြီး လွတ်သွား ပါတယ်။
လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက် ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ချန်ပီယံတင်ညွှန့် ဆိုတာ နာမည်မတွေ့ရတော့ဘူး။ သူ့အကြောင်း လည်း မကြားရတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ချန်ပီယံ တင်ညွန့် ဟာ ထောင်ထဲကထွက်လာပြီး ရုပ်ရှင်နယ်က သူ့ကို လက်ရှောင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ကို မြှောက်ပေး တဲ့သူတွေကလည်း သူ့ကို မကူညီတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ညစ်ပြီး အရက်နွံထဲမှာ နစ်သွားတယ်။ အကြွေးတွေလည်း တင်နေတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း ပြိုကွဲသွားတယ်။ နောက်ဆုံး မီးရထားသံ လမ်း နံဘေးက အရက်ပုန်းဆိုင်မှာ ဘဝပျက်နေတဲ့ ချန်ပီယံတင်ညွှန့်ကြီး ကို ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒေါ်ချိုပြုံး က မကြည့်ရက်လို့ အရက်ဖြတ်ဖို့ ကတိတောင်းပြီး ရဟန်းဒါယကာမ အဖြစ်ခံယူကာ ဘုန်းကြီးဝတ်စေခဲ့ ပါတယ်။ ချန်ပီယံတင်ညွှန့်ဟာ သာဂရမြို့မှာ ဘုန်းကြီးအပြီး ဝတ်ပြီး လူဝတ်ကြောင်ဘဝကို အပြီးတိုင် စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။
အခုနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် နီးပါးကြာမှ ကိုဇာဂနာနဲ့ ချန်ပီယံတင်ညွှန့်တို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးရထားပေါ်မှာ ဆုံ တွေ့ကြ ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်တွေ့တော့လည်း ဇာဂနာက စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ထောင်ကျအကျဉ်း သားအဖြစ်နဲ့။ ချန်ပီယံတင်ညွှန့်က ဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့။ ကံကြမ္မာတွေက တော်တော်ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံတင်ညွှန့် ကလည်း ထောင်က လွတ်ပြီး ပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့ လောကဓံ ရဲ့ဖိစီးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရင်း နောက်ဆုံး သံသရာက လွတ်မြောက် ရာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ကင်းဝေးရာလမ်းကို တွေ့သွား ပါတယ်။ ခုဆိုရင် ချန်ပီယံတင်ညွှန့် သာသနာ့ဘောင်ရောက်ခဲ့တာ ဝါနှစ်ဆယ်ကျော်ရှိပါပြီ။ ရန်ကုန်ကို လည်း ကျောခိုင်းစွန့်ခွာခဲ့ပြီးပါပြီ။ အမှားနဲ့ အမှန်၊ တရားမှု၊ မတရားမှုတွေကိုလည်း ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါပြီ။ သာဂရမြို့မှာ သာသနာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ငြိမ်းချမ်းနေ ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အနုပညာလောကထဲက ထောင်ကျဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဂနာကို ထမင်း တစ်နပ်လောက် ကျွေးလိုက်ချင်တဲ့ သူ့သံယောဇဉ် စိတ်စေတနာကတော့ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by SHWE ZIN U at 8:12 AM0comments Links to this post
ဒေါက်တာအောင်ကြီး ၏ အဆွေးလူ၊ အတွေးလူ၊ သိမ့်မွေ့လူ, အပိုင်း (၁၈) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်ဘွဲ့ယူတော့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ အဓိဋ္ဌာန်ပြု ကတိသစ္စာရွတ်ဆိုရတယ်။ ဒါမှ ဆရာဝန် လားမြောက်တော့တာ။ ကတိသစ္စာအစမှာ ဒီလိုတိုင်တည်တယ်။
“ကမ္ဘာတစ်လွှား ကျော်ကြားထင်ရှားခဲ့သော သမားဟူးရားကြီးများအား သက်သေထား၍ ကျွန်ုပ်သည် ဤအဓိဋ္ဌာန်ပြု ကတိသစ္စာကို ရွတ်ဆိုသစ္စာပြုပါအံ့”တဲ့။
အဘိဓာန်ကြည့်လိုက်တော့ သက္ကတစကား“ဟောရာ”က လာသတဲ့။ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာ အတတ်ကို ကျွမ်းကျင်သူ လို့ အဓိပ္ပာယ်ရသတဲ့။ ဟ ... အနောက်တိုင်းဆေးပညာနဲ့ ဟူးရားနဲ့က ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ပတ်သက်နေ ပါလိမ့်။ သမားတော်ကြီးများလို့ ရိုးရိုးလေးရေးလိုက်ရင် ရရက်သားနဲ့ဗျာ။ “ဟူးရား” လိုက်သေး တယ်။ ဒီအဓိဋ္ဌာန်ပြု ကတိသစ္စာက ဟစ်ပိုခရေးတီး(စ)ရဲ့ သစ္စာပြုချက်ကို အခြေခံပြီး မွမ်းမံထား တာပါ။ ခေတ်ကာလ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရလေအောင်။
ဟစ်ပိုခရေးတီး(စ)ရဲ့ သစ္စာပြုချက်က ဒီလို အစချီတယ်။
“သမားတော်ကြီး အပိုလိုနတ်မင်း၊ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)၊ ဟိုင်ဂျီးယား၊ ဖနားဆီးယားတို့ကို တိုင်တည် ပြီး ကျွန်ုပ် ကျိန်ဆိုတယ်”တဲ့။
ဆေးရုံတွေ၊ ဆေးကျောင်းတွေ၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက သုံးစွဲနေကြတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် (Logo)မှာ တုတ်တစ်ချောင်း နဲ့ မြွေနှစ်ကောင်ပါတယ်။ အဲဒီတုတ်နဲ့ မြွေက ဒီ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)ကို အကြောင်း ပြုပြီးပေါ် လာတာ။
အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)ကို ဂရိတွေက ဆေးပညာနယ်လို့ သတ်မှတ်ပူဇော်ကြတယ်။ စာဆိုကြီး ဟိုးမား ကတော့ “ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်သမားတော်”တဲ့။ သူ့အဖေက အပိုလိုနတ်မင်း။ အပိုလိုနတ်မင်းကိုယ်နှိုက် ကလည်း စိုက်ပျိုးရေးနတ်၊ အလင်းရောင်နတ်၊ သစ္စာနတ်၊ လေးမြားအတတ်နတ်၊ ဂီတကဗျာနတ် စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ အပြင် ဆေးပညာနဲ့ သမားအတတ်တို့ရဲ့ နတ်မင်းလည်းဖြစ်သတဲ့ဗျ။ သမားတော်နတ်မျိုးနွယ် တွေပဗျာ။
အပိုလိုနတ်မင်း က လူသားမိန်းမ ခိုးရိုးနစ်(စ)နဲ့ စုံဖက်မိသတဲ့။ (အပိုလိုနတ်မင်းက မိဖုရားတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်)။ ယောက်ျားချစ်သူတောင် ရှိသေးသတဲ့)။ ခိုးရိုးနစ်(စ)က လှပသလောက် အကျင့်လော် လည် သတဲ့။ ဒီသတင်းကို ကျီးငှက်က သယ်ဆောင်လာပြီး အပိုလိုကို တိုင်သတဲ့။ အပိုလိုနတ်မင်းက ဆံတစ်ပင်တင်း ချစ်ခြင်းမယားရဲ့ သတင်းကို မယုံနိုင်ဘူး။ သတင်းသယ်လာတဲ့ ကျေးစေတမန်ကို ဒေါသ ဖြစ်ဖြစ်နဲပ ဒဏ်ခတ်လိုက်တာ နဂိုက ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ ကျီးကန်းရဲ့ အမွေးတွေအားလုံး မည်းနက်ကုန် သတဲ့။
နောင်တော့မှ သတင်းမှန်ကို လက်ခံအတည်ပြုပြီး ချစ်ဇနီးကိုသတ်၊ အလောင်းကို မီးသဂြိုလ်ဖို့ စီစဉ်သတဲ့။ မီးတောက်တွေ အလောင်းကို ၀ါးမျိုခါနီးကျမှ ဇနီးသည်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေမှန်း သိလိုက်ရတော့ သေနေတဲ့ ချစ်သူ့ ၀မ်းကြာတိုက် ထဲက သားငယ်ကို ခွဲစိတ်ထုတ်ယူလိုက်ရသတဲ့။ အဲဒီကလေးက အက်(စ)ခလေး ပီးယပ်(စ)လောင်းလျာလေး ပဲပေါ့။
မိတဆိုးလေးကို ဖခင်အပိုလိုနတ်မင်းက ဆင်တောလို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ပိုင်းမြင်းတစ်ပိုင်း ခီရွန်ဆီမှာ ပညာ သင်ကြားဖို့ အပ်နှံတယ်။ ခီရွန်က ပညာရှိသလောက် နှလုံးနူးညံ့လှသူ။ ဟာကျူးလီး(စ)၊ အာခီးလီး(ခ)တို့ကို ပညာသင်ပေးတဲ့ ဆရာကြီး။ တပည့်တွေထဲမှာ ခီရွန်အချစ်ဆုံးက အက်(စ)ခလေးပီးပ်(စ)ပါ။ သူ့ကို သမားတော်အတတ် သင်ကြားပေးတယ်။ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)ဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှု အတတ် မှာရော ဆေးဖက်ဝင်အပင် အသီးအပွင့်နဲ့ ရောဂါကုသတဲ့ အတတ်မှာပါ တစ်ဖက်ကမ်းခပ် တတ်မြောက် သွားသတဲ့။ သူ့အတတ်နဲ့ လူတော်တော်များများရဲ့ အသက်ကို သေမင်းခံတွင်းဝကနေ ဆွဲထုတ်ကယ်တင်နိုင် ခဲ့သတဲ့။ လူသားဟာ အချိန်တန်ရင်၊ ကံကုန်ရင် သေရတယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝဓမ္မကို အက်(စ)ခလေးပိးပ်(စ)က အန်တု သလို ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။
လူနဲ့ နတ်တို့ရဲ့သခင် ဇုနတ်မင်းကြီးက အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)ကြောင့် လူတွေ ထာဝရအသက်ရရင် ခက်ရချေ ရဲ့လို့ ပူပန်ကြောင့်ကြလာသတဲ့။ ဒါကြောင့် ဇုနတ်မင်းကြီးဟာ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)ကို မိုးကြိုး လက်နက်သုံးပြီး သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဂရိတွေက သူ့ကို ဆေးပညာနတ်၊ သမားတော်နတ်အဖြစ် ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ အပြင် သူ့တပည့်တွေက သူ့နာမည်န့ ဆေးပညာသင်ကြားပေးရာ လူနာ ကုသပေးရာ ကျောင်းတွေ ထူထောင်ကြတယ်။ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရဲ့ ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဟစ်ပိုခရေးတီး(စ) ဟာ အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးထွက် တစ်ဦးပေါ့။
အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)က တစ်နေ့မှာ ဇုနတ်မင်းကြီးရဲ့ မိုးကြိုးလက်နက် ထိမှန်သေဆုံးသွားတဲ့ ဂလော် ကော့(စ) ဆိုတဲ့ လူနာကို ကြည့်ရှုစမ်းသပ်နေခိုက်မှာ အခန်းထဲကို မြွေတစ်ကောင် လျှောခနဲ ၀င်လာ သတဲ့။ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)က သူ တောင်ဝှေးအဖြစ်သုံးတဲ့ တုတ်နဲ့ ကောက်ရိုက်လိုက်တာ မြွေက ပွဲချင်းပြီး ပဲတဲ့။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ နောက်မြွေတစ်ကောင် ၀င်လိုက်လာပြီး သေနေတဲ့ မြွေရဲ့ ပါးစပ်ထကြို ဆေး ရွက် တချို့ ထိုးထည့်တာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာတင်ပဲ သေနေတဲ့မြွေ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတာ အားလုံး အံ့အားတသင့် တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီဆေးရွက်တွေကို သေနေတဲ့လူနာရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပေး လိုက်တော့ လူနာ သေရွာက ပြန်လာရောတဲ့။
အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)က မြွေကို သူ့ဆရာလို့ အမှတ်ပြုလိုက်ပြီး တုတ်ချောင်းမှာ ခွေနေတဲ့မြွေပုံကို သူ့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် လေးစားစွာ အသုံးပြုတော့သတဲ့။ တုတ်ချောင်းက ဆိုက်ပရပ်ပင်ရဲ့ အကိုင်းကို ချိုးထား တာပါ။ မပြုမပြင် အရိုင်းထည်သက်သက်။ ဒါကြောင့် သူ့တုတ်က ဖုထစ်တွေနဲ့ မပြေအပြစ်။ အချော သပ်ထား တဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ တုတ်ချောင်းမဟုတ်ဘူး။ နောင်နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာ တဲ့အထိ ဒီမြွှေတစ်ကောင် ရစ်ခွေနေ တဲ့ တုတ်ချောင်းပုံကို ဆေးပညာအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် သုံးခဲ့ကြတာ အလယ်ခေတ် ရောက်သည်အထိပေါ့။
အလယ်ခေတ်မှာ ခရစ်ယာန်သာသနာ ပွင့်လင်းစည်ပင်လာတော့ ဂရိခေတ်ရောမခေတ် နတ်ဘုရားတွေ၊ အမှတ်တံဆိပ်တွေ အားလုံးဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးက ပိတ်ပင်တားမြစ်တာ ခံရတယ်။ မြွေတစ်ကောင် တုတ်တစ်ချောင်း လည်း အများနည်းတူ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်နေရပေါ့။ သူ့နေရာမှာ ဆီး ခံ တဲ့ ခွက်ကဆေးပညာ၊ သမားတော်တို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပေါ့။ ဆီးကို စမ်းသပ်ကြည့် ရှုပြီး ရောဂါ ရှာဖွေတဲ့ဓလေ့က အဲဒီခေတ်မှာ ထွန်းကားနေပေတာကိုး။
ခရစ်ယာန်သာသနာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ အလွန်မှာ မြောက်ဥရောပ ပရိုတက်(စ)တင့် ခရစ်ယာန် နိုင်ငံတွေက ဆေးပညာနဲ့သမားတော် အမှတ်တံဆိပ်တွေ လက္ခဏာတွေကို ပြောင်းကြပြန်တယ်။ အက်(စ) ခလေးပီးယပ်(စ)နဲ့ သူ့သမီးဟိုင်ဂျီယာတို့ကို ဆေးပညာ၊ သမားတော် အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် ပြန်ပြောင်း သုံးစွဲ ကြပြန်ရော။ တုတ်ချောင်းကို ရစ်ခွေနေတဲ့ မြွှေတစ်ကောင် ပြန်လည်အသက်ဝင်ခဲ့ပေါပ။ ဥရောပနိုင်ငံတော် တော်များများမှာ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုပဲ ဆေးပညာ၊ သမားတော်တံဆိပ်အဖြစ် ယခုအချိန် ထိ နှစ်နှစ် သက်သက် စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးစွဲနေဆဲပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာလည်း အရပ်သားဆေးဖက် အဖွဲ့အစည်းမှာရော ဆေးတပ်မှာပါ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုပဲ လက်ခံ သုံးစွဲခဲ့ကြတာပါ။ ၁၈၁၈ ကတည်းက အမေရိကန်တပ်မတော် ဆေးပညာဌာနက ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကို ဆးတပ်ဖွဲ့ တံဆိပ်အဖြစ် သုံးစွဲခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ ၁၉၀၂ ခု ကျကာမှ အမေရိကန်ဆေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တံဆိပ် ဟာ မြွေ တစ်ကောင် တုတ်တစ်ချောင်းဘ၀က စုတေပြီး မျြွေနှစ်ကောင် တုတ် တစ်ချောင်း တောင်ပံ တစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ မြွေတစ်ကောင်တံဆိပ် ဟာ မြောက်အမေရိကမှာ အဲဒီအချိန်ကစပြီး နိဂုံးကမွတ် အသုံးသတ် သွားလေရဲ့။
မြွှေနှစ်ကောင်၊ တောင်ပံတစ်စုံ၊ တုတ်တစ်ချောင်း ဆေးလောကထဲ ၀င်ရောက်လာခြင်း
မြွေနှစ်ကောင်က တုတ်တစ်ချောင်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ရစ်ခွေနေပြီး တုတ်ရဲ့ထိပ်နားမှာ တောင်ပံတစ်စုံနဲ့ လှပနေ တဲ့ လက်စွဲတော်တောင်ဝှေးကလည်း ရာဇ၀င်နဲ့ဗျ။ ကာဒူးစီးယပ်(စ)လိုပခေါ်သတဲ့။
အဲဒီတောင်ဝှေး က ဇုနတ်မင်းကြီးနဲ့ မိဖုရားမိုင်ယာရဲ့သား ဟားမီး(စ)ကိုင်တဲ့ တောင်ဝှေးပါ။ သူ့ကို ရောမတွေက မာကျူရီနတ်သား လို့ သိမှတ်ကြတယ်။ သူ့တောင်ဝှေးက ချစ်စရာ။ မြွှေတစ်ကောင် အစား မြွေ နှစ်ကောင် မျက်နှာချင်း ဆိုင်နေတော့ ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ ဟန်ချက် ညီတယ်။ အချိုးကျတယ်။ တုတ်ချောင်း ထိပ်မှာလည်း ဘုလေးနဲ့။ တုတ်ချောင်းက သပ်သပ် ရပ်ရပ်။ ချောချော မွတ်မွတ်။ ဘုအောက်နား ကပ်ရက် တောင်ပံတစ်စုံကလည်း ငွားငွားစွင့်စွင့်။
ဟားမီး(စ)က သတင်းပို့ရတဲ့။ သတင်းသယ်ရတဲ့ တမန်တော်လို့ သိမှတ်ကြသမို့ သူကိုင်ဆောင်တဲ့ ကာဒူးစီးယပ်(စ) ကို ဥရောပတစ်ဝန်း ပုံနှိပ်တိုက်တွေက သူတို့ပုံနှိပ်တိုက်ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် (Logo)အဖြစ် ယူသုံးကြ တယ်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံး သုံးတဲ့ပုံနှိပ်တိုက်က ဆေးစာအုပ်တွေ အဓိကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ လန်ဒန်က ချာချီ(လ) ပုံနှိပ်တိုက်ပါ။
မျြွေတစ်ကောင် က ဆေးပညာ၊ မြွေတစ်ကောင်က စာပေအနုပညာ။ ဒီနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပေးရမယ်ဆိုတာ ချာချီ(လ) ပုံနှိပ်တိုက်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသတဲ့။ သူတို့ တိုက်က ရိုက်ထုတ်တဲ့ ဆေးကျမ်းတွေက အမေရိက တိုက် ကို အများဆုံး တင်ပို့ရသတဲ့။ ကြာလာတော့ အမေရိကတိုက်ကလူတွေက ဆေးပညာနဲ့ မြွေနှစ်ကောင် ကိုတွဲတွဲပြီး မြင် လာရောတဲ့။ ၁၉ ရာစုကုန်ခါနီးမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပုံနှိပ်တိုက်တွေ ကလည်း မြွှေ နှစ်ကောင်နဲ့ ကာဒူးစီးယပ်(စ)ကို ဆေးပညာ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် လက်ခံ သုံးစွဲပြီး ဆေးစာအုပ်တွေမှာ ထည့်နှိပ်ကြသတဲ့။
အမေရိက မှာ မြွေနှစ်ကောင် ပိုလို့အခြေခိုင်သွားရတဲ့ အကြောင်းက အမေရိကန်တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီး ဖရက်ဒရစ်(ခ)ရေးနိုး(စ)ကြောင့် ပါ။ ၁၉၀၂ ခုနှစ် အမေရိကန်တပ်မတော်မှာ ယူနီဖောင်းတွေ အမှတ်တံဆိပ် တွေပြောင်းကြတော့ တံဆိပ် ရွေးချယ်ရေး ပွဲကြီးစတော့တာပေါ့။ ဆေးတပ်အတွက် တံဆိပ်ရွေးချယ် ရတဲ့ ဗိုလ်ကြီးရေးနိုး(စ)က အက်(စ)ခလေးပီယပ်(စ)သမိုင်းကြောင်းရော၊ ဟားမီး(စ)ရဲ့ ကာဒူးစီးယပ်(စ)ဋီကာ ပါ ဘာမှသိပုံမရဘူး။
ဒါနဲ့ သူက မြွေတစ်ကောင်တုတ်တစ်ချောင်း ပိုလို့လှပသပ်ရပ်ခေတ်မီတဲ့ ကြွရွနေ တဲ့မြွေနှစ်ကောင် တောင်ပံ တပ် တောင်ဝှေး ကို ဆေးတပ် တံဆိပ်အဖြစ် အထက်ကို တင်တယ်။ ဆေးတပ်ချုပ် (Surgeon-General)ဖြစ်တဲ့ စတန်းဘတ်(ဂ)က ဒီတံဆိပ်ကို လက်မခံဘူး။ ရေးနိုး(စ)က အခါခါတင်သော်လည်း အခါခါ ပယ်တယ်။ ဆေးတပ်ချုပ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဖောဝု(ဒ)လက်ထက်ကျကာမှ ဒီတံဆိပ်ကို လက်ခံအတည်ပြုခံရ တာ။ ၁၉၀၂ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်မှာ ဆေးတပ်အားလုံးရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် မြွေနှစ်ကောင်နဲ့ တောင်ံတပ် တောင်ဝှေးဟာ တရားဝင် အမှတ်အသား အဖြစ် ရပ်တည်လာလိုက်တာ ယနေ့ထိပဲ။ ဆေးတပ်ချုပ်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်မှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး မက်(ခ)ကူးလော့(ခ)က ဒီတံဆိပ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း အရာမထင်ခဲ့ဘူးတဲ့။
ဘာကြောင့် မြွေနှစ်ကောင် မဖြစ်သင့်သလဲ
မြွေနှစ်ကောင်တောင်ဝှေးရှင် ဟားမီး(စ)ဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဥာဏ်ကောင်းသလောက် အကျင့် မကောင်းသူ ပါ။ သူ့”ဇ” ကိုမွေးကတည်းက စပြတယ်။ သူ့ကို နံနက်အရုဏ်တက်မှာ မွေးတယ်။ ညနေစောင်းရောက်တော့ သူက ပုခက်ထဲကနေ တိတ်တိတ်လေး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး ထွက်သွားတယ်။ သူနဲ့ ဖအေ တူ မအေကွဲအပိုလိုနတ်မင်းရဲ့ နွားတွေကို သွားခိုးယူပြီး ဂူထဲ ၀ှက်ထားဖို့တဲ့။ ခိုးနွားထဲက နှစ်ကောင်ကိုသတ်၊ အမွေးတွေကို ကြိုးကျစ်။ လိပ်တစ်ကောင်ကိုသတ်။ အခွံကိုယူ။ လိပ်ခွံမှာ ခုနင်က ကြိုးတွေတပ်ပြီး လိုင်ရာခေါ်တဲ့ ဗျပ်စောင်းတူရိယာတစ်ခု ထွင်လိုက်သတဲ့။
အပိုလိုက သူ့နွားတွေ အခိုးခံရတဲ့အကြောင်းသိတော့ ဟားမီး(စ်)ရဲ့အမေ မိုင်ယာကို သွားတိုင်တယ်။ မိုင် ယာက ပုခတ်ထဲက “အပြစ်ကင်းစင်”တဲ ဟားမီး(စ)လေးကို ပြသတဲ့။ ဟားမီး(စ)ရဲ့ ဗျပ်စောင်းကို တီးခတ် ရာက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဂီတသံကို နှစ်ခြိုက်စွဲလမ်းမိတဲ့ အပိုလိုဟာ အဲဒီဗျပ်စောင်းကို သူ့နွားတွေအတွက် လျော်ကြေးအဖြစ် လက်ခံလိုက်သတဲ့
ဟားမီး(စ)ဟာ နွားကျောင်းသားတွေမှုတ်တဲ့ ပလွေကိုလည်း တီထွင်ခဲ့သေးသတဲ့။ အဲဒီပလွေကိုလည်း ဂီတ ချစ်တဲ့ အပိုလိုနတ်မင်းက လိုချင်ပြန်ပါရော။ ဒါနဲ့ နွားတွေ ထိန်းကျောင်းရာမှာသုံးတဲ့ သူ့ရွှေတောင်ဝှေးကို ဟားမိး(စ) ရဲ့ ပလွေနဲ့ အလဲအထပ် လုပ်လိုက်သတဲ့။ အဲဒီတောင်ဝှေးက ကားဒူးစီးယပ်(စ)ပဲပေါ့။ ဒီတောင်ဝှေးက အပိုလိုရဲ့ အဆိုအရ “ကြွယ်ဝခြင်း၊ အလျှံပယ်ခြင်းတို့ရဲ့ သင်္ကေတ၊ ထာဝရတည်တဲ့အရာ၊ ကိုင်ဆောင်သူကို ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကာကွယ်လိမ့်”တဲ့။
ဟားမီး(စ)ရဲ့ တာဝန်တွေထဲက အဓိကတာဝန်က ဇုနတ်မင်းကြီးရဲ့ ခြေမြန်တော်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ရတာ ပါ။ နတ်ဘုရားတွေရဲ့ ရှေ့တော်ပြေးလည်း ဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်လည်း ဖြစ်သတဲ့။ ရန်ဖြစ် နေတဲ့မြွေနှစ်ကောင်ကြား သူ့တောင်ဝှေး ပစ်ပေါက်လိုက်တော့ မြွှေနှစ်ကောင်က သဟာယဖွဲ့ပြီး သူ့တောင်ဝှေးမှာခွေဖွဲ့နေလိုက်လို့ သူ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးသယ်ဆောင်သူလို့ သတ်မှတ်ကြတာ။ ဒီအထိကတော့ ဟားမီး(စ)ရဲ့ ကာဒူးစီးယပ်(စ)ဟာ ဆေးပညာရှင်တွေ သမားတော်တွေအတွက် ကိသ ကအောက်ဖြစ်စရာ မရှိလှပါဘူး။ ခြေမြန်တော်ဗျာ။ ရှေ့တော်ပြေးဗျာ။ ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်ဗျာ။
ပြဿနာက ဟားမီး(စ)ရဲ့ တခြားတာဝန်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေက သိပ်အကြောင်းမလှပေဘူးဗျ။ သူက သူခိုး သူဝှက်တွေ၊ ကုန်သည်တွေ၊ ခရီးသွားတွေရဲ့ နတ်လည်းဖြစ်သတဲ့။ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ၊ ထီဆိုင်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့နတ်လည်းဖြစ်သတဲ့။ လျှာကို အစိုးရတဲ့နတ်လည်း ဖြစ်သတဲ့။ သူ အစိုးရတဲ့လျှာက ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော ပြောတတ်သတဲ့။ လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ပြောရရင် ဟားမီး(စ)ဟာ လူရည်လညလွန်းသူပေါ့။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောရရင် တော့ဥာဏ်များလွန်းသူ ဖျံကျလွန်းသူလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
တချို့က သူ့ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မစတဲ့ နတ်အဖြစ် ကိုးကွယ်ကြပြီး ဒင်္ဂါးတွေ ပြည့်တင်းဖောင်းကားနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်ပြီး လျှောက်သွားနေပုံသရုပ်ဖော်ကြတ်။ ဒီမှာတင်ကို ဆေးပညာနဲ့ သမားတော်လုပ်ငန်းနဲ့ ဒီနတ်နဲ့က ၀ိရောဓိဖြစ်နေပြီ။
ဆေးပညာနဲ့ ဒီထက် ပဋိပက္ခဖြစ်စရာက ဒီနတ်က သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို ငရဲပြည်ပို့ရတဲ့ လမ်းပြဖြစ်သတဲ့။ သမားတော်တွေက လူနာတွေကို ဒီဘက်ကမ္ဘာပါအောင် ဆွဲနေချိန်မှာ ဒီနတ်က လူတွေကို ဟိုဘက်ကမ္ဘာဘက်တွန်းတွန်းပို့နေသတဲ့ဗျ။ သူခိုးသူဝှက်၊ ကုန်သည်ပွဲစားတို့ရဲ့နတ်၊ ရွှေဖြစ်ငွေ ဖြစ်နတ်၊ လူလိမ်လူကောက် လောင်းကစားသမားတွေရဲ့ဘုရင်၊ ငရဲလမ်းပြသခင်။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးပညာနဲ့၊ သမားတော်နဲ့ နည်းနည်းမှ မအပ်စပ်ချေတကား။
၁၉၉၂ အမေရိကန် ကျန်းမာလရေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို စစ်တမ်းကောက် ကြည့်တော့ ပညာရပ်အဓိက၊ ပညာရှင်အဓိက အဖွဲ့အစည်းတွေက မြွေတစ်ကောင် တုတ်တစ်ချောင်း [ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ)တုတ်ချောင်း]ကို သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် သုံးစွဲကြတာများသတဲ့။ (၆၂ ရာခိုင်နှုန်း)။ စီးပွားရေးဆန်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ (ဥပမာ-ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ) ကတော့ မြွေနှစ်ကောင်နဲ့ နှင်တံပျံ [ကာဒူးစီးသပ်(စ)]ကို အသုံးများတာ တွေ့ရသတဲ့။ (၇၆ ရာခိုင်နှုန်း)။ ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ဆေးပညာအမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီး သုံးကြတာကိုး။ အစဉ်အလာ လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ သမိုင်းကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြတာကိုး။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO)အမှတ်တံဆိပ်မှာလည်း မြွေတစ်ကောင်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အမှတ်တံဆိပ်ကလည်း မြွေတစ်ကောင်ပဲ။ စီးပွားရေးဆန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မငလုပ်ငန်းတွေကတော့ စားသုံးသူတွေ၊ သုံးစွဲသူတွေ ရင်းနှီးမျက်မှန်းတန်းမိနေတဲ့ မြွေနှစ်ကောင် (Logo)အမှတ်တံဆိပ်ကို ပိုကြိုက်ကြတယ်လေ။
ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းတွေရဲ့ Logo ကကော ဘယ်လိုလဲ။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးဆေးကျောင်းရော ရန်ကုန်ဆေး (၁)၊ ဆေး(၂)ပါ မြွေနှစ်ကောင် ပဲဗျ။ ဆေး(၁)တံဆိပ်က တုတ်တိုင်ထိပ်မှာ မီးတောက်ကလေးပါ ပါလိုက်ချေသေး။ ဆေး(၂)တုတ်ချောင်းကတော့ အတောင်ပံနဲ့။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေက ၁၉၆၄ တက္ကသိုလ် ပညာရေးစနစ်သစ်စတုန်းက အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ ထင်ပါရဲ့။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေ ကို ပြန်စိစစ်ဖို့ လိုပါပြီ။ သမိုင်းကြောင်းအရ ခိုင်မာတဲ့ ဆေးပညာရဲ့ ရည်မှန်းရာနဲ့ ဆေးပညာရှင်နဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတ့ အက်(စ)ခလေးပီးယပ်(စ) တံဆိပ် ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး၊ ရိုရိုသေသေလက်ခံဖို့။ ယခုလို စီးပွားဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ လှိုင်လှိုင်ဖွံ့ ဖြိုးနေချိန်မှာ ကြွယ်ဝမှု၊ စီးပွားရေးဆန်မှုတို့ရဲ့သခင် နတ်ဘုရင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကာဒူးစီးယပ်(စ)မြွေနှစ်ကောင် ကို စွန့်စ်ဖို့ ပို၍ ပို၍ လိုအပ်လှသည်ဖြစ်ကြောင်းကို ...
စာညွှန်း ။ Wilcox RA, Whitham EM(2003). "The Symbol of Modern Medicine: Why One Snake is More Than Two. Ann Intern Med. 138:673-677.
ရွက်နုဝေ၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၉
ကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေ ကသာနှင့် အဖေ့မွေးရပ်မြေ အင်းတော်က မိုင် ၂၀ ပျော့ပျော့သာဝေးသည်။ မြို့နှစ်မြို့ ကြား ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းရှိသည်။ ရထားလမ်းက ကသာမှ နဘား၊ နဘားမှ အင်းတော် အဆင့်ဆင့် သွား ရသည့်ပြင် နဘားမှာ မီးရထားပြောင်းစီးရသေး၍ ဤလမ်းကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ဒေသကလူတွေ အသုံးပြုလေ့မရှိ။ ကားလမ်းပဲသုံးကြတာ။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ် ၁၉၆၀-၇၀ တစ်ဝိုက်က ကသာ-အင်းတော်ကားလမ်းက လမ်းကလည်း မကောင်း၊ ကားတွေကလည်း မီးကျိုးမောင်းပျက်၊ စစ်ကျန် ကားဟောင်းကြီးတွေကို သနပ်ခါး လိမ်းထားတာ။
ကသာ-အင်းတော် ခရီးက ပုံမျန် ၄ နာရီကျော်ကျော်လောက် ကြာသည်ဆိုလျှင် ဒီခေတ် လူငယ်တွေ နှာခေါင်း ရှုံ့ကြမည်။ ဒါတာင် ကံကောင်းမှ ၄ နာရီနဲ့ ရောက်တာ။ ကံဆိုးလို့ လမ်းမှာ ကားပျက်ခဲ့ရင် သွားပေ ရော့။ ၆ နာရီကျော်ကျော်။ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲစီး။ ညနေ ၄ နာရီတစ်ဝိုက် ခရီးဆိုက်ခဲ့ရင် သင် အတော်ကံထူး သူဖြစ်လိမ့်မည်။
ကသာ-အင်းတော်ကားလမ်းမှာ ပြေးဆွဲကြတဲ့ကားက သုံးလးစင်းသာ။ ကားတွေက အချိန်ဇယားမရှိ။ ခရီး သည်ရှိသရွေ့ စောင့်တင်။ ဘယ်အချိန် ကားထွက်မလဲ သွားမမေးလေနှင့်။ ခရီးသည်စုံလျှင်၊ ကုန်တွေ ပြည့်လျှင် ထွက်လိမ့် မည်။ ကားပိုင်ရှင်တွေက ကသာနှင့် အင်းတော်က။ ကသာကားပိုင်ရှင် ဦးကြီးလှိုင်က ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက် တစ်လမ်းတည်းသား။ သူ့ကားက နာမည်ကြီး။ လမ်းမှာ ခဏခဏ ပျက်လွန်လွန်၍ "ဦးကြီးလှိုင်ကား စီးလို့ ကတော့ ထမင်းချိုင့်ဆောင်သွား" ဟုခရီးသွားချင်း ပြောစမှတ်ပြုကြရသည်။ လမ်းမှာက ရွာလေး တစ်ရွာစ နှစ်ရွာစပဲ ရှိတာ။ ၀ယ်စားစရာ ဘာကမှမရှိ။ နတ္ထိ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ။ ကိုယ့်ရိက္ခာ ကိုယ်သယ်။
ကျွန်တော်ငယ်စဉ် က အဖေ့ဆွေမျိုး တွေရှိရာ အင်းတော်ကို အလည်လိုက်သွားလေ့မရှိတာကြောင့် ဦးကြီး လှိုင်ကားနှင့် ကျွန်တော် ဘာမှ ပတ်သက်စရာ မရှိ။ သို့သော်လည်း ဦးကြီးလှိုင်၏ သားသမီးတွေနှင့် ကျွန်တော် ရေစက်ဆုံပုံကို ပြောရဦးမည်။
ဦးကြီးလှိုင်သမီးငယ် မခင်တုတ်က ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းနေဖက်။ သူက မိန်းကလေးပေမယ့် သွားရင် လာရင် ဒေါင်းတိမောင်းတိ ယောက်ျားကြီးနှင့် တူလှသည်။ စာတော့ သိပ်မတော်။ ကျွန်တော်နှင့်ခင်သည်။ "မောင်အောင်ကြီး၊ မောင်အောင်ကြီး" ဟုခေါ်တတ်သည်။
မခင်တုတ် တို့အိမ်ရဲ့ ထူးခြားမှုက သူတို့မောင်နှမတွေ အားလုံးလိုလို အားကစားဝါသနာကြီးခြင်း။ အစ်ကိုကြိး ကိုသန်းအာင် က အလျားခုန်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကျ။ သူ့နှမ နုနုရီက ကသာရေကူးချန်ပီယံ။ တာလတ် အပြေးချန်ပီယံ။ ၁၉၆၈ အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲ တာလက်ပြေးမှာ ရွှေတ့ဆိပ်ရ သည်။ မခင်တုတ် ကတော့ သူလိုကိုယ်လို အားကစားဝါသနာရှင်။ ဆုတွေဘာတွေရသည် မကြားစဖူး။
သူတို့အိမ်က ကသာတောင်ပိုင်းရပ်ကွက် ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေရဲ့စုရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဆိုလျှင် သူတို့ အိမ်ဝင်းထဲဝင်၊ အိမ်အောက်ထပ် လူပျိုခန်းထဲထိ ၀င်ရောက် စူးစမ်းဖူးသည်။ ကိုသန်းအောင်တို့နှင့် ဆွေမကင်း မျိုးမကင်း လူပျိုကျောင်းသားကြီးတစ်ဦးနေသည့်အခန်း။ သူ့နာမည်က ကိုအေးကို။ တစ်ခါက သူ့အခန်းနံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ တစ်ကြောင်းဆွဲ ပုံတူကားတစ်ချပ် တွေ့ရသည်။ မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းဘေး တိုက်ပုံ။ မုတ်ဆိတ် တိုတိုချွန်ချွန်နှင့်။
" ဟ ... လီနင်ပုံပါလား " ဟု ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လွှတ်ခန အော်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်က ၅ တန်း ကျောင်းသား အရွယ်။ ကိုအေးကိုက ၉ တန်း၊ ကျောင်းသားကြီး။ သူက ကျွန်တော့်ကို အံ့အားတသင့် ကြည့်လိုက်ပြီး -
" မင်း သိသားပဲ။ မင်း ဘယ်လိုသတာတုံး" တဲ့။
ကျွန်တော့် အတွက် ဒီပုံက မြင်ဖူးတာ ဖန်တစ်ရာမက။ အဖေက ဆိုဗီယက် ယူနီယံစာစောင် လစဉ်ပုံမှန် ယူတာဆိုတော့။ ဆိုဗီယက်ရုရှားကို ကြိုက်လွန်းလွန်း၍ အဖေ ဒီစာစောင်တွေကို မှာယူဖတ်ရှုနေသည်ဟု ကျွန်တော်မထင်။ ဒီစာစောင်တွေက အလကားပဲတင်းရတာကြောင့်ဖြစ်မည်။
ကိုသန်းအောင်တို့ အိမ်ရှေ့မှာ ဗရင်ဂျီဘာသာဝင်တွေရဲ့ ၀တ်ကျောင်းရှိသည်။ ၀တ်ကျောင်းက သိပ်မကြီးလှ သော်လည်း ၀င်းကြီးက ကျယ်မှကျယ်။ (ကလေးမျက်စိနဲ့)။ ညနေခင်းတိုင်းလိုလို ကျောင်းဆင်းရင် ကျွန်တော်တို့ ကျက်စားရာနယ်မြေ။ ကစားနည်းမျိုးစုံ ကစားကြ။ ရန်ဖြစ်ကြ။ စိတ်ကောက်ကြ၊ ပြန်ခေါ်ကြ။ သို့သော်လည်း ကိုသန်းအောင် ရှိနေသရွေကတော့ ရန်ပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဖြစ်စရာမရှိ။
ထိုစဉ်တုန်းက ကိုသန်းအောင်မှာ အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်ပဲ ရှိဦးမည်။ သို့ပေမဲ့ သူဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဧရာမလူကြီး။ သူ့လက်မောင်းအိုးတွေက တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်။ ကြွက်သားတွေနဲ့ တင်းရင်းလို့။ ခါးကသေးသေး။ ခြေသလုံးကြွက်သားတွေက အချိုးကျကျ ဖွံ့ဖြိုးလို့နေ။ သူ့ကိုယ်မှာ အဆီပိုမရှိ။ သူက ဆယ်တန်းကျောင်းသားကြီး။ မျက်နှာက ပြုံးချိုသော်လည်း တည်တည်ကြည်ကြည်။ အားလုံးနှင့် အရော တ၀င်နေတတ်သည်။ သို့သော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ပိုပိုသာသာ အရေးပေးလေ့မရှိ။ မိန်းမပျိုတွေနှင့်လည်း သိပ်ရင်းရင်းနှီးနှီး ပရေပရီနေတာ မတွေကရ။ သူရှိရင် ကလေးတွေပျော်သည်။ သူကိုယ်တိုင် ကလေးတွေ အတွက် ကစားနည်း မျိုးစုံ ဖန်တိးပေးလေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့ သူက မျှတသော ဒိုင်လူကြီး။
တစ်ခါ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်ကြီးစတော့ ကျွန်တော် ကျောင်းကအပြန် လွယ်အိတ် ဗုန်းခနဲပစ်ချ။ အ၀တ် အစား အပြေးအလွှားလဲ၊ ရေတ၀သောက်ပြီး၊ ကိုသန်းအောင်တို့အိမ်ရှေ့ ကစားကွင်းကြီးဘက် ပြေးထွက်ခဲ့။ ပါးစပ်က "မီးပွင့်အောင် ဆော့မဟေ့" လို့ အော်ဟစ်ကြုံးဝါးခဲ့တာ သတိရမိသေးတော့။
ကိုသန်းအောင်က ကလေးတွေအတွက် ကစားပွဲတွေသာမက ပြိုင်ပွဲတွေပါ ဖန်တီးပေးလိုက်သေးသည်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှန်သမျှ သူ့အိတ်ထဲက စိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ။ ဟိုတုန်းက သတိမထားမိခဲ့။ ယခု ကြီးလာမှ ဒီအချက်ကို စဉ်းစားမိသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေ အားလုံးလိုလို ဆုရကြ သည်။ ကစားစရာ အရုပ်လေးတွေ၊ စားစရာချိုချဉ်နဲ့ မုန့်လေးတွေ၊ ရောင်စုံခတံ ခဲဖျက်လေးတွေ။ အမယ်စုံ။ ပြိုင်ပွဲတွေကလည်း စုံသလားမမေးနှင့်။ တစ်ဦးချင်း ယှဉ်ရတဲ့ပွဲရော၊ အုပ်စုလိုက် ပြိုင်ရတဲ့ပွဲရော။ ညာဉ်သုံး ရတဲ့ပွဲရော။ ကံသုံးရတဲ့ပွဲရော။ မုန့်စားပြိုင်ရတဲ့ပွဲရော။ စုံမှစုံ။
ကျွန်တော်လည်း ပွဲတိုင်းလိုလို ၀င်နွှဲလိုက်တာပဲ။ အရှုံးမှ မရှိတာ။ ကျွန်တော့် အားကစားစွမ်းရည်ကလည်း အများမနာလိုစရာ။ လူက ပိန်ပိန်ပါးပါး၊ အပြေးကလည်းဝါသနာပါလေတော့ အပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်စမ်း ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်လို့ မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး အပြေးပြိုင်ပွဲတိုင်းလိုလို ကျွန်တော် ၀င်ပြိုင်ဖြစ်သည်။ ဘာဆုမှမရ။ ဘာနံပါတ်မှမချိတ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြေးကောင်းလှထင်နေတာ။ တကယ်ဝင်ပြိုင်လိုက် တော့ ကိုယ့်ထက် ပြေးနိုင်သူချည်း။ ဒီလူတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်လျင်မြန်ဖျတ်လတ် သန်စွမ်းနေပါလိမ့်။
သူငယ်ချင်းနှင့်အတူ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ပုဆိုးနှင့် ပူးချည်ပြီး သုံးချောင်းထောက်ပြေးရတဲ့ပွဲ ၀င်ပြိုင်တော့ ဟုတ်မလိုလိုနှင့် တာမှစထွက်ပြီး မကြာခင် နှစ်ယောက်သား လဲကျ လိုက်တာ တော်တော်နှင့် ပြန် မထနိုင် တော့။ ပြန်ထပြေးတော့ အားလုံး ပန်းဝင်သွားကြပြီ။
ဂုန်နီအိတ် ထဲ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဝင်ပြီး ခုန်ဆွခုန်ဆွ ပြေးပြိုင်ပွဲဝင်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း အလဲလဲ အကွဲကွဲ။ ကစားကွင်းမြက်ခင်းက ထူထူမို့တော်ရော့သည်။
တန်းမြင့်ခုန် ၀င်ပြိုင်တော့လည်း သူများတကာ ခုန်နိုင်သလောက်တောင် မနည်းခုန်ယူရသည်။ သူတို့ တစ် တွေက "၀က်ရှင်ထိုး" လို့ခေါ်တဲ့ မှောက်ရက်ကလေး၊ ရှေ့ခြေထောက်ကို တန်းလွတ်ရုံကျော်၊ ကျန်တဲ့ခြေ ထောက်ကို တန်းနှင့်ကပ်လျက် သီသီလေးသိမ်းပြီး ခုန်သွားလိုက်ကြတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီလို လည်း မခုန် တတ်ပြန်။
အလျားခုန်ကျတော့လည်း နောက်ပြန် ပြန်လန်ပြီး လက်ထောက်ရက်သားကျတတ်သမို့ တွင်းနှုတ်ခမ်းနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာပဲ စခန်းသိမ်းရသည်က ခပ်များများ။ ၀ါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမီသော်ငြား ၀ါသနာမီးခဲ တရဲရဲ နောက် မိမိ၏ ရူပက္ခန္ခာကမလှိုက်နိုင်လေတော့ သူများတွေ ဆုရတာကိုပဲ ငေးကြည့်သွားရည်ကျ။ ဇွတ်အတင်းဝမ်းသာပြရ။
ဒီချိုချဉ်လေးတွေက အိမ်မှာလည်း ရှိတာပဲ။ ဘာဆန်းသလဲ။ ဆန်းတယ်ဗျ။ ဒီကစားကွင်းထဲက ချိုချဉ်က ပိုလို့ချိုတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ရဲ့ အောင်သေအောင်သား မျှဝေသော်ငြား ကျွန်တော့်မှာ တစ် ခုခုလိုနေသလိုလို။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုက ကံပြိုင်ပွဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ မျက်စိကို အ၀တ်အထပ်ထပ်ကျပ်ကျပ်စည်း။ ကိုယ်ကို လေးငါး ဆယ်ပတ် မူးလောက်အောင် လှည့်ပြီး တုတ်တစ်ချောင်း လက်ထဲထည့်လိုက်ရုံ။ တာထွက်ရာနဲ့ ခပ်လှမ်း လှမ်းမှာ ရေနံဆီ ထည့်တဲ့ သံပုံးတစ်ပုံး ထောင်ထားသည်။ အဲဒီသံပုံးကို တုတ်နှင့်ရိုက်နိုင်ရင်ပြီးပြီ။ ကျွန်တော့် ရှေ့က ဘယ်သူမှ ပုံးကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မရိုက်ခိုင်ခဲ့။
ဒီပွဲတော့ ကျွန်တော်ဝင်နွှဲမှ။ ဒါက ကျွန်တော့်လို အဖြစ်မရှိသူတွေအတွက် သက်သက်ဖန်တီးထားသည့်ပွဲ။ လက်လွှတ်ခံ လို့ မဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အလှည့်မှာ ကိုသန်းအောင် ကိုယ်တိုင် မျက်စိကို အ၀တ်ထူထူစည်း ပေးပြီး ကိုယ်ကို ချာလပတ်မွေ့လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လက်ထဲ တုတ်တစ်ချောင်းထည့်လိုက်သည်။ ရေနံဆီ ပုံးရှာရိုက်ပေရော့ ကိုယ့်လူရေ။
ဘေးပွဲကြည့်ပရိသတ်က သံပုံးက ဒီဘက်မှာကွ။ မဟုတ်ဘူး ဟိုဘက်မှာစသဖြင့် ကျွန်တော့်ကို လမ်းမှာအောင် အမျိုးမျိုးသွေးဆောင် ဖြားယောင်းကြ။ ဆူဆူညံည့ အော်ဟစ်ကြ။ သူတို့မသိလိုက်တာက ကျွန်တော့်မျက်လုံးကို အ၀တ်စည်းရာမှာ ဘ်လိုကဘယ်လို ချွတ်ချော်သွားလေသည်မသိ။ ကျွန်တော့်မျက် လုံးတွေက အ၀တ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီး အပြင်ကအရာတွေအားလုံးမြင်နေရလေသည်။ အစပထမတော့ ခပ် တည်တည် ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပေါ့။ သံပုံးနဲ့ တခြားစီ။ အားလုံးတ၀ါးဝါး။ တ၀ုန်းဝုန်း။ တရုန်းရုန်း။ သဘောတွေ ကျ။ နောက်ဆုံးအချိန်စေ့ခါမီးမှ သံပုံးနား မယောင်မလည် ရောက်သွားသလိုလိုပုံစံချိုးပြီး သံပုံးကို အားရပါးရ တုတ်နှင့် ရိုက်ချလိုက်သည်။ အားလုံး ၀ိုင်းသြဘာပေးကြ။ ကျွန်တော် အခုမှ ချိုချဉ်စားရ တော့သည်။ ချိုချဉ်က ချိုမှချို။
ကလေးတုန်းက အများနည်းတူ ပြိုင်ပွဲဝင်လျှင် နိုင်ချင်တာပဲရှိသည်။ တရားသလား မတရား သလား မသိ။ သေချာတာက ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထိုစဉ်ကပျော်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ထိုပျော်ရွှင်မှု အပေါင်း၏ မြစ်ဖျားခံရာ ကိုသန်းအောင်ကို အခုတစ်လောသတိရမေမိသည်။ ကျွန်တော် ၇ တန်း ၈ တန်းရောက်တော့ ဆောင်းတွင်းနံနက်တိုင်း ကိုသန်းအောင်တို့နှင့်အတူ ကသာမြို့ ပတ်ပြေးကြ သည်။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုနှင့် ကိုမြင့်ဆွေလည်း ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်မောလို့ လိုက်မပြေးနိုင်ခဲ့ရင် ကိုသန်းအောင်နှင့် ကိုမြင့်ဆွေက ကျွန်တော့် လက်မောင်းတစ်ဖက်စီ စုံကိုင်ပြီး တွဲခေါ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော့်မာ တရွတ်တိုက် နီးပါး။ နံနက် ၄ နာရီခွဲ ၅ နာရီကြား ပြေးခဲ့ကြတာ။
ကိုသန်းအာင်က စိုက်ပျိုးရေးလို မြေကျေးရှင်လို ဌာနတစ်ခုမှာ စာရးဝန်ထမ်းဝင်လုပ်သည်။ လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ပဲ အသက် ၄၀ ၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာ ဆုံးပါးသွားသည်။ ဘာရောဂါနှင့် ဆုံးသွားမှန်းပင်မသိလိုက်။
ကျွန်တော် အသက်ကလေးရလာတော့မှ သူ့အကြောင်း စဉ်းစားရင်း သူ့ကျေးဇူးတွေကို တနုံ့နုံ့သတိရမိ သည်။ ငယ်သွေး ငယ်မာန်တွေ၊ အစွမ်းပြချင်စိတ်တွေ၊ ပြိုင်ချင်ဆိုင်ချင် အနိုင်ယူချင်စိတ်တွေနှင့် ဝေလျှံကျ နေသည့် လူငယ်တွေကို အားကစားနဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုးစုံနဲ့ မသိမသာ စည်းရုံးခဲ့တာ။ ပျော်ရွှင်စေခဲ့တာ။ ထွက်ပေါက် ဖွင့်ပေးခဲ့တာ။ လူငယ်တေါ မူးယစ်ဆေးဝါးဘက်၊ အရက်ဘက်၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဘက် ရောက် မသွားအောင်။ သူကိုယ်တိုင်က ၀င်ငွေသိပ်ရှိသူ မဟုတ်သည့်တိုင် ဒီပျော်ပွဲပြိုင်ပွဲကို အိတ်ထဲမှ စိုက်ထုတ် လုပ်ပေးသွားခဲ့တာ။ ကသာတောင်ပိုင်းက လူငယ်တွေရဲ့အပေါ်မှာ ကိုသန်းအောင်အကြွေး တင်နေပြီ။
ကျွန်တော့် အပေါ်မှာရော။ ကျွန်တော် သံပုံးရိုက်ပွဲမှာ ဆုရခဲ့တာ သူ့ဇာတ်ညွှန်းများလားဟု ခုမှ အတွးဝင်မိ ရသည်။ ကျွန်တော်က ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘာလုပ်လုပ် အလေးအနက် လုပ်တတ်သူ။ အားကစားပွဲတွေမှာ ကျွန်တော် အသေအကျေလုပ်ခဲ့တာ သူသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဘာဆုမှမရ၍ သိပ်ငယ်စိတ်ရှက်စိတ်နှင့် မွှန်ထူနေသည့် ၅ တန်းကောင်းသားလေးရဲ့ အရောင်ဖျော့မျက်နှာ လေးကို သူ သတိပြုမိပေလိမ့်မည်။ ဒီကလေးအတွက် တစ်ခုခုတာ့ လုပ်ပေးဦးမှဟု သူအတွေးဝင်မိပေလိမ့် မည်။
ကျွန်တော့် မျက်စိကို သူကိုယ်တိုင် အ၀တ်စည်းပေးခဲ့တာ။ ခပ်လျော့လျော့ စည်းထားလို့။ ခပ်ပါးပါးစည်းထား လို့သာ ကျွန်တော် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်မည်။ ကျွန်တော့်လို ချာတိတ်တစ်ယောက် သည်လည်း ဆုတစ်ဆုတော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရသွားသည်ဟု အများက ထင်မြင် လက်ခံလာအောင် သူ ပရိယာယ်သုံးသွားခဲ့လေသည်လား။ ကျွန်တော့် သိမ်ငယ်ကြေမွစိတ်ကို လျော့ပါး လွင့်စဉ်စေလိုသည်လား။ ကိုသန်းအောင် ... ကျွန်တော့် အကြွေးက အစ်ကို့ အပေါ်ကြီးလှပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြွေးမဆပ်လိုက် ရဘူး ဗျာ။
ကိုသန်းအောင်၊ အစ်ကို ဟာ အညတြသန်းအောင် မဟုတ်ဘူး။ ကသာမြေသန်းအောင်။ ကျွန်တော့်အတွက် ကသာတောင်ပိုင်း က လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက် ခင်ဗျားဟာ မဟာသူရဲကောင်း။
ပန်းအလင်္ကာ၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၀
Posted by SHWE ZIN U at 7:47 AM3comments Links to this post